မငျးကွောငျ့ ဒါတှဖွေဈကုနျပွီ – My Blog
“ အဈကိုလေး ….” အိပျမပြျောပဲ မကျြလုံးကွောငျနသေော ကိုသကျအောငျ လနျ့သှားသညျ..။ “ ဟငျ…ပုံ့ပုံ့…မအိပျသေး ဘူး လား…..” ကှယျလှနျသူ ဇနီးသညျနှငျ့ ခဈြတငျးနှီးနှောခဲ့ပုံကလေးမြားကို ပွနျလညျ စမွုံ့ပွနျနသေော ကိုသကျအောငျ ရဲ့ ဘျောဒါ ကွီးက တငျးမတျနသေညျ..။ ပုံ့ပုံ့က အဲဒါကွီးကို တှဖွေ့ဈအောငျ တှလေို့ကျလသေညျ..။ “ မမသီ သားတှကေ အရမျးသေးပေါကျ တာပဲ……” ကိုသကျအောငျ မွငျသာအောငျ အနှီးနှဈထညျကို ကိုငျပွီး မွှောကျပွလိုကျသညျ..။ ကိုသကျအောငျ ကုတငျပျေါမှထကာ ပုံ့ပုံ့အနားသို့ လာခဲ့သညျ..။ ပုံ့ပုံ့ထံမှ သနပျခါးနံ့ သငျးသငျးလေးကို ဦးစှာ ရှူရှိုကျမိလိုကျရသညျ..။
“ ထားခဲ့လေ….မိုးလငျးတော့ ..ငါလြှျောလိုကျပါ့မယျ….“ “ အို….မဟုတျတာ….” ပုံ့ပုံ့က လကျကို ပွနျရုတျပွီး ပွောလိုကျသညျ..။ ဝတျထားသော ညဝတျအကငြ်္ီလေးအောကျမှ ရှရေငျနှဈမှာက အခုအခံမပါ လှတျလပျစှာ…လုပျရှားနကွေသညျ..။ ဖွူဝငျး နုနယျသော ပုံ့ပုံ့မကျြနှာလေးက တဈစုံတဈရာကို တောငျးခံနသေလို မော့ပေးထားသညျ..။ ကိုသကျအောငျ ရငျတှေ ပူလာသညျ..။ ဆီးခုံအထကျမှ ကငျြအောငျ့သလို ( လိုးခငျြလှနျးအားကွီး ) သော ဝဒေနာတဈရပျကိုလညျး ခံစားလိုကျရသညျ..။
“ ပုံ့ပုံ့….နငျ့ ကို…ငါ….ငါ လေ……..” “ အိုး…….ဖယျပါ….စညျးမရှိ..ကမျးမရှိ….မလုပျပါနဲ့……” ပုံ့ပုံ့ ဆတျခနဲ လကျကို ဆောငျ့ရုနျး လိုကျပွီး ထှကျသှားလတေော့သညျ..။ ခကျလိုကျတာ…ဒီဝဒေနာ…။ ဘာနဲ့ ကုစားလို့ရမှာလဲ…မိပုံ့ရယျ….။ သီရယျ….မောငျ့အဖွဈကို မွငျလှညျ့စမျးပါအုံးလား…မိနျးမ ရယျ…။ “ မောငျသကျအောငျ ..ခရီးထှကျမလို့…ဆို…….” “ ဟုတျကဲ့..ဒျေါလေး….ကနြေျာ့အ မရှေိတဲ့ ရှာကိုပါ….” “ ဟိုမှာ ဘယျလောကျကွာမှာလဲ…မောငျသကျအောငျ……”
“ အဆငျပွသေလိုပါပဲ….ဒျေါလေးရယျ…၊ သားတှကေို အမကေ မွငျခငျြနသေေးတယျ….၊ သီမရှိတဲ့ နောကျ တောမှာ လာနဖေို့ ချေါ နတော…” “ ဒါဆို…မောငျသကျအောငျ ဟိုမှာပဲ အခွစေိုကျတော့မှာပေါ့….ဟုတျလား…” “ အငျး…..ဆိုပါတော့..ဒျေါလေးရာ….” “ မငျးသားတှေ ပညာရေး လဲ ရှိသေးတယျနျော….မောငျသကျအောငျ…” “ ကနြျော မမေ့ပဈပါဘူး…စိတျခပြါ…..ဒျေါလေးရယျ…“ သင်ျကွနျရကျကွီးမှနျး ကိုသကျအောငျ အမှတျရသညျ..။ ပုံ့ပုံ့နှငျ့ အဖျောတဈစု ရပေကျခံ ထှကျရာမှ ပွနျလာကွသညျ..။ “ ဖဖေေ ရေ…သားသားတို့ကို ပွှတျအသဈတှေ ဝယျလာတယျ… ဒီမှာ….” ပုံ့ပုံ့က ဘယျသှားသှား ဘယျက ပွနျလာလာ ကိုသကျအောငျ သား နှဈယောကျအတှကျ ကစားစရာနှငျ့ မုနျ့တဈခုခုကတော့ ပါလာတတျစမွဲပငျ…ဖွဈသညျ..။
“ ဒီမှာ နငျ့အဈကိုလေးက သူ့ရှာပွနျတော့မလို့တဲ့….” “ ဟငျ…..ခလေးတှရေောလား….မမေေ…….” “ အေးပေါ့ဟဲ့…သူ့ခလေးတှေ ဘယျထားရကျခဲ့ပါ့မလဲ….မဟုတျတာ…” ပုံ့ပုံ့ ငိုငျတှတှေလေေး ဖွဈသှားရသညျ..။ သူငယျခငျြးမြားကိုပငျ နုတျမဆကျတော့ပဲ အိမျပျေါ သို့ ပွေးတကျလာသညျ..။ ကိုသကျအောငျတို့ သားအဖတှကေ ပွငျဆငျ ထုပျပိုးပွီးကုနျကွပွီ ဖွဈသညျ..။ “ သား…ကို ကွီး…အနျတီလေးနဲ့ နခေဲ့မလား…ဟငျ……..” “ဟငျ့အငျး…ဖကွေီးနဲ့ပဲ လိုကျသှားမှာ….သင်ျဘောစီးမှာနျော….ဖကွေီး….”
ပုံ့ပုံ့ နုတျခမျးလေး ပွတျထှကျလုမတတျ ကိုကျထားသညျ..။ စူးရှပွီး အဓိပ်ပါယျပွညျ့ဝသညျ့ အကွညျ့မြားနှငျ့လညျး ကိုသကျအောငျကို ကွညျ့သညျ..။ “ ဟငျး….ရပါတယျ….သှားကွပါ….သှားကွ..ခုသှားကွ……“ ကိုသကျအောငျ ရငျခှငျထဲမှ သားငယျလေးက လနျ့ ငိုသညျ..။ စူးစူးဝါးဝါး အျောဟဈလိုကျသော ပုံ့ပုံ့အသံက ဟိနျးတကျသှားသညျ..။ “ ဟဲ့….ဒီကောငျမလေး….ဘေးအိမျတှေ ကွားကုနျ ပွီ….ခကျတော့တာပဲ….” ဒျေါလေးက အပွေးအလှား လာဆူပွီး ပုံ့ပုံ့ကို အိပျခနျးထဲ ဆှဲချေါသှားသညျ..။
“ အဲဒါကွောငျ့ သမီးကို ပွောတာ….မမေတေို့ စီမံသလို နာခံပါလို့….” “ ဟငျး……ဝေးသေးတယျ…..အဈမသလေို့ ညီမကို ဆကျယူ တဲ့လူတှထေဲမှာ ကမြ အပါမခံနိုငျဘူး…. နပေစေ….ခလေးတှကေို လှမျးရလို့ သမီးအသဲတှေ ကှဲခငျြလဲ ကှဲပစေ…ဒီလိုမြိုးတော့ ဘယျတော့မှ မယူဘူး….” “ ဟာ…..တိုးတိုးလုပျစမျးပါ..ဟယျ… မယူခငျြလဲ နေ… ဘေးအိမျတှကွေားလို့ ရှကျစရာတှေ ဖွဈကုနျ မယျ….” ကိုသကျအောငျ အသံတှကေို ကြောခိုငျးပဈလိုကျသညျ..။
အိမျရှေ့၌ ချေါထားသော မာဇဒါလေးဘီးကားလေးက အဆငျသငျ့ ရောကျလာသညျ..။ ထိုငျတတျခါစ ကလေးငယျကို ဒရိုငျဘာအား ခဏခြီခိုငျးထားပွီး အထုပျအပိုးတှကေို ကားပျေါ ပဈ တငျပွီး သားကွီးကို လကျဆှဲကာ ပွေးဆငျးခဲ့ကွသညျ..။ နရေဈတော့ ပုံ့ပုံ့….နငျအမုနျးကွီးမုနျးတဲ့ လူတဈယောကျ နငျ့မကျြစိအောကျမှာ ဘယျတော့မှ မမွငျစရေတော့ပါဘူး… ပုံ့ပုံ့ရယျ…။ ရငျထဲမှာ တ စဈစဈ နာကငျြ ကိုကျခဲနလေသေညျ..။ သားကွီးက ဖွတျသနျးမောငျးနှငျသှားနသေော ကားမြားကို တာ့တာလုပျရငျး လိုကျပါလာ သညျ..။ သားငယျလေးကမူ ကားသံ ဟှနျးသံမြား ကွားတိုငျး ဖအလေ့ညျပငျး ကို တငျးတငျးလေး ဖကျထားတတျသညျ..။
လယေူရာ လှငျ့ရပအေုံးတော့မညျ…။ အရာခပျသိမျးရှလြေ့ားပွောငျးလဲနတောပဲ မဟုတျလား….။ ကိုသကျအောငျ ဆိုတာ ကလညျး လောကကွီးထဲက လူသားတဈယောကျပကေိုး…။ လောကဓံ တရားက ကြီစားခွငျးကိုတော့ ခံပအေုံးပေါ့…။ ကိုသကျအောငျ ဇာတိ မွေ မဟုတျသော ရှာကလေးက အမခေ့ကျြမွှုပျရှာဖွဈသညျ..။ လူမှနျး သိတတျစကတညျးက ရနျကုနျမှာ ကွီးပွငျးလာခဲ့ရ သညျ့အတှကျ တောရှာလေး၌ မွငျမွငျသမြှ သဈဆနျးနသေညျ..။ အျော…ဒုက်ခနှငျ့ ရငျဆိုငျရမှ မိဘအရိပျကို သတိရတတျကွလေ ခွငျးပါ…လား……။
“ ဒီမှာ….ခငျဗြာ…( ….) ရှာလေးကို ဘာနဲ့ သှားရမလဲ ..ခငျဗြာ…” “ ဟ…နအေုံး…တောရှာက လှညျးကွုံ ရှိတယျ….၊ ဟေ့ ခကျြ ဖောငျး…. ” တောရှာလေးမှ ထငျးလာခသြော လှညျးကွုံနှငျ့ ကိုသကျအောငျတို့ သားအဖတဈတှေ လိုကျလာကွရသညျ..။ သဈကွီးဝါးကွီး စိမျ့အေးနသေော ပတျဝနျးကငျြ၌ တဒင်ျဂ ငွိမျးခမျြးသာယာသော အရသာကို ခံစားရသညျ..။ “ ခလေးက ငယျငယျ လေးပဲ…မအကေရော…ဗြ….ကိုယျ့ဆရာ…” “ ဆုံးသှားတာ…တဈနှဈပဲ ရှိသေးတယျ…ဗြာ…တောမှာ အမရှေိတယျ…လေ…..” “ဘယျသူမြားတုနျးဗြ….ဟဲ့…အျော…ဒီနှား…“ “ ဒျေါနနျးအိမျပါ…သိလားဗြ…” “ဟား…သိပျသိပေါ့ဗြာ…. ဒါဆို ကနျြးမာရေးမှူးကို သကျမောငျနဲ့ ညီအဈကိုပေါ့..ဟုတျလား…၊ မွို့မှာ အဈကိုတဈယောကျရှိတယျပွောတာ ခငျဗြားကိုး…”
“ ကိုသကျမောငျက အငယျပါ…ဟုတျတယျ…ကနြျောက အကွီးလေ…” လှညျးက အမိုးတော့မပါ..၊ စောငျးကနြသေော နရေောငျ တှငျ ခြှေးပွနျနကွေသညျ..။ သားကွီးက လှညျးစီးရသညျကို အပြျောကွီး ပြျောနရှောသညျ..။ ရှာအဝငျ လှညျးလမျးက ဂဝံကြောကျ မြားနှငျ့ နိမျ့ဆငျးသှားသညျ..။ “ မွဲမွဲ ကိုငျထားဗြို့…ကြုပျနှားတှကေ ထိနျးရတာ နဲနဲခကျတယျ..” လှညျးသမား ခကျြဖောငျးက ပွောပွောဆိုဆို နဖားကွိုးကို တောငျ့ပေးရငျး လှညျးလမျးခြောကျအတိုငျး မောငျးခလြိုကျသညျ..။ ဝရုံးသုံးကားလေး ဖွဈသှား သညျ..။ “ ဗြိုး ဆရာလေး….မွို့က ခငျဗြားအဈကို လာသဗြို့….ပစ်စညျးတှနေဲ့…” ခကျြဖောငျးက အသံဝါကွီးနဲ့ အျောပွီး အိပျယာ လိပျ ၊ သတ်ေတာမြား ခပြေးသညျ..။ ကိုသကျနှငျ့ သူ့မိနျးမတို့ အပွေးအလှား ထှကျလာကွသညျ..။
“ ကိုကွီး သတငျးကွားပွီးကထဲက မြှျောနကွေတာ….” “သီ…ဆုံးဆုံးခငျြး လာဘို့ပဲ…ကိုသကျ…. ၊ သီ့ ဆှမြေိုးတှကေ ဆှဲထားလို့…” စကားတပွောပွောနဲ့ အိမျခွံဝိုငျးထဲ ဝငျလာခဲ့ကွသညျ…။ သရကျပငျအိုကွီးမြား ၊ ဝါးပိုးဝါးမြားကွောငျ့ နရေောငျမထိုးပဲ စိမျ့အေးနသေညျ..။ “ ဦး….ဦးရေ…ဦး….ဒီမှာ ရဒေီယိုလေး ကကြနျြခဲ့တယျ……” “ ဟာ…ဟုတျသားပဲ….ဘယျနားက တှတေ့ာ လဲ..သမီး..ဟငျ….” “ ရှာအဝငျ…လှညျးလမျးခြောကျထဲက….” ကိုသကျအောငျ ရဒေီယိုလေး ကမျးပေးနသေော မိနျးခ လေးမကျြနှာကို အမှတျမထငျ ကွညျ့လိုကျမိသညျ..။ ရငျထဲဝယျ ဒိနျးခနဲ ခုနျလှိုကျသှားရသညျ..။
“ ပုံ့ပုံ့နဲ့ တူလိုကျတာ….” ပုံ့ပုံ့ကဲ့သို့ မကျြခုံးလေးတှေ မှောငျနသေညျ..။ နုတျခမျးလေးက ဖူးဝငျးစိုဖောငျးနသေညျ..။ ရှနျးလဲ့ တောကျပသော မကျြဝနျးလေးမြားက ဖွူစငျကွညျလဲ့နကွေသညျ..။ တဈခုပဲ…ရှိသညျ..။ ကိုယျလုံးကိုယျထညျက ပုံ့ပုံ့ထကျ ကဈြ လဈမာကွောသညျ…။ ဖိနပျစီးမထားသော ခွထေောကျ၌ ရှံ့နီတို့ လိမျးကြံ ပလေူးနသေညျ..။ ယောကျြားရှပျအကငြ်္ီတဈထညျကို ဝတျထားသညျ..။ ပုဆိုးဟောငျးတဈထညျကို စလှယျသိုငျးကာ ပုဆိုးထဲ၌ သရကျသီး အခြို့ ၊ ဟငျးရှကျအခြို့ကို တှရေ့သညျ..။ အသကျ…၁၈ နှဈထကျ မပိုလောကျသေးသော သညျအရှယျလေးကို ကွညျ့ပွီး ရငျခုံမိသညျ့အတှကျ ကိုသကျအောငျ ကိုယျ့ဖာသာ ကိုယျ မလုံမလဲ ဖွဈရသညျ..။
ကောငျမလေးကလညျး သူ့ကို စူးစူးဝါးဝါးကွီး စိုကျကွညျ့လိုကျသော ကိုသကျအောငျ အကွညျ့ကွောငျ့ မကျြနှာလေး ရဲခနဲ ဖွဈကာ လှညျ့ထှကျသှားလတေော့သညျ..။ ကိုသကျအောငျ ညီက ကိုသကျအောငျ ပုခုံးကို ကိုငျပွီး… “ ဒီခလေးမလေးက သနားစရာ ကိုကွီး ရဲ့…. မောငျလေးနဲ့ ညီမလေးကို လုပျကြှေးနတော..၊ အဈကိုတဈယောကျကလညျး မူးရူးနတောနဲ့ အခြိနျကုနျနတော…” “ မိဘတှေ ကရော…ကိုသကျ…ဟငျ…” “ ဖအကွေီးက ဆုံးသှားတာ ကွာပွီ….၊ မအကေလဲ နောကျလငျယူတာ မကွာသေးဘူး….၊ ကနျြခဲ့တဲ့ ခ လေးတှကေ ဥမမယျ စာမမွောကျတှခေညျြးပဲ….”
ညနစောအတှကျ ခကျြပွုတျကွသောအခါ ညနကေ တှခေဲ့ရသော ခလေးမဆီမှ ဟငျးရှကျအခြို့ ဝယျကွသညျ..။ “ အဲဒီလိုပဲ ….တောတိုးပွီး ရောငျးခစြားရငျး အသကျရှငျနကွေရတာ…ကိုကွီး…” နောငျသောအခါ ကိုသကျကပငျ ထိုခလေးမြားကို အခါ အားလြျောစှာ အဝတျအစားမှ အစ ထောကျပံ့နရေကွောငျး သိလာရလသေညျ..။
“ တောထဲက ဟာမ သူဟာသူဖွဲ နီတာရဲ….” “ အယျ…ကိုခကျြဖောငျးကွီးက ညဈပတျတယျ….တော့…သှား မသိဘူး…” “ နငျ့ စောကျပတျ…ညဈပတျရမလား…ဟ…၊ ဒါစကားထာဖှကျတဲ့ဥစ်စာ…လီး….” ခကျြဖောငျး ၊ ခွောကျစောငျး ၊ ယောငျပှ ၊ တို့က မိနျးခ လေးမြားနှငျ့ အဖှဲ့ကသြညျ..။ လသာသော ညမြားတှငျ မွရှေငျးသော ကိုသကျတို့ အိမျရှကှေ့ကျလပျ၌ ထုတျစညျးတိုး ၊ တှတျထိုး ၊ ဖနျခုနျ ၊ ကွကျဖခှပျတမျး ကစားကွသညျ..။ ခကျြဖောငျး ၊ ခွောကျစောငျး ၊ ယောငျပှ ဆိုသညျမြားကလညျး နာမျစားမြားသာ ဖွဈကွ သညျ..။ မွငျ့သိနျး ၊ စိနျလှ နှငျ့ အောငျကွညျတို့မှာ နာမညျရငျးမြား ဖွဈပါသညျ..။
ကိုသကျအောငျအပါအဝငျ လူကွီး လူငယျ လူလတျမကနျြ စကားထာဝိုငျး၌ ပါဝငျ နိုငျကွသညျ..။ ယခုလညျး လူ၂၀ခနျ့ ဝိုငျးကွီး ဖှဲ့ ထားကွသညျ..။ “ အံမယျ….လှယျလှယျလေး….အဲဒါ တောကျတဲ့ဥ……” “ မငျ့မလေိုး…မိနျးခလေးတှေ ဖျောရမဲ့ အလှညျ့ကှ… ယောငျပှရဲ့…” “ အဲ…ဟုတျသားပဲ…ယောငျလို့….” ဝိုငျးရယျ ကွသညျ..။ “ နငျ့ဟာတှဲလဲ နီတာရဲ…ကဲဖျောစမျး….“ ဒျေါဖားမက ယုတျကနျးသညျ..။ ဆေးလိပျမီးတဖှားဖှား ဖှာရငျးက ထပွောသညျ…။ “ ဟာ…ဒျေါဖားမ..ဒါ ခငျဗြား ယုတျကနျးတာ….”
“ ဘာယုတျကမျးရမှာလဲ…ဟဲ့…၊ နငျတို့ဖျောကွညျ့ပါလား…ဟငျးဟငျး…” “ ဟကေ့ောငျတှေ ..တှဲလဲကွီးတဲ့…နီတာရဲကွီး တဲ့…ဘာ ဖွဈမလဲ…” “ ဖိုးလေးခဈြ ကြှဲသိုးကွီး သိုကွီးပဲ ဖွဈမယျ….ဟားဟား…ဟား..” “ မှားတယျ…မှားတယျ…ငှကျပြောဖူးကို ပွော တာ….” စကားထာဝိုငျးက အပွိုငျအဆိုငျ ကွမျး ကွမျးလာကွသညျ..။ “ နငျ့ကို ငါခြ ..ငါ့ကိုနငျတကျခြ…အဲဒါ ဘာလဲ..ဗြ….” “ ဟဲ့…မအလေိုး ခကျြဖောငျး…နငျ အဲဒီအထိတော့ မစုတျပဲ့နဲ့….”
“ စကားထာပါ..ဗြာ…ဖျောနိုငျရငျ သိလာမှာပါ…” စကားထာဝိုငျး ငွိမျသကျသှားသညျ..။ ကိုသကျအောငျပငျ စဉျးစားမရ ဖွဈ နသေညျ..။ ဒျေါဖားမနှငျ့ လူကွီးပိုငျး ခေါငျးခငျြးဆိုငျ သညျ..။ ကိုသကျအောငျ စိတျဝငျစားနရေသော ခလေးမလေး အပြိုဝိုငျးက လညျး တှတျထိုးနကွေသညျ..။ ဘယျသူမှ ဖျောမရကွ…။ “ ပနျးပေးပလား….ပွောလိုကျတော့မယျ…နျော..” ခကျြဖောငျးက ထအျော သညျ..။ လမငျးကွီးက ပို၍ ပို၍ သာလာနသေညျ..။ “ ကဲ…ပေးပွီ ဟာ… ဖျော….” ယောကျြားလေးစိတျနှငျ့ ယောကျြားလေးလို ဝတျတတျသော မယျစိနျက ပွောသညျ..။ “ ကိုသိနျးမောငျနဲ့ မမယျခငျပေါ့..ဗြ….သှားကွညျ့ပါလား…“
“ ဝါး…ဟားဟား…ဟား…ဟား…” ဝိုငျးထဲမှာ ရယျသံမြားက မရပျကွတော့…။ ကိုသကျအောငျပါ အူလှိုကျသဲလှိုကျ ရယျမိသညျ..။ ကိုသိနျးမောငျက ပေါငျတဈဖကျ မရှိ ၊ မမယျခငျက မကျြလုံးကှယျနသေော လငျမယား…။ “ သှား …ကောငျးကောငျး မဖှကျပဲ နဲ့..ခွောကျစောငျးတို့ အုပျစု…” ဤနှယျ တောရှာကလေး၌ ကိုသကျအောငျ အနပြေျောလာသညျ..။ ညီဖွဈသူက သူနှငျ့အတူ ဆေးထိုးအပျ ကိုငျစခေငျြသညျ..။ ကိုသကျအောငျက ပေါကျတူး ကိုငျသညျ..။
“ ဟို ခလေးမ နာမယျ ခုထိ ငါမသိသေးဘူး…ကှ ကိုသကျ…” “ ဟာ…ဘာသိစရာ လိုသလဲ..ကိုကွီးကလဲ….” “ အာ….တဈရှာထဲ နပွေီး နာမယျမသိဘူးဆိုတော့ ကှာ ..မငျးကလဲ…” “ ဒါဖွငျ့ …ကိုကွီးဖာသာ မေး…” ကိုသကျအောငျက…“ သမီးနာမယျက ဘယျလိုချေါလဲ့ကှဲ့…သမီး…” “ ငယျငယျက အမခေျေါတာ…ခြီးပတေဲ့..ကိုလေးက ချေါတော့ အာပွဲတဲ့….ခုတော့ ခှေးမလို့ ချေါကွ တယျလေ… ဟှနျး …စှာလို့တဲ့…”ကိုသကျအောငျ ရငျနငျ့စှာ ရယျမောမိသညျ..။
“ ဒါဆို…ဦးက သမီးကို မခှေးမ လို့ပဲ ချေါရမှာပေါ့…ဟ.လား…” “ အငျး…တဈရှာလုံးက ဒီလိုပဲ ချေါနတောကိုး…“ “ မကောငျးပါ ဘူး…ဦး နာမယျပေးရမလား….ဦးက ရှေးတတျတယျကှ…“ “ ဟငျ့အငျး…နပေလစေ့ေ…ပေးမနနေဲ့…အလကားပဲ ခှေးမလို့ပဲ ချေါ ကွမှာ…” “ ဒါဆိုလဲ …ဦးက သကျသကျချေါဘို့ နာမယျ လေး ရှေးထားတယျ..သိလား…” “အငျး…အငျး….ရှေးပေါ့…” ကှမျးသီး ခွမျးကို တမွုံ့မွုံ့ဝါးရငျး အလေးမထားသလို ပွနျပွောသညျ…။ တောငျယာတဲလေးထဲ၌ ရနှေေးအိုးက မီးခိုးမြား အူထှကျ နသေညျ..။ နှညေနသေညျ သဈရှကျလတေိုးသံမှ တပါး တိတျဆိတျနသေညျ..။ တဈခါတဈရံ တဲခေါငျမိုးသို့ လာနားသော စာကလေး ငှကျမြားက တကြိကြိ အသံလေးမြားကို ကွားရတတျသညျ..။
“ သမီး…မသိခငျြဘူးလား….” “ ဟငျ့အငျး….မသိခငျြဘူး…ဘာလုပျဖို့လဲ…” ရနှေေးအိုး မီးထဲသို့ ထငျးခြောငျးတဈခု မှနှေောကျထိုး ထညျ့ရငျး ပွောလိုကျသညျ..။ မကျြနှာနုနုလေးက ကွမျးတမျးသော ဘဝဒဏျကို ရငျဆိုငျထားရဟနျ နှမျးနသေညျ..။ “ ခှေးမရေ… ပဲသီးတောငျး လာရှကျတော့…ဟေ့….ပွညျ့နပွေီ…” ကိုသကျမိနျးမ မခလေးမက လှမျးအျောလိုကျမှ အနားစုတျပွဲနသေော ထမီစ လေးကို စုကိုငျကာ ဒရောသောပါး ထပွေးသညျ..။ နှဈလကျမခနျ့ ထောငျ့တနျးပွဲနသေော ထမီလေးအောကျမှ ဖငျသားဝငျးဝငျးလေး ကို တှလေို့ကျရသညျ..။ ကိုသကျအောငျ ပေါကျတူးဆှဲပွီး တဲလေးအတှငျးမှ ထှကျလာခဲ့သညျ..။မခလေးမက ပဲသီးတောငျးကို ပငျ့ ပေးရငျး ကိုသကျအောငျကို လှမျးကွညျ့သညျ..။
“ အဈကိုကွီးကလဲ တောငျယာထဲ မဆငျးပါနဲ့ ဆို…အလကား လုပျနိုငျတာလဲ မဟုတျပဲနဲ့…” “ ရနျကုနျမှာ ဦးက ဘာလုပျ ..အဈမ…” “ စာရေးဆရာတဲ့ဟဲ့…ဘာမှ လုပျရတာမဟုတျဘူး…” “ အျော….စာရေးဆရာ ကိုး…” စာမတတျသော ခှေးမရငျထဲ၌ စာရေးဆရာကွီးကို ရိုသလေေးစားသှားမိသညျ..။ စာရေးဆရာကွီးက သူ့ကို နာမယျရှေးပေးမဲ့ အကွောငျး မခလေးမကို မပွောဖွဈ တော့…။ တောရှာဘုရားပှဲက နှဈတိုငျး စညျကားသညျ..။ ခှေးမတို့ အပြိုဖွနျးလေးတှေ အဖို့ ခွဈခွုတျစုဆောငျးထားသမြှ စုဗူးတှေ ဖောကျကွ ၊ အဝတျတှေ ခြုပျကွ ၊ တဈလုံးတညျး ရှိသော ရှာလယျ ဒျေါအေးမွတို့ စကျမှာ လကျမလညျနိုငျ…။
ခှေးမ စုဗူး ဝါးကညျြတောကျက အကွှခေညျြး ထှကျလာသညျ..။ စုစုပေါငျး တဈရာ့ဆယျ့ငါးကပျြ ရသညျ..။ မယျစိနျနှငျ့ မမိအေးတို့ က ဈေးကွီးသော အိတုံရှနျကို မှနျးနကွေခြိနျတှငျ ခှေးမက သာမနျ ဝတျရရုံ ထမီတဈထညျကိုပငျ မနညျး စဉျးစားနရေသညျ..။ “ အဈမ…ကမြကို စိုကျပွီး ထမီဝယျခဲ့စမျးပါနျော….” မခလေးမ မွို့ဈေးသို့ တကျသောအခါ လုပျခကွှေးယူစနဈဖွငျ့ မှာရသညျ..။ ကို သကျနှငျ့ သူ့ခလေးမြား ၊ ကိုသကျအောငျနှငျ့ သူ့သားသားတို့နှဈယောကျပါ ပါလာသဖွငျ့ မွို့ဈေး၌ ထမီ အပေါစားဝယျသောအခါ ကို သကျအောငျ မေးမိသညျ..။ ခှေးမဘို့ဟု သိရသညျနှငျ့ ကိုသကျအောငျ ရှာမှ အတူလာသော မိနျးကလေးမြား ခြုပျကွသညျ့ အရောငျ အသှေးဆငျတူ ပိတျစကို နှဈစုံ မှာခြုပျပွီး ယူလာခဲ့သညျ..။
ကိုသကျအောငျက ခှေးမ ပြျောသှားလိမျ့မညျ ထငျထားခဲ့မိသညျ..။ ခှေးမကို မခလေးမ တို့ အဝတျမြား သှားပေးသောအခါ ကိုငျတှယျကွညျ့ရုံသာ ကိုငျသညျ…။ ပွီးတော့ ပွတျသားစှာ ငွငျးဆိုသညျ..။ “ ကမြ ဒါမြိုး မှာတာမဟုတျဘူး….မလိုခငျြဘူး…” “ ဟဲ့…ဒါ …နငျ့ကို သူမြား လကျဆောငျပေးတာ…ခှေးမရဲ့….“ “ ဘယျသူက ပေးတာလဲ…ဒီလောကျအမြားကွီးကို ..” “ နောကျတော့ သိမှာပေါ့…ဟယျ…ယူထားလိုကျပါ…” ထိုနှဈ ဘုရားပှဲ၌ ခှေးမ ရှတေ့နျး၌ တနျးစီခှငျ့ ကနျတော့ပှဲ ရှကျခှငျ့ ရလိုကျသညျ..။ တော ဆို ပမေယျ့ အဝတျအစားဖွငျ့ ခြိနျထိုးပွီး တနျးစီခိုငျးသော အလအေ့ထ ရှိနသေေးသညျ..။ ကိုသကျအောငျ ဦးစီးသော ကာလသားတဈ သိုကျက အိုးစညျဝိုငျးဖွငျ့ သံခပျြ တှေ ထိုးကွသညျ..။ လူကွီးတှေ အရမျးသဘောကနြကွေသညျ..။
“ မောငျသကျအောငျ ရောကျလာမှ ဒို့ရှာလေး စညျကားလာသဟေ့…”သညျလိုနှငျ့ ကိုသကျအောငျ ရှာထဲ၌ ဝငျဆနျ့လာသညျ..။ လူ ခဈြလူခငျလညျး ပေါလာသညျ..။ “ ခှေးမ…နငျ့အကငြ်္ီ နဲ့ထမီက ငါးရာကြျော အေ့….သိရဲ့လား….” “ ဟငျ…မမယျစိနျက ဘယျလို လုပျ သိလဲ…” “ ကိုသကျအောငျကွီး ငါ့ကို ချေါပွီး လိုကျဝယျတာ…တျောရေ့…၊ အမလေး…ဒါဆို ခြာတိတျ ကွိုကျပါ့မလား မသိ ဘူး…လိုလိုမယျမယျ အပူရောငျ အလေးရောငျ နှဈစုံခြုပျမှ….နဲ့ ဗြာကိုမြားနတောပဲ…ဟဲ့…” “ ဟငျ…ကိုသကျအောငျကွီး ခြုပျပေး တာလား…ငါက မခလေးမတို့ အရငျလိုပဲ…ဝယျပေးတာမှတျထာ တော့…” “ အေး….ငါပွောတယျလဲ…မပွောနဲ့အုံး….ဟှနျး….”
ခှေးမ ရငျထဲ မကွညျမလငျ ခံစားရသညျ..။ အသကျ ၃၀ ကြျော ဒီလူကွီးက ဘာလို့ ငါ့ကို အဝတျတှေ ခြုပျပေးရတာလဲ…သနားလို့ လား …ခှေးမအတှကျ ပထမဆုံးသော အိပျပကျြညလေး ကွုံခဲ့ရသညျ..။ “ အဈကိုကွီး…စဉျးစားပွီး ပလား…၊ သခြောပွီ လား….” “ စဉျးစားပွီးမှ ပွောတာ….ကိုသကျရ….သခြောတယျ…..” “ ကောငျမလေးက သိပျငယျသေးတယျ….ဒါပမေယျ့ သူ့ဦးလေးတှေ အသိုငျးအဝိုငျး တီးခေါကျကွညျ့ပါအုံးမယျ….” ကိုသကျအောငျ ခဈြသော ခြာတိတျကို လကျထပျရနျ အဆငျ့ဆငျ့ ကွိုတငျပွငျဆငျ ပွီး နောကျတဈနှဈ သင်ျကွနျရကျ အတကျနေ့၌ မင်ျဂလာဆောငျလိုကျကွသညျ..။ ကိုသကျအောငျကိုယျတိုငျက ကံကောငျးလသေလား ၊ ကံပဲ ဆိုးခငျြလသေလား မသိ..။ မနူးမနပျ မလညျမဝယျနှငျ့ ခှေးမလေးက အသကျ ၁၈ နှဈ အရှယျနှငျ့ အိမျထောငျပွုရနျး လကျခံခဲ့ သညျ..။
“ ခြာတိတျ…အဈကို့ကို ခဈြလား…ဟငျ….” “ ဟငျ့အငျး….မခဈြဘူး……” “ ဟဲ ဟဲ…ဟဲ….” “ နောကျတာမှ မုတျတာ… ခလေး ဖအကွေီး ဘယျခဈြမှာလဲ…လို့…” “ ဘာ…..ဘာပွောတယျ…” မင်ျဂလာဆောငျ မဏ်ဍာပျဆီမှ ဆူညံသော ဓါတျစကျဖှငျ့သံ ကွားနေ ရသညျ..။ မယျဒလငျ တဈလကျ အျောဂငျ ဂဈတာ ..တဈခုခုဖွငျ့ သီခငျြးဆိုခငျြသူတှကေလညျး ဒုနဲ့ဒေး မွူးပြျောနကွေသညျ..။ မူးရူး နကွေသညျ..။ ကိုသကျအောငျ ရငျ၌ အမှား မုနျတိုငျးကွီး ပွငျးပွငျးပွပွ ရိုကျခတျလုပျရမျးနလေပွေီ…။ သတို့သမီးအတှကျ စံပယျ ပနျးကုံးမြား ထညျ့ထားသော ဆကာကုံးလေးက အခနျးထောငျ့မှာ ရှိသညျ..။ လတေိုးသဖွငျ့ ယိမျးထိုးလုပျရှားနသေော မီးခှကျမှ အလငျးရောငျလေးက ကဉျြးမွောငျးသော အခနျးလေးထဲ၌ မုံဝါးဝါး လငျးနသေညျ..။
“ ငါကတော့…နငျ့ကို ခဈြတယျ….” “ ခဈြပေါ့…အို့…“ ပွောပွောဆိုဆို ကဈြလဈသနျမာသော ကိုယျလုံးလေးကို ပှယေူ့ပွီး အိပျယာ ထဲသို့ လှဲခလြိုကျသညျ..။ ခွငျထောငျက အလိုလို လုံးထှေး ကလြာသညျ..။ “ အဲဒီလို…မလုပျနဲ့…ဦးရယျ….ကြ….ကမြ ….ကွောကျ တယျ…..“ “ မနကျဖနျပဲ…မင်ျဂလာဆောငျတော့မဲ့ဟာ…ခလေးရယျ…နျော…“ “ အို….ဟငျ့အငျး….ဟငျ့အငျး……….” “ မလုပျပါ နဲ့…..မလုပျ..ပါနဲ့…ဆို……..” ခြာတိတျအသံက တအားအျောဟဈသံမြိုးတော့ မဟုတျ…။ မကျြနှာလေး ရုံ့မဲ့ပွီး ရုနျးကနျ တှနျးထိုးနေ ခွငျးမြိုးသာ ဖွဈသညျ..။ ကိုသကျအောငျက ပထမဆုံး ခွငျထောငျကို သခြော ခလြိုကျသညျ…။ ခြာတိတျက လူးလဲ ထရနျ ကွိုးစား လိုကျသေးသညျ..။ ကိုသကျအောငျက လကျတဈဖကျဖွငျ့ ခြာတိတျကို ပှဖေ့ကျထားလိုကျသညျ..။
“..ဦး…အ…အဟငျ့…မလုပျ ပါနဲ့…ဦး ရယျ…..ကမြ ကွောကျတယျ….“ အတနျတနျ တောငျးပနျနသေညျ့ကွားမှ အပျေါအကငြ်္ီလေး ကြှတျသှားလသေညျ..။ ဝယျပွီးကာစ ဘရာစီယာလေးသာ ကနျြတော့သညျ..။ အရှယျသဈသဈ ဖူးပှငျ့စ စပယျငုံလေး အစုံအလား သနျ့စငျမှေးပြံ့ နသေော ရငျသားလေးနှဈမှာကို ဘရာစီယာပျေါမှ ဖိ၍ ပှတျသပျနမျးရုံ့လိုကျသညျ..။ ခြာတိတျနုတျခမျးလေးကို ပူနှေးခြိုမွိနျစှာ စိတျကွိုကျ စုတျယူလိုကျသညျ..။ တအငျးအငျး ကော့တကျသှားရှာသော ခြာတိတျခါးလေးမှ ထမီစကို လြှော့ခြ ပဈလိုကျသညျ..။ ခြာတိတျလကျဖဝါးလေး အစုံက သူမဟာလေးကို စုံကိုငျအုပျထားလိုကျသညျ..။
လကျမောငျးနှဈဖကျကို စုထားသလိုဖွဈနေ၍ ရငျသားလုံးလုံးဖှေးဖှေးလေးက ပေါကျစီလေးမြား ပ မာ လုံးတကျလာသညျ..။ နို့သီး ခေါငျးလေးမြားက ရသေဖနျးသီးအမှညျ့လို ရဲထှတျနီမွနျးနသေညျ..။ ကိုသကျအောငျက အပျေါမှ ခှစီးပွီး နို့သီးလေးနှဈလုံးကို ပှတျ သပျဆုပျနယျပေးလိုကျပွီး နို့သီးခေါငျးလေးကို ဖိကွိတျပွီး ခပြေေးလိုကျသညျ..။ “ အ……အမေ….အဖရေေ…..အမလေး….အ မေ့…” ခေါငျးလေးကို ဘယျညာ တှငျတှငျ ရမျးခါရငျ အံကလေး ကွိတျခါ တိုးတိုးလေး ကွိတျအျောသညျ..။ အသားလေးမြားက မြှားဆိပျသငျ့သော သမငျမလေးနှယျ တုနျခါနသေညျ..။
ကိုသကျအောငျက မုံဝါးဝါး မီးရောငျဖွငျ့ ခြာတိတျပေါငျကွားကို ဖွဲကွညျ့ လိုကျသညျ..။ ခြာတိတျက အမှေး မစုံ…။ စောကျမှေးဆို၍ တဈပငျတဈလမြှေပငျ ရှာမတှေ့…။ ရငျ့ထျော ကွမျးတမျး ရုပျပှသညျ့ စောကျမှေးရငျ့ရငျ့ကွီးမြားကွားမှ ပွဲအာသော စောကျဖုတျကွီးမြားကို လိုးခဲ့ရသော ကိုသကျအောငျအတှကျ အမှေးနုနုလေးမြား သာ ရှိသေးသော စောကျဖုတျလေးမှာ အဆနျးတကယျြ ဖွဈသှားရသညျ..။
“ လကျဖယျထားလေ….ခလေး..ရဲ့…” “ ဟငျ့အငျး…ဟငျ့အငျး…..မဖယျဘူး…မဖယျဘူး……….” အကွောကျအကနျ ငွငျးဆနျနေ သော ခြာတိတျလကျလေးနှဈဖကျကို ခပျတငျးတငျးလေး ကိုငျဖယျလိုကျရာ ဖောငျးမို့နူးညံ့နသေော ဆီးခုံလေးမှ ကှဲဆငျးသှားသော ပေါငျကွားထဲ ညှပျနသေညျ့ စောကျဖုတျ နုနုလေးကို တှလေို့ကျရသညျ..။ ကိုသကျအောငျက ပုဆိုးကို ခေါငျးပျေါမှ ကြျောပွီး ခြှတျ ကာ ခွငျထောငျခွရေငျးသို့ ပုံခလြိုကျသညျ.။ အမှေးကွမျးကွီးမြားဖွငျ့ ထူထပျစှာ ပေါကျနသေော ဂှေးဥတှဲတှဲကွီးက ခြာတိတျပေါငျ လေးပျေါသို့ အပုံလိုကျ ထှေးကနြသေညျ..။
မတျတောငျနသေော ခလေးနှဈယောကျရပွီးသား လီးကွီးက ဆာလောငျစှာဖွငျ့ ဆတျခနဲ ဆတျခနဲ တုနျခါနသေညျ..။ ခှေးမ က မကျြစိမဖှငျ့ပဲ တငျးနအေောငျ မှိတျထားသညျ..။ စောကျဖုတျလေးက ကွပျညှပျပွီး တငျးနအေောငျ စနေ့သေညျ..။ ကိုသကျအောငျ က လီးထိပျကွီးဖွငျ့ အကှဲကွောငျးလေးကို ထိုးကာ ကျောတငျပေးလိုကျသညျ..။
ပွဈခြှဲသော အရမြေားက လီးထိပျမှ စိုစှတျစှာ ထှကျကလြာလရော စောကျပတျကလေးမှာ ဝငျးလကျတောကျပသှားလသေညျ..။ သို့သျော တငျးတငျးကွီး ညှဈထားသဖွငျ့ စောကျပတျအကှဲကွောငျးလေးမှာ စကေ့ပျနသေေးသညျ..။ ကိုသကျအောငျက အကှဲ ကွောငျးလေးထဲသို့ လီးထိပျနီနီကွီးကို တကေ့ပျပွီး ဖငျအားနှငျ့ ဖိခနြသေျောလညျး စထေ့ားသော ပါးစပျအတှငျးသို့ ငှကျပြောသီး ထိုးထညျ့နရေသလို ခြျော၍ ခြျော၍ ထှကျနပွေနျသညျ..။
ကိုသကျအောငျ ခြှေးပွနျလာသလို အပြိုစငျမလေးမှာလညျး ရှကျလှနျးကွောကျလှနျးနသေဖွငျ့ သတိမလဈရုံတမယျ ခံစားနရေ ရှာသညျ..။ “ ညီမလေးကလဲကှယျ…လိမ်မာသားနဲ့…နဲနဲ ကားပေးပါဆို…..” “ ကွောကျတယျ…အီး….ဟီး….ကွောကျ…ကွောကျ တယျ…..” ပွဿနာ အတုံးလိုကျ အတဈလိုကျ ဖွဈနရေသညျ..။ နောကျဆုံး ကိုသကျအောငျ ခွနှေဈခြောငျးကို ဆှဲကားလိုကျပွီး တဈခြောငျးကို ပုခုံးပျေါ ဆှဲတငျ ထမျးထားလိုကျကာ ကနျြတဈဖကျကို ဖငျနှငျ့ ဖိခြ ထိုငျထားလိုကျသညျ..။
ထိုအခါမှ ကဉျြးမွောငျးသော အပြိုပေါကျမလေး၏ ဂယျပေါကျလေးက ကိုသကျအောငျ ၏ ပစ်စညျးကွီးထိပျ၌ တမေိ့သှားပွီး ရုံ့ခနဲ ဖွဈသှားသညျ..။ ကိုသကျအောငျ သိပျပွီး အခြိနျဆှဲမနတေော့ပဲ ဒဈကွီးမွုပျသှားအောငျ ပထမအဆငျ့ အနဖွေငျ့ လိုးသှငျးလိုကျ သညျ..။ “ ဗွှတျ…..အမေ့…..အီး…အိ..အိ……အမရေေ……အ..အား….” အတျောအျောသော ကောငျမလေးဖွဈသညျ..။ တျောပါ သေး၏..။ စပီကာမှ ဖိုးဆိုခငျြ တဈသိုကျက အသံကယျြလောငျစှာဖွငျ့ ဖုံးလှမျးထားသဖွငျ့ အပွငျသို့ ကယျြလောငျစှာ အသံမထှကျခဲ့ ခြေ…။ စကတညျးက အခွအေနကေ သိပျမကောငျးခြေ..။ ပစ်စညျးခငျြးက မမြှမတ ဖွဈနသေညျ..။ ဆငျလီးနှငျ့ ဆိတျဖငျ လိုးနေ သလို ဘယျလိုမှ မဝငျနိုငျအောငျ တငျးကွပျလှနျးနသေညျ..။
ကိုသကျအောငျ ကိုယျတိုငျပငျ ကငျြစပျသော ဝဒေနာကို လီးထိပျမှာ ခံစားနရေသညျ..။ ယောကျြားဆိုသညျကလညျး အပေါကျကဉျြး ကွိုကျတတျကွသော အမြိုး ဖွဈသညျ..။ ကိုသကျအောငျ မရမက ဖိသှငျးသညျ..။ “ ဗွဈ…ဗွဈ…..ပွှတျ…..ပွှတျ……အ…..အ…… အား……….” ကောငျမလေးထံမှ တျောတျောနှငျ့ အျောသံ ထှကျမလာ…။ အတနျကွာ အသကျအောငျ့ထားပွီးမှ နာကငျြစှာ အျောသံ ထှကျလာသညျ..။ ကိုသကျအောငျ လကျတဈဖကျက တဆတျဆတျတုနျနသေော ပုခုံးပျေါမှ ခွတေဈဖကျကို ထိနျးကိုငျထားရသညျ..။ ကနျြလကျတဈဖကျက အမှေးနုလေးမြား ရှငျသနျကာစ ဆီးခုံလေးကို ပှတျသပျပေးနရေသညျ..။ စကျဝိုငျး ဝိုငျးသလို အဆကျမပွတျ ပှတျပေးနရေငျး စပါးလုံးတဈထောကျစာမြှ လောကျစီ နှဲ့သှငျးနရေသညျ..။
“ အငျ့…..အငျး….ကြှတျ ကြှတျ…..အငျ့..အငျး….“ ကောငျမလေး က မင်ျဂလာစောငျကွီးကို ဆှဲယူပွီး ပါးစပျနှငျ့ တကေ့ပျကာ လူနာ တဈယောကျ ငွီးသလို ကွိတျပွီး ငွီးနရှောသညျ..။ မကျြရညျစီးကွောငျးလေးက ပါးပွငျကို ဖွတျ၍ ခေါငျးအုံးပျေါ ကနြသေညျ..။ “ ပွှတျ….ပွှတျ……ပွဈ…..စှတျ……“ “ ဟ…..အား….အငျ့အငျး…..အငျ့အငျး……….အ..အ…အိ….အ ..“ တဖွညျးဖွညျး အဆုံးထိ ရောကျသှားပွီး ပူနှေးသော ကောငျမလေး ဟာလေးက တငျးကွပျစှာ စုပျယူထားခွငျးကို ခံလိုကျရလသေညျ..။
ကိုသကျအောငျ မွို့မှာ ရှိစဉျက ခလေးထိနျး မခြို၏ ပုလှမေုတျပေးခွငျးကို ခံစားရဖူးသညျ..။ ပူနှေးသော အာငှနှေ့ငျ့ လြှာဖြားလေး မြားကလိပေးမုက အရသာထူးကဲစှာ ခံစားရခဲ့ဖူးသညျ..။ သို့သျော ယခု သညျကောငျမလေး၏ အပြိုဖျောဝငျစအရှယျ သနျမာသော ကွှကျသားမြားဖွငျ့ လိငျတနျကို ဖွဈညှဈခါ စုပျယူထားသလို ခံစားရမုက စအိုထဲကပါ မခံနိုငျအောငျ သူ့လိငျတနျကွီးကို ပွနျမနုတျ သေးပဲ စောကျခေါငျးလေးထဲ၌ စိမျထားပွီး မှိနျးနလေိုကျမိသညျ..။
“ အငျး….ဟငျး………..အ…ကြှတျကြှတျ…..ကြှတျကြှတျ…..” ကောငျမလေးက တဈခကျြမြှ ငွီးတှားပွီး အနညျးငယျ လူးလှနျ့လိုကျ သော အခါကမြှ လီးထိပျကွီးမှာပါးစပျအတှငျးမှ ထှေးထုတျခွငျး ခံလိုကျရသော ခရမျးခဉျြသီးကွီးနှယျ ပလှတျ ခနဲ ကနျထှကျလာ သညျ..။ ဒဈမထှကျခငျ အခြိနျမီ ပွနျပွီး ဟနျ့တားနိုငျသဖွငျ့ ကှငျးလုံးကြှတျ ထှကျမသှားပဲ ပထမ သှငျးစဉျတုနျးကလို ပငျ ငွငျသာစှာ ဆီးခုံလေးကို ပှတျလိုကျ အစိလေးကို လကျညှိုးလေးဖွငျ့ ကလိလိုကျ လုပျပေးရငျး ခြော့သှငျးလေး သှငျးလိုကျပွနျသညျ..။
“ အငျ့အငျး…..ဟငျးဟငျး…ဟငျး….အငျ့….အငျး………..“ မိနျးမတဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ငွီးတှားသံမြားက ကှဲပွားခွားနားကွ သညျကိုလညျး ကိုသကျအောငျ သတိထားမိလာသညျ..။ ဒီကောငျမလေး ငွီးတှားပုံက ဗိုကျအောငျ့လူနာလို အသကျအောငျ့ အောငျ့ ပွီး ညီးညူတတျသညျ..။ အဆုံးထိ ရောကျသှားပွနျသောအခါ ယခငျကလိုပငျ တငျးကွပျစှာ ဖမျးယူ ဆုတျညှဈထားခွငျးမြိုး ခံရပွနျ ပွီး ကိုသကျအောငျ သုတျသှေးကွောကို စုတျထုတျနသေလို တစိစိ ခံစားနရေသညျ..။ ထိုသို့ သုံးလေးကွိမျမြှ အစုပျအတနျ့ လေး မြားကို ခံစားရပွီးနောကျ ခြောငျခြိသော လမျးကွောငျးလေးအသှငျပွောငျးလာလသေညျ..။ ပွဈခြှဲခြှဲ အရမြေားကလညျး တစိမျ့စိမျ့ ကဆြငျးပေးလာသဖွငျ့ ကဉျြးမွောငျးသေးကှေးလှသော ကွှကျတှငျးလေးသို့ တံပိုးတုံးကွီး ရဆှေတျဆောငျ့ရသလို အပေါကျသဈခြဲ့ နရေသဖွငျ့ ပငျပနျးလှသညျ..။
ကောငျမလေး၏ အောကျဖကျ အတှငျးပေါငျလေးပျေါ၌ စေးထနျးသော သှေးစလေးမြား ယိုစိမျ့ ကဆြငျးနသေညျ..။ “ အငျ့… အငျ့…..အငျ့……..ဟငျ့….အ….အ မေ….ရေ…….” ပါးစပျကို စပေိ့တျထားသညျ…။ ( အမရေေ ) အျောသံက တိုးတိုးဖှဖှလေး ဖွဈသညျ..။ အတနျကွာ ညှောငျ့ပေးပွီးနောကျ ကိုသကျအောငျ နို့လေးနှဈလုံးကို ခပျတငျးတငျးလေး ဆှဲကိုငျပှတျခြေ ဆုတျနယျရငျး ခပျသှကျသှကျလေး ဆောငျ့လိုးပဈလိုကျလသေညျ..။
“ ပွှတျ…ဖှတျ….စှပျ…..ပွှတျ….ပွှတျ…ဖှတျ…..စှပျ……“ “ အ….အ…..အ အ…ရှီး….အ..အ မလေး….နျော….အငျး…ဟငျး ဟငျး………” ကောငျမလေး တဈကိုယျလုံး ငလငျြလုပျသလို ဆတျခနဲ ဆတျခနဲ ဆောငျ့လုပျသှားပွီး ပူနှေးသော သုတျရညျမြား ပွှတျခနဲ အနျကလြာလတေော့သညျ..။ ထိုအခါ ကမြှ ကိုသကျအောငျက ခပျနာနာလေး ထပျဆောငျ့ပွီး သူကိုယျတိုငျ သုတျရမြေား ကို ကောငျမလေး အင်ျဂါဇတျ အခေါငျးထဲသို့ နကျရှိုငျးစှာ ထိုးသှငျးဖိကပျ ဖိကပျထားပွီး အားရပါးရ ပနျးထညျ့လိုကျလေ တော့သညျ..။
“ အား…နာလိုကျတာ…….အား…အား…..စပျလဲ စပျတယျ…….“ “ နောကျတော့ ပြောကျသှားမှာပါကှယျ…..ခဏ နာတာ ပါ….နျော….“ “ ဦး မကောငျးဘူး….မနကျဖနျ မင်ျဂလာဆောငျမှာ ဘယျလိုလုပျပွီး လမျးလြှောကျရမှနျးတောငျ မသိတော့ဘူး… ပေါငျ ထဲက အကွောတငျနသေလိုပဲ…အောငျ့တောငျ့တောငျ့နဲ့…အငျး…အ…..” မှနျသညျ…။ မိုးလငျး မင်ျဂလာအခမျးအနား ကငျြးပ သောအခါ ခွလှေမျးလေးတှေ တုံ့ဆိုငျးနကွေရသညျ..။ မသိမသာလေး ကှတကှတ ဖွဈနရေရှာလသေညျ..။ ကိုသကျအောငျ သနား သှားမိလသေညျ..။
“ ဒီညတော့ ရှာတောငျပိုငျး ငလငျြလုပျပွီ…ဟေ့..” ကာလသားတဈခြို့က ကိုသကျအောငျနား ကပျကာ စကွနောကျကွသညျ..။ ကို သကျအောငျက ပွုံးပွီး အသာနလေိုကျသညျ..။ ခှေးမသားလေးတှေ ညက ကမ်ဘာ တဈခွမျး စောငျးသှားတာ မှ မသိလိုကျကွ တာ..။ “ မိနျးမရေ….ပစ်စညျးတှေ ..သှားပို့ကွရအောငျ….” “ ကို့ ဖာသာ သှားပို့တော့….သူမြား လမျး မလြှောကျနိုငျတော့ဘူး…”
“ ဟောဗြ…ဒါဆို…ကိုယျတဈယောကျထဲ..ရယျ….” “ သှားပေါ့…ဘာလို့ သူမြား …လမျးမလြှောကျနိုငျအောငျ လုပျသေးလဲ…လို့….” ကိုယျ့ရှူးကိုယျပတျပွီး ကာလသားအခြို့နဲ့ ပစ်စညျးမြား လိုကျပို့…ငှါးထားသော ပစ်စညျးမြား အပြောကျအရှ စဈနှငျ့ မိုးခြုပျသှားလေ သညျ..။ ထမငျးစား ရမေိုးခြိုးပွီးတော့ ည ၈ နာရီ…။ “ ပှဲ မစသေးဘူးလား…ကိုသကျအောငျ…” ရငျးနှီးနသေော ခွောကျပေါငျ ကွညျဝငျးက နောကျသညျ..။
“ ပှဲက မနကေ့ထဲက ပွီးသှားတာ..ဟ…၊ ဒီည နငျတို့ ကာလသားတှေ ခြောငျးမယျ မို့လား …အေး…ဒို့ သိုးနအေောငျ အိပျမှာ…..” “ သကှော…တောကျ….ဟား ဟား..ဟား…ဟား..” ထိုနကေ့ တကယျလညျး ဘာမှ မလုပျနိုငျပဲ ခွပေဈလကျပဈ အိပျပဈလိုကျကွ သညျ..။ ဘုမသိ ဘမသိ ခွငျကိုကျခံပွီး လာခြောငျးကွသော ခွောကျစောငျးနှငျ့ ယောငျပှ အရကျမူးမူးနှငျ့ အိပျပြျောသှားကာ မနကျ လေးနာရီ တုံးခေါကျမှ အိမျအောကျက ထှကျပွေးခဲ့ကွရသညျဟု နောကျမှ သိရလသေညျ..။
“ ကိုကွီး….ထမငျး စားမယျလေ….” အလယျ…ဘယျသူသငျပေးလိုကျသလဲ မသိ..။ အချေါအဝျေါလေးတှေ ပွောငျးသှားသညျ..။ ကိုသကျအောငျ ကွညျနူး ကနြေပျစှာ ထမငျးစားသညျ..။ “ ညညျးကို ဘယျသူချေါခိုငျးတာလဲ…အဲ့ဒီလို…” “ ကိုယျ့ဖာသာ …ချေါ တာ…ဘာလဲ ..မကွိုကျဖူးလား…ဒါဖွငျ့ ..ဦးပဲ…ပွနျချေါရမလား..“ “ ဟဲ့…အို…မကွိုကျလို့ မုတျပါဘူး…နားထောငျလို့ ကောငျးလှနျး လို့…“ အသကျကှာလှနျးသော အိမျထောငျဖကျမြားမို့ …အပွောအဆို အနအေထိုငျ ကအစ တဈပနျး ရုံးလှနျးလှသညျ..။ အပွော ကလကျသလိုလို စောကျပေါကွီးပဲ ဖွဈနရေသလိုလို တဈမြိုးတော့ တဈမြိုးကွီး…။ “ ကိုကွီး…က မကျြနှာကွီး…တညျမထား နဲ့..ကှာ…သူမြား ကွောကျတယျ…“ အဲ့လိုမြား မညုလိုကျနှငျ့ …။ ကိုသကျအောငျ မကျြနှာမှ သိက်ခာသမာဓိ အလှာလိုကျ အလှာ လိုကျ ကှာကသြှားကွရသညျ..။
“ ကိုကွီးကို …သူမြား အရမျး ..အရမျး..ခဈြသှားပွီ…သိလား…” “ ဟငျ…ဟုတျလား….ဘယျတုနျးကလဲ…ဆိုစမျး…“ “ မင်ျဂလာမ ဆောငျခငျ ည..က….ကဲ သိပလား…..” ဟုတျပါ့ဗြာ…။ ဒါကွောငျ့ ပညာရှိစကားမြား တယျမှနျကွသကိုး…။ မခိုးခငျလိုး..၊ မလိုးခငျ ထိုး…၊ မထိုးခငျ နမျး..၊ မနမျးခငျ ဖကျ…တဲ့…။ အမလေးလေး…နျော…၊ ဒီဟာမလေးနှယျ ဗြာ…။ ဒီလောကျကွီး နာကငျြ ကိုကျခဲပွီးမှ ခံစားရတဲ့ အခဈြအရသာကို တပျမကျလှနျးလှပါတယျ…။ ကိုသကျအောငျကတော့ စပျဖွငျးဖွငျးနှငျ့ ထိပျက နာကငျြနဆေဲ…။
တောဓလဆေို့တော့လဲ ..တောအနအေတိုငျး နတေတျအောငျ ကငျြ့ရပွနျသညျ..။ ထငျးခှေ ရခေပျ…နှားကြောငျး အလုပျမြားနှငျ့ မွေ ပေါကျမွောငျးတူး တောငျယာအလုပျတှကေ ကိုသကျအောငျ အဖို့ ယခုမှ စတငျ ရငျးနှီးရသော အလုပျမြားမို့ ဖြားရပွနျသညျ…။ “ သကျအောငျရယျ..ဒါ..မိုးထဲ ရထေဲ အခြိနျကှ…မငျးက ဘာလို့ မြား ဖြားနရေပွနျတာတုနျး..ဟ…..ငတို့တုနျးကဆို …တဈလ တိတိ..ခွငျထောငျထဲက မထှကျဖူး..မောငျ…” ဘိုးလေးခဈြက ရယျစရာ အလှနျပွောသညျ..။ ခှေးမက ထိုစကားကွားသောအခါ ကိုသကျအောငျ နားဝသို့ ကပျပွီး…..“ ..နှာဗူးကွီး…..” ဟု တိုးတိုးပွောသညျ..။ ကိုသကျအောငျက ရယျနသေညျ..။
“ ကိုကွီး…ပဈသှားရငျ…သူမြား တကယျ သပေဈမှာ…သိရဲ့လား….” “ဟငျ…ဘယျ့နှယျဟာ စိတျကူးပေါကျပွနျ တာလဲကှာ…” “ ကွိုပွောထားတာ…ဘာစိတျကူး မှ ပေါကျလို့ မဟုတျဖူး…“ “ ခဈြလို့မှ ယူထားပွီးပွီပဲကှယျ…ဘယျ ပဈရကျမှာလဲ…“ “ အငျးပါ… အငျးပါ…မပဈရငျ ပွီးတာပါပဲ…တျော….” သူ့စကားလုံးတှကေ အသဲမှ လာမှနျး ကိုသကျအောငျ သိသညျ..။ စာမတတျ ပမေတတျ စကားတနျဆာ မဆငျတတျပွနျတော့ စကားလုံးတှကေ မလှ…။ တျော တို့ တော့ တို့ ငါ တို့ သုံးလရှေိ့သညျမို့ ကွီးသူနဲ့ ငယျသူ နားထောငျရသောအခါ အဆငျမပွခေငျြပေ…။ သို့သျော ကိုသကျအောငျ ဖွညျ့စှကျ နားထောငျတတျခဲ့သညျ..။
ကံကွမ်မာသညျ ရဟတျလို လညျပတျတတျသညျ..ဟု ဆိုကွ၏..။ ကိုသကျအောငျ အကွှငျးမဲ့ လကျခံခငျြပါသညျ..။ ကမ်ဘာတဈဖကျ ခွမျး ၌ အပြျောကလေးမြား ဝစေီနစေဉျမှာ သညျဘကျခွမျး ၌ အလှမျးတေးဖှဲရနျ ကံကွမ်မာက ဇယားခထြားပွီး ဖွဈနတေတျသညျ..။ “ ဦး….ကနြေျာ့ နာမယျ..သိနျးတိုးပါ…တောရှာလေး ရှာသားပါ..။ ရနျကုနျမှာ အလုပျသှားလုပျတာ…၂ နှဈပဲ ရှိပါသေးတယျ…၊ အခု ရှာကို ပွနျလာတာပါ..၊ အလညျပဲ ဆိုပါတော့…“ အဲဒီ..သိနျးတိုးက ခှေးမနဲ့ ငယျရီးစားတဲ့ဗြာ…။ ကိုသကျအောငျ ဘယျသိပါ့မလဲ…။ အိမျပျေါလာတော့လညျး ဧညျ့ခံရတာပဲပေါ့..။ အဲ…ခှေးမလညျး တောထဲက ပွနျလာရော…
“ ဟငျ…ကိုရငျ သိနျးတိုး…..ဟယျ…” အားရဝမျးသာကွီး ခှေးမ ပွေးတကျလာတယျ..။ ဝမျးနညျး ပကျလကျကွီး မကျြနှာပကျြသှား တယျ..။ ကိုသကျအောငျ ဒါတော့ သတိထားမိတယျ..။ “ နငျ…နကေောငျးတယျနျော…. ခှေးမ…” “ အငျး….ကောငျးပါတယျ….” “ မင်ျဂလာဆောငျတာတောငျ ငါ့ကို မဖိတျဘူး…ဟာ…” “ လူကွီးတှေ အမွနျ စီစဉျကွတာ..ဟ…” ကိုငျး…ကိုသကျအောငျ ရှထေ့ားပွီး ပွောနကွေတဲ့ စကားတှေ လေ…။ ကိုသကျအောငျ ဖွေးလေးစှာ ထရပျလိုကျသညျ..။
“ သိနျးတိုး….စကားပွောရဈဦး ကှာ…..ဦး ရသှေားခြိုးလိုကျအုံးမယျ…” “ အိုး….မိုးခြုပျနမှေ ..မခြိုးနဲ့…ပွနျဖြားနအေုံးမယျ…” ကို သကျအောငျက သညျစကားတှကေို သိနျးတိုးရှေ့၌ အာဏာ ပွခငျြ၍ သာ သုံးသော စကားဟု နားလညျလိုကျသညျ..။ သိနျးတိုး ကတော့ သူ့လငျအတှကျ စိုးရိမျတတျလိုကျတာ ခှေးမရယျ….လို့ တှေးသညျ..။ ကိုသကျအောငျက ခနျ့ညားရငျ့ကကျြစှာ ပွုံးရငျး အိမျပျေါမှ ဆငျးလိုကျသညျ..။ ခှေးမနှငျ့ သိနျးတိုးက သူသှားရာသို့ ငေးမိကွသညျ..။
“ ခှေးမ…နငျ ..ဒီလူကွီးကို ဘာလို့ ယူတာလဲ..ဟငျ….” “ ခဈြလို့ပေါ့ဟဲ့….သိနျးတိုးရဲ့…မခဈြပဲနဲ့ ညားမလား….“ “ နငျ…ငါ့ကိုတော့ မစဉျးစားဘူးပေါ့…ဟုတျလား….” “ အေး….ငါ မစဉျးစားခဲ့မိဘူး…” “ ရကျစကျလိုကျတာ….ခှေးမ ရယျ…..“ ပွောပါ …သိနျး တိုး..နငျပွောခငျြသလို ပွောသာပွောပါတော့…။ ငါ့ဘဝက တှယျရာမဲ့ ဗဒေါ…ရမှော တှတေဲ့ အမှိုကျသရိုကျမှနျသမြှ တှယျမိကပျမိ တာ..ငါ့အပွဈတဲ့လား…သိနျးတိုးရယျ…။ ဒါ..ခှေးမအတှေး…ဒါပဲ…လူတှမှော အဲဒီ အတှေးနဲ့ ကိုယျလိုရာ ဆှဲယူခဲ့တတျကွတာက… အမှား…။
“ ငါ သိပျမှားသှားပွီ….ကိုသကျ…” “ ရျော…ဖွဈရပွနျ ပွီ….” “ ဒီကောငျမလေးမှာ ရီးစားရှိနတော …မငျးမသိဘူးလား…..၊ ခုတော့ ငါက လူဆိုးကွီးလိုလို…ငှရှေငျကွေးရှငျကွီးက မတရား သိမျးပိုကျထားသလိုလို…” “ ဟာ….ရီးစားမရှိပါဘူး….ဘယျသူပွော လဲ…..“ “ ဟ…မနကေ့ ငါ့အိမျလာလညျတယျကှ….သိနျးတိုး တဲ့….” “ ဟာကှာ….အလကား ကောငျ ..ဖဲသမား…..ကောငျမလေးကို တဖကျသတျကွိုကျနတော….မဟုတျတာတှေ..ဗြာ…” ခကျသညျ…။ ကိုသကျအောငျလို လူစားကလညျး အရှားသား…။ အခဈြနဲ့ စပျလဉျြး၍ ဒဿဂီရိလိုနရောမြိုးက သူမကခငျြ..၊ ရုပျရှငျတှေ ဇာတျတှထေဲ၌ ထိုသို့ သရုပျဆောငျသူမြားကိုလညျး အပွငျမှာပါ သူလိုကျပွီး မုနျးတတျသညျ..။
ဘာပဲ ပွောပွော သိနျးတိုးနှငျ့ ခှေးမတို့ ငယျစဉျက ဇာတျလမျးကလေး ရှိခဲ့ရမညျဟု တော့ သူက တှေးယူသညျ..။ “ ငါက မိနျးမတှေ အမြားကွီး ကွုံလာခဲ့ဖူးတယျ…..ခှေးမ သိလား…၊ ငါလိုကောငျက ငါ့အခဈြကို စျောကားရဲရငျ ငါက ဆယျခါပွနျ စျောကားပွတတျတဲ့ လူဆိုတာ…မငျးစှဲစှဲမွဲမွဲ မှတျထား…သိလား…..” ခှေးမ တဲ့…၊ သူမကွိုကျတဲ့ နာမယျကွီးကို ချေါတယျလေ…။ ခှေးမ ငိုခငျြတယျ..။ ဟို နှမလိုး သိနျးတိုးလာသှားပွီးကထဲက ပွဿနာ တကျတော့တာပဲ..။
ခှေးမ သူနားလညျအောငျ ပွောပွခငျြပါတယျ..။ ဒါပမေယျ့ ခှေးမ မပွောတတျဖူး…။ သူ့ကိုလဲ …ခှေးမ စှဲစှဲလမျးလမျး ခဈြနမေိပါ ပွီ…ဆိုတာလဲ မရှကျမကွောကျ ပွောဖူးရဲ့ သားနဲ့…။ ညဘကျ တှလေညျး ပွနျမအိပျတာ…မြားလာပွီ…။ ညဘကျ ရနေံဆီ ကုနျတဲ့ အထိ …ခှေးမ သူ့ကို ထိုငျစောငျ့ ပါတယျ..။ ဒီညလညျး ဝတ်တရားမ ပကျြ လငျကို ထိုငျစောငျ့ရငျး အိမျရှခေ့နျးမှာ မှေးခနဲ အိပျပြျောသှား ခဲ့တယျ…။
လေးလံတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကွီး တဈခုက ခှေးမဗိုကျပျေါမှာ တကျဖိလာတော့မှ လနျ့နိုးသှားမိတယျ..။ အရကျနံ့ကလညျး မှနျလို့….။ မီးခှကျ ကလညျး ငွိမျးနပွေီ…။ ခှေးမ သူ့ကို အတငျး တှနျးပဈလိုကျတယျ..။ “ သှားစမျးပါ….အိမျမှနျး ယာမှနျး မသိပဲနဲ့….” သူက ဘာမှ ပွနျမပွောပဲ ခှေးမ ပေါငျကွားထဲကိုသာ တှငျတှငျ နှိုကျနတေယျ…။ သုံးလေးရကျကွီးတောငျ ဘာမှ မလုပျရတော့ သူမနနေိုငျဘူး လေ….။ “ အခုမှ ငမျးငမျး တကျမနနေဲ့…..ဟှနျး….” သူ့အသကျရှူသံတှကေ အရမျးပွငျးတာပဲ…။ မနားမနပေဲ ထမီနားကို ဆှဲလှနျ ပွီး လုပျတယျ…။ “ ပွှတျ….ပွှတျ…..စှပျ….ဖှတျ….ဖတျ….ဖတျ….ပွှတ.ျ…စှပျ….“
“ အငျ့…..အငျ့……အငျ့…ဖွေး…..ဖွေး ဖွေး..လုပျစမျး ပါ….တကယျပဲ…ရှငျ…” လမျးကွမျးမှာ ကားစီးရသလိုပဲ မနားတမျး ဆောငျ့ နတော…အိမျကွီးကို သိမျ့သိမျ့ခါနတောပါပဲ….။ ကမြခွနှေဈခြောငျးကို ဆှဲမပွီး ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျ အားရပါးရ ဆောငျ့တဲ့ဒဏျဟာ အတျောထိတယျ ရှငျ…။ ကမြလညျး ကိုယျ့လငျက လိုလိုခငျြခငျြ အငမျးမရလုပျတာလေးကိုပဲ…အားရကနြေပျစှာ ခံနမေိခဲ့ပါ တယျ…။
“ ပွှတျ…ပွှတျ……စှပျ…ဖှတျ…..ပွှတျ…..ပွှတျ…..“ “ အငျ့…အငျ့…..အ…အ…အငျ့……….“ လငျမယားလိုးတာ အဆနျးမှ မဟုတျ တာ…။ ဘာသံတှေ ထှကျထှကျဆိုပွီး…ကမြလဲ သူ့ကို မတားဘူး… လှတျပေးထားမိတယျ…။ တဈခါတဈလေ သူက ကမြ နို့နှဈလုံး ကို မမှီမကမျး လှမျးဆှဲနလေို့ ကမြက အကငြ်္ီ ကယျြသီးတှေ ဖွုတျပေးမိပါသေးတယျ…။ “ အိ…အိ…..အား….အား…….အငျ့… ဟငျ့..အငျ့…အငျး……“ အံကွိတျပွီး ညာသံပေး ဆောငျ့လိုးရငျးက သူပွီးသှားပါတယ.ျ..။ ကမြက ဆတျတငံ့ငံ့နဲ့ ကနျြနသေေးလို့ သူ့ခါးကို ဆှဲပွီး ထပျဆောငျ့ခိုငျးရပွနျတယျ…။ သူကလဲ ထပျဆောငျ့ လိုးပေးပါတယျ….။
“ ကဲ…မီးခှကျ ထှနျးစမျး…ယောငျပှ….မငျးတို့ အမွငျပဲ…” လကျနှိပျဓါတျမီး အရောငျနဲ့ သိနျးတိုးမကျြနှာကွီးဟာ ကမြ အပျေါမှာ အထငျးသား ခှလကျြသားကွီး ရှိနပေါတော့တယျ..။ “ ဟငျ…..မအလေိုး….ကိုယျ့မကေိုလိုး….ကဲ…ဖုနျး…အငျ့….” ပါးစပျကလဲ ဆဲ ပွီး ကမြ ဆောငျ့ကနျ ပဈလိုကျပါတယျ…။ “ သူ…..သူ ချေါလို့ လာတာပါဗြာ….သူ ချေါလို့ လာရတာပါ…..” သိနျးတိုး လူယုတျမာ…၊ ကမြကို စောကျရှကျခှဲတယျ..။ ကမြ အသားတှေ တဆတျဆတျ တုနျပွီး ဒေါသတှေ ဖွဈလာမိတယျ…။
“ ငါ့လငျမှတျလို့…နငျ့ကို ခံတာ ဟဲ့…..မအလေိုး ရဲ့…” သိနျးတိုးကို လူကွီးတှေ ချေါသှားကွတယျ..။ သူက ကမြနဲ့ လူကွီး သုံးလေး ယောကျ ထိုငျခိုငျးပွီး …ပွောပါတယျ…။ “ ကြုပျ..အရှယျမတူတာကို ယူခဲ့မိတာ…ပထမ အမှား…နျော…၊ နောကျ ရီးစား ရှိ…မရှိ….မ စုံစမျးခဲ့တာ ..ဒုတိယ အမှား…..” “ မဟုတျဘူး…..ကိုသကျအောငျ ..ကနြျော ရှငျးပွမယျ….” “ ဘာရှငျးပွအုံးမှာလဲ…ကို အေး….အခုပဲ..တတျလပျကွီး မိနတော…ခငျဗြားတို့ မကျြစိတှေ လီးနဲ့ ထိုးထားလို့လား…..” “ ဟာဗြာ…..ကြုပျတို့က ပွရော ပွေ ကွောငျး …” “ မလိုဘူး….ကြုပျ လူအ မဟုတျဘူး…. ပွီးတော့ ကြုပျပညာ အရညျအခငျြးနဲ့…လဲ…မိနျးမ မရှားဘူး…၊ ဒါပဲ… အဲဒီ ကောငျနဲ့…ပေးစားလိုကျကွ…” ပွောပွီး…ကိုသကျအောငျ အိမျပျေါမှ ခုနျဆငျး ထှကျသှားသညျ..။
“ မိုကျလိုကျတာ….ခှေးမရယျ…သိနျးတိုးနဲ့ ဘယျလိုလုပျပွီး…..” “ မဟုတျဖူး….မဟုတျဖူး…..ကမြ ကိုသကျအောငျ မှတျလို့ ငွိမျနေ တာ…..” “ သပေါလားဟာ….ကိုယျ့လငျ နဲ့ ဒီပွငျ ယောကျြားတောငျ နငျမခှဲတတျဘူးလား….ခှေးမရယျ….တောရှာတဈရှာလုံးတော့ ကြျောပါပွီကှာ….” ကမြ သူတို့နားလညျအောငျ ရှငျးမပွတတျဘူး…။ လကျပူးလကျကွပျကွီး တကျလုပျနတေုနျး မိသှားတာဆို တော့လညျး ကမြ ဘာပွောတတျတော့မှာလညျး….အရပျကတို့ရယျ….။
မိနျးမတှကေို ..ကိုသကျအောငျ မယုံခငျြတော့ ပွီ…။ ညအခါ သာသော လသညျ အေးမွသညျ..။ နအေ့ခါ ထှနျးလငျးသော နမေငျး သညျ ပူလောငျ ပွငျးပွသညျ..။ နှတှေငျ နပေူပွီး ဆောငျးတှငျ နှငျးကကြာ မိုးတှငျ မိုးရှာသှနျးမု ရှိသညျ ဆိုသော သဘာဝ ဓမ်မ တရား ကို မိနျးမတှေ ကြိနျတှယျ ပွောအုနျး…ကိုသကျအောငျ မယုံခငျြတော့ပါ…။ အခါ ခပျသိမျး ခမျြးမွမေု့ကို လိုလားတောငျ့တကွသော လူသားမြားဆီသို့ သောကဝဒေနာသညျ မဖိတျချေါပဲ အလညျလာတတျကွောငျး ကိုတော့ လကျခံလိုကျရသညျ..။
တောရှာလေး ရှာ၌ သူမကျြနှာ ဘယျလို ထားရမှနျး မသိတော့ ..။ ရှကျလိုကျသညျမှာ လညျး ကနျဘောငျသို့ ရပေငျ ထှကျမခြိုးရဲ လောကျအောငျ ဖွဈသှားသညျ..။ ထို့ကွောငျ့ နောကျတဈနတှေ့ငျပငျ တောရှာလေးကို အပွီးအပိုငျ စှနျ့ခှာရနျ ဆုံးဖွတျခဲ့ရသညျ..။ “ ကိုကွီး….ခှေးမကို မပေါငျးနိုငျတော့ဘူးပေါ့….နျော…” “ ဟုတျတယျ….နငျ့လို ဖငျသရမျးတဲ့ ဟာမမြိုး မလိုခငျြဖူး…..” “ ပွောရကျ လိုကျတာ….ကိုကွီး ရယျ….၊ ခှေးမ လငျငယျ နတော မဟုတျဘူး….၊ ကိုကွီးလာတာပဲ ဆိုပွီး….ဟို ဥစ်စာ……” “ တျောစမျး ပါ….ဟာ……လငျငယျနတော မဟုတျပဲ ..အပြျောခံ တာပေါ့…ဟုတျလား…….၊ အေး….ထမငျးတဈလုပျ ရှာမကြှေးရပဲ….အဲသလို ကုနျးတဲ့မိနျးမမြိုးပဲ ရှာပွီး လုပျတော့မယျ….၊ ဒါပမေယျ့…နငျ့လို မိနျးမပဲ… ရှိမှာပါ…..ရနျကုနျမှာတောငျ…ပိုကျဆံပေးမှ ခံတာ….နငျ က အပြျောခံတာ ဆိုတော့ ..”
“ မဟုတျဖူး….အဲဒီလို မပွောပါနဲ့….မဟုတျဖူး…..” ခှေးမ မဟုတျဖူး ဆိုတာပဲ ငွငျးနိုငျတယျ..။ ကိုကွီး နားလညျအောငျ မပွောတတျ ဘူး…။ ရငျဝ မှာ အောငျ့ပွီး… နာကငျြ ပူလောငျနတေယျ…။ ကိုကွီး ရှာမှ အပွီးတိုငျ ကြောခိုငျးထှကျသှားခဲ့လပွေီ…။ ခှေးမ နှငျ့ သိနျးတိုးက လူကွီးမြားက ဆကျလကျ နရောခပြေးသညျ..။ သိနျးတိုးကလညျး သူ့အပွဈကို ဝနျခတြောငျးပနျသညျ..။ “ ငါ….နငျ့ ကို ခဈြလှနျးလို့ပါ…ခှေးမရယျ…ငါ…ငါ…နငျ့ကိုလေ..သအေထိ ပေါငျးသငျးသှားမှာပါ……” ယုံပါတယျ..၊ သိနျးတိုး စကားတှကေို ခှေးမ ယုံပါတယျ…။ စာရိတ်တ ပိုငျးမှာ အရကျသောကျတာ ဖဲရိုကျတတျတာကလှဲပွီး..သိနျးတိုးမှာ ဘာအပွဈမှ မရှိဘူး…။ ခှေးမ လကျခံခဲ့ရပွနျတယျ…လေ..။
“ အိပျကွရအောငျ…..ခှေးမရယျ….နျော…” ဒါပါပဲ…၊ သူတို့ယောကျြားတှရေဲ့ ဆန်ဒက မိနျးမယူတယျဆိုတာ… ဒါကိုပဲ အဓိက ထား ကွတာပဲ မဟုတျလားရှငျ…။ သိနျးတိုးက ကမြကို အားရပါးရ စပျယှကျနပေမေယျ့ ကမြရဲ့ အင်ျဂါဇတျထဲမှာ အရသာ မတှလှေ့ဘူး..။ စိတျမပါတာလဲ…ပါမယျ ထငျပါတယျ..။ သိနျးတိုးက လူပြိုပီပီ ကမြကို အကွိမျကွိမျ စပျယှကျပါတယျ..။ ကမြ မှေးခနဲ..အိပျပြျောတဲ့ အထိ သူ ကွာလှပါတယျ..။ ကွာတော့ စောကျပတျလညျး ကြိနျးစပျလာတယျ..။ အရတှေလေညျး အိုငျထှနျးနတောပါပဲ…။
“ ခှေးမ…နငျ ငါ့လီးကို စုပျပေးပါလား…ဟငျ….” “ ဘာ….ဘာ…မအလေိုး…နှမလိုး…ဟငျ…နငျက လိုးလို့ အားမရသေးဘူး…စုပျခိုငျး ရသလား….မအေ….” ကမြ အသားတှေ ဇိုးဇိုးဆတျဆတျ တုနျလာတဲ့အထိ ရှကျဒေါသတှေ ဖွဈရပါတယျ…။ ဒီလောကျ ညဈပတျ နံစျောနတေဲ့ သူ့လီးကွီးကို ကမြ ဘယျတော့မှ မစုပျဖူး…။ သိနျးတိုးက အပျေါစီး ရထားသူပီပီ..ရယျပါတယျ…။ “ အေးလေ….မစုပျ ခငျြလဲ နပေေါ့…ငါကတော့ စုပျတတျတဲ့…နောကျတဈယောကျ ထပျရှာရုံပဲ ပေါ့….ဟား ဟား….” “ ဟငျ….လူယုတျမာ….သဒေါငျး စား…”
ကမြတို့ နှဈယောကျ အိပျခနျးထဲမှာ သတျပုတျကွပါတယျ…။ မိနျးမနဲ့ ယောကျြား ဆိုတော့လဲ…ကမြပဲ ငိုရတာပဲပေါ့…။ ကမြ ပြော့ ခှသှေားတော့ သိနျးတိုး ဘာလုပျတယျ မှတျသလဲ…..။ ကမြ စောကျဖုတျကို လြှာနဲ့ ယကျတာ….. “ အ…အ…ဟိ…..အ…..အ….ယား တယျ…..အလိုလေးလေး…..အိ….အိ….အ…” အိုရှငျ…..အစလေ့ေးကို …စှနျပလှနျစိ စုပျသလို စုပျပေးနေ တာမြား….ကမြတော့ သေးတောငျ ထှကျခငျြပါတယျ…။ ဒါပမေယျ့…ခံလို့ကောငျးလှပါတယျ…။ အခုန ရနျဖွဈပွီး သတျပုတျခဲ့ကွ တာတှေ ကိုလဲ ကမြ မသှေ့ားတယျ…။ ကမြ ခွထေောကျနှဈဖကျကို ဘေးကို ဖွဲကားပွီး စောကျဖုတျယကျပေးနတေဲ့ သိနျးတိုး ခေါငျး ကို စောကျပတျကွားထဲ အတငျးပဲ ဖိခပြွီး ဆှဲဆှဲ ဆောငျ့နမေိတော့တယျ….။
“ပွတျ…..ပလပျ…..စှပျ….စှပျ…ပွှတျ…..ပလပျ…….” သိနျးတိုးဟာ မရှံမရှာနဲ့ ကမြဟာလေးကို တပွတျပွတျနဲ့ ယကျပေးနတေယျ..။ ကမြလညျး အသဲတုံ အူယား ခံစားရတဲ့ ဝဒေနာက ဘယျဟာနဲ့မှ မတူတာမို့ တဟငျးဟငျး နဲ့ ငနျးဖမျးသလို ငွီးရငျး ပေါငျနှဈဖကျကို အစှမျးကုနျ ဖွဲကားပွီး ခံပေးနမေိပါတော့တယျ…။ အရတှေေ ရှဲအိုငျလာတဲ့ ကမြဟာလေးကို သူက စိတျရှိလကျရှိ တကျလိုးပွနျပါ တယျ ရှငျ..။ ကမြ အလူးအလဲ ကောငျးသှားမိခဲ့ရပါတယျ..။ အင်ျဂလိပျဆေးလို ဆေးပွားတှကေို စှဲသှားပွီးရငျ နောကျ သူ့ထကျပြော့ တဲ့ဆေးဆိုရငျ အာနိသငျ မတိုးတော့ဘူးဆိုတာ ရှငျတို့ ကွားဖူးကွမှာပေါ့နျော….၊ ကမြလေ အခုဆို အယကျခံ လြှာစောငျးအထိုးခံရ ပွီးမှ အလိုးခံတတျနတေယျ…ရှငျ့…။
သူ မယကျပေးရငျ ကမြ အာသာမပွတေော့ဘူး..။ သညျတော့ သိနျးတိုးကလညျး ကမြကို အကွပျကိုငျတယျ..။ သူ့ဟာကို စုပျပေးရ မယျ ပေါ့…။ “ နငျ….ရစေငျအောငျ ဆေးခဲ့…ဟာ….” သိနျးတိုး နောကျဖေး ရကေပွငျမှာ သူ့လီးကို ရဆေေး ဆပျပွာတိုကျပွီး အိပျခနျးထဲ ပွနျဝငျလာတယျ..။ ပထမတော့ သူ့လီးကွီးကို ကိုငျပွီး ပါးစပျနဲ့တရေ့မှာကို ကမြ ဝနျလေးလှနျးနတေယျ…။ ရှံသလိုကွီး လဲ ခံစားရတယျ..။ မကျြစိမှိတျပွီး ငုံ့စုပျလိုကျတော့ ရုတျတရကျ သိနျးတိုးက ကမြ ဇကျပိုးကို ခြုပျကိုငျပွီး ဖငျလိုးသလို ဆောငျ့လိုး လိုကျပါတော့တယျ ရှငျ…။ ကမြလဲ မကျြရညျတှေ ဝိုငျးသှားပွီး ဒေါသ ဖွဈသှားမိပါတယျ..။ ဒါပမေယျ့ ဝကျဖွဈမှတော့ ခြေးမ ကွောကျတော့ပါဘူး…လေ…။ ပါးစပျထဲ ရောကျနတေဲ့ သူ့လီးကို ကမြ လြှာနဲ့ ပှတျသပျထိုးဆှ ကလိပေးလိုကျမိပါတယျ..။ သူတို့ ယောကျြားတှဟောလဲ ဒါမြိုးကို အတျောမကျမောကွတာပါလား….ရှငျ…။
သိနျးတိုး မကျြနှာဟာ ရုံ့မဲ့ပွီး တှနျ့လိမျနပေါတော့တယျ..။ ကမြတို့နှဈယောကျရဲ့ အိမျထောငျရေးမှာ အစုပျအယကျတှသော မပါခဲ့ ရငျ ကမြတို့ လငျမယား ကှဲကွမှာ အမှနျပါပဲ…။ ခုတော့ သူ့စကားနဲ့… ဘာဂြာမုတျတာလေးကလဲ အသဲခိုကျအောငျ စှဲလနျးခဲ့ရသလို ကမြ ပုလှေ မုတျပေးတာကိုလဲ သူ အစှဲကွီး စှဲလနျးသှားခဲ့ပါပွီ…။ တဈခါတဈရံ ကိုကွီးကို ကမြ သတိရတတျပါတယျ..။ ဒါပမေယျ့ သိနျးတိုးနဲ့ ယှဉျပွီး ဘယျသူ့ကို ပေါငျးသငျးမလဲလို့ မေးလာကွရငျ ကမြ ရငျနာနာနဲ့ သိနျးတိုးကိုပဲ လကျဆှဲပွမိတော့မှာ အမှနျပါပဲ ရှငျ…။ ကမြအတှကျ သိနျးတိုးဟာ အကောငျးဆုံး အလိုးသမား တဈယောကျ ဖွဈခဲ့ပါပွီ..။
ကမြနဲ့ သိနျးတိုးတို့ဟာ နတှေ့ေ ညတှေ သိပျမရှေးနကွေတော့ပါဘူး..။ တဈခါတဈလေ တောငျယာထဲကွုံရငျ တောငျယာထဲ..၊ စမျးခြောငျးထဲ ကွုံရငျ စမျးခြောငျးထဲ ၊ ခွုံ ကောငျးလို့ စိတျထလာရငျလညျး ထလုပျလိုကျကွတာပဲ….။ ဒါပမေယျ့ ကမြတို့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ငွီးငှမေ့သှားဘူး..။ သူ့ ကို မမွငျရရငျ ထှကျသှားပွီလားလို့ ကမြ စိုးရိမျနတေတျပါပွီ..။ သူကလညျး ကမြကို မတှတေ့ာနဲ့ ရှာစဉျလြှောကျပွီး ရှာတတျတော့ တာပါပဲ…ရှငျ..။
“ ခှေးမလေးရယျ… ငါ့ကို မုနျးမသှားနဲ့နျော….“ “ ငါပွောရမဲ့ စကားပါ….သိနျးတိုးရယျ….” “ နငျ့လူကွီးကို မလှမျးဘူး လား…..ဟငျ….” “ နငျ့ လိုသာ ယကျပေးရငျ…နငျ့တောငျ မစဉျးစားဘူး…” တကယျပါ…ရှငျ..၊ ကမြ အပိုတှေ ပွောနတော မဟုတျ ပါဘူး..၊ သိနျးတိုးလိုသာ ကိုကွီးက ကမြကို ယုယပေးရငျ ကိုကွီး ခွနေဲ့ကနျလှတျလဲ ကမြ လိုကျဖကျထားမှာ….။ ခုတော့ အပွုအစု အယုအယမှာ သိနျးတိုးဟာ ကိုကွီးထကျ သာလှနျနပွေီမို့ ကမြဘဝလေး နပြေျောလာပါပွီ….ရှငျ…။
ကိုသကျအောငျတဈယောကျတော့ လနှေငျရာ လှငျ့ခဲ့ရပွနျပါပွီ…။ ဘဝက ကွှပွေီးသဈရှကျ … လထေဲလှငျ့မြောနသေလို အဆုံးမရှိ အစမရှိ…။ ကိုယျ့ဘဝကို ဖွဈလိုရာဖွဈစေ ရှကျလှငျ့ တကျဖှငျ့ပွီး ခရီးနှငျပဈလိုကျခငျြသျောလညျး ခလေးတှကေ တနျးလနျး ရှိနပေေ သေးရာ သူတို့လေးတှေ အတှကျ စဉျးစားရပအေုံးမညျ..။ ကိုသကျအောငျအပျေါ ပုံ့ပုံ့သဘောထားတှေ အပွောငျးကွီး ပွောငျးလဲနေ မညျမှာ မုခြ ဖွဈသညျ..။
ထို့ကွောငျ့လညျး ပုံ့ပုံ့နှငျ့ တှရေ့နျ မကွိုးစားတော့ပေ..။ သားနှဈယောကျကို ကြောငျးသို့ပို့ပွီး သညျနှငျ့ ကိုသကျအောငျ အလုပျသှားရ သညျ..။ အလုပျက စာအုပျတိုကျတဈခုတှငျ သာမနျ စာစီသမားဘဝဖွငျ့ လုပျကိုငျနခွေငျး ဖွဈသညျ..။ စာရေးခငျြစိတျလညျး မရှိ..။ ရေးပွီးသာ စာမူမြားလညျး မကွိုကျ…။ ဟိုးယခငျက ထုတျဝသေူ ကိုမငျးမောငျလညျး ဘယျဆီရောကျနသေညျ မသိ..။ ဘဝကို ရစေုနျမှာ မြှောရငျး အလိုကျသငျ့အမောဖွနေသေလို…။ ဘာတဈခုမြှ ကွိုးကွိုးပမျးပမျး လုပျကိုငျလိုစိတျ မရှိဖွဈနခေဲ့ရသညျ..။
ဤသို့ အပျေါယံကွော ဘဝလေးမြှနှငျ့ ရငျဆိုငျ ရစေုနျမြှောနစေဉျ ရစေုနျမှာ မြောပါလာသော ခငျသကျမူ နှငျ့ ထပျမံ၍ ဆုံဖွဈကွရ ပွနျလသေညျ..။ ခငျသကျမူက ထမငျးဆိုငျ အငှါးရောငျး မိနျးခလေး စားပှဲထိုး ဆိုပါတော့…။ ကီလီဆိုသညျက လူစုံ …ဘဝစုံ..စရိုကျ စုံ ဆိုသညျ့ နရောမြိုး…။ အမရေိကနျပွညျက ကယျလီဖိုးနီးယားပွညျနယျလို အသေးအမှား ဒုစရိုကျတှကေ ဒုနဲ့ဒေး…။ ဖာသယျ ၊ ခါးပိုကျနှိုကျ သာမက အလဈသမား သူခိုးကွီးတှလေညျး ရှိသညျ..။ ခငျသကျမူတို့ ထမငျးဆိုငျလေးက ကီလီနှငျ့ မဝေး…။ ရထား လမျးအဟောငျးတဈခုကို မကျြနှာစာပွုကာ အလုပျသမား ပြံကဈြေးသညျနှငျ့ အနိမျ့စား အလုပျသမားတှအေတှကျ ငပိရေ တို့စရာ အားပွုကာ ဈေးပေါပေါနှငျ့ ရောငျးခပြေးနသေညျ့ ဆိုငျဖွဈသညျ..။ ကိုသကျအောငျကလညျး တဈခှကျတဈဖလားတော့ ပွနျခဖြွဈ နပွေီ ဖွဈသညျ..။
“ အရမျး မသောကျနဲ့လေ…အဈကို ….ထမငျးမစားနိုငျပဲ နအေုံးမယျ…” အနားကပျပွီး ဆိုငျရှငျမသိအောငျ သတိပေးတတျလာ သညျ..။ နစေ့ဉျ မကျြမှနျးတနျးမိလာတော့လညျး အကငျြ့စာရိတ်တ ပကျြစီးယိုယှငျးနကွေသော လူကွီးလူကောငျးလို ဖွဈနေ တော့သညျ..။ တဈခါတဈရံ ကိုသကျအောငျ ခငျသကျမူတို့ ဆိုငျ မရောကျဖွဈပေ…။ အလုပျမြားသဖွငျ့ ဆိုငျရှမှေ့ ကွာဇံသုတျနှငျ့ ဟငျးခါးဖွငျ့သာ တဈဝမျးတဈနအေ့တှကျ ပွီးပဈလိုကျတတျသညျ..။ “ မနကေ့ အသညျးအမွဈ ခနျြထားတာ အဈကို ဘာလို့ မလာ တာလဲ…..” “ အလုပျ မအားလို့….” ကိုသကျအောငျက မိနျးမတှေ ကို သိပျပွီး စောကျရော မဝငျခငျြတော့..။ အာပလာ စကားတှေ နှငျ့ မွှူဘို့ ခဘြို့လောကျသာ စဉျးစားနကွေသူမြား အဖွဈ သူ နားလညျ လကျခံထားခဲ့လသေညျ..။
ထို့ကွောငျ့လညျး ခငျသကျမူကို သိပျအရောမဝငျ..၊ ခပျမှနျမှနျ ခပျတနျးတနျးသာ နပွေီး သာမနျဈေးသညျတဈယောကျကို ဆကျဆံ သလိုသာ ဆကျဆံလသေညျ..။ ခငျသကျမူကလညျး မွငျရုံဖွငျ့ စိတျဝငျစားလောကျသော ရုပျရညျမြိုးတော့ မဟုတျ..။ သို့သျော ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျက ကာမဆန်ဒ အတှကျ စဉျးစားသူမြားအဖို့ ရှာမှ ရှားသော အခြိုးအဆဈ ဖွဈသညျ..။ ခါးဆဈဆီမှ ထဈပွီး ကားပွနျ့လာသော တငျပါးအစုံက ဝိုငျးစကျအိပဲ့နသေညျ..။ ရငျသားနှဈမှာက ပုံသှငျးထားသော ပနျးပုရုပျနှယျ မကွီးလှနျး မသေး လှနျးပဲ ကွှားရှားကော့ပြံနသေညျ..။ ခါးသေးသေးလေးက တငျပါးကွီး လုပျရမျးသှားလတေိုငျး ယိမျးနှဲ့ ကြိုးကသြှားတော့မညျ့ အလား ညှတျသှယျ ပြော့ပြောငျးလှနျးသညျ..။
တဈခါတဈရံ ထငျးဖွဈစေ ၊ ပနျးကနျခှကျရောကျဖွဈစေ တဈစုံတဈရာကို ကုနျးကောကျလိုကျသော အခါမြားတှငျ လှဈခနဲ မွငျ လိုကျရသော ယောကျြားတဈယောကျအဖို့ လှပျခနဲ ရငျထဲလှိုကျဖိုမောသှားစသေညျ..။ စိတျထဲ၌ ဤအနအေထားမြိုး ကုနျးပွီး ဖွုတျ လိုကျရလငျြ ဆိုသော အတှေးကလဲ မဆိုငျးမတှကွီး ဝငျရောကျလာအောငျ ဆှဲဆောငျမု ရှိလှနျးသညျ..။
ထိုမြှ ကွီးမားတငျးရငျးနသေော တငျပါးကွီးကို ကောကျညှငျးထုတျတဈထုပျလို ကဈြလဈြစှာ စုစညျးထားသော ထမီလေးအောကျမှ အတှငျးခံဘောငျးဘီလေး အရာက ထငျးနပွေနျသညျ..။ ထိုဘောငျးဘီအရာလေးကို မွငျရသညျကပငျ ခငျသကျမူသညျ လှယျ လှယျကူကူ ရနိုငျသော မိနျးခလေးတဈယောကျမဟုတျကွောငျး ကိုလညျး ပုရိသတို့ ရိပျစားမိကွလသေညျ..။ ကိုသကျအောငျ ကတော့ ခငျသကျမူ ဖငျကို မကွညျ့..။ ကွညျ့ခငျြစိတျ ဝငျလာသညျ့တိုငျလညျး စိတျကို ထိနျးခြုပျထားနိုငျသညျ..။ လူတဈခြို့က ခငျ သကျမူကို ကွညျ့ရငျး ထမငျးစားရနျ ရောကျလာကွခွငျး ဖွဈသညျ..။ ကိုသကျအောငျကတော့ အဝစား ငါးကပျြဆိုသညျကို သဘောကလြို့ ဖွဈသညျ..။
ယခုတလော ထမငျးဆိုငျဖကျ မရောကျဖွဈပွနျ…။ ဘုနျးကွီးလမျး အရကျဆိုငျ တဝိုကျ၌ ကိုသကျအောငျ ရောနှောနထေိုငျတတျနေ ပွနျသညျ..။ စိတျထဲ၌ တဈစုံတဈရာ လိုအပျနသေလို ခံစားလာရသဖွငျ့ အန်တရာယျကငျးသော ပစ်စညျးမြိုးကို ရှာဖှနေခွေငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျ..။ “ သူ့နာမယျက ခငျရီတဲ့….ကွကျသှနျရောငျးတယျ..အဈကို…ဈေးတော့ နညျးနညျး ပိုပေးရတယျ…၊ သူ့ယောကျြား အလဈမှာ လုပျတာ…၊ အန်တရယျတော့ ကငျးတယျ…” “ ဟာကှာ….ယောကျြားကွီးနဲ့…တော့ မလုပျခငျြဘူး…ကှာ….”
“ တခွားဆျောတှလေညျး ကနြျော မသိဘူး အဈကို….” သို့နှငျ့ ကိုသကျအောငျ ခငျရီနှငျ့ တှဖွေ့ဈကွသညျ..။ ကိုသကျအောငျက သူ့ ကို အကဲခပျသလို သူကလဲ ကိုသကျအောငျကို အကဲခပျသညျ..။ နှဈယောကျသား စဉျ့အိုးတနျး ဗော့တံတားထိပျ အထှကျပေါကျရှိ မုနျ့ဟငျးခါးဆိုငျမှာ ဆုံမိကွသညျ..။ “ ဒီကနေ့ ဘယျသှားကွမှာလဲ…အဈကို….” “ အာ……မသိဘူးလေ….ကြုပျက..အိမျ မရှိ ဘူး….” ခငျရီက နုတျခမျးလေးကို စူပဈလိုကျသညျ..။ မကျြမှောငျတှနျ့ကှေးပွီး ခွဆေောငျ့သလိုလေး ပွုလိုကျသေးသညျ.။
“ အဲဒါဆို…..သူမြားက ဘယျလိုကျရမှာတဲ့လဲ…ညနလေဲ ဆိုငျက ပွနျထှကျရအုံးမှာ…စိတျညဈလိုကျတာ…ဘာမှနျးလဲ မသိဘူး….” ခငျရီက ထိုသို့ညညျးလိုကျသညျနှငျ့ ကိုသကျအောငျက သူအမူအယာ ပွဈခြှဲခြှဲကို ကွညျ့ကာ တောငျပွီးသား လီးပငျ ပွနျသသှေားရ သညျ..။ “ ဒီလောကျလဲ စိတျညဈခံမနနေဲ့လေ…အခြိနျမရလဲ…နေ……” “ အဈကို….ဟေ့…အဈကို..နအေုံးလေ….ဒီမှာ……” ကို သကျအောငျ ပုခုံးကို ဆှဲရငျး ခငျရီ ဟိုသညျကွညျ့ရငျး တိုးတိုးလေး ကပျပွောလသေညျ..။ “ မွနျမွနျလေး ပွီးခငျြရငျတော့ ဟို….ဆနျ ဂိုဒေါငျနောကျမှာ ..တဲလေး ရှိတယျ…လုပျမလား…ဟငျ……” “ ဟာဗြာ….နပေစတေော့…..”
ကိုသကျအောငျ အတျောစိတျပိနျသှားသညျ..။ ဤမြှ စုတျပွတျပကြေံနသေော ပတျဝနျးကငျြ၌ ဘယျလို ဖီလငျလာမညျနညျး..။ ခငျရီ ထပျမံ မဆှဲမှီ…ကားလမျးကို ဖွတျကူးခဲ့သညျ..။ လူသှားလူလာ ရုပျထှေးနသေော ကမျးနားလမျးအတိုငျး ညောငျပငျလေးဈေးသို့ ဖွတျကူးခဲ့သညျ..။ “ အဈကို…..ဟေး….အဈကို…….” ခငျရီ အမှတျဖွငျ့ ကိုသကျအောငျ လှညျ့မကွညျ့..ခပျသှကျသှကျ လြှောကျ သညျ..။ အနောကျမှ တဖွတျဖွတျ ပွေးလိုကျလာသံကို ကွားရသညျ..။ လကျမောငျးကိုလညျး တငျးတငျး ဆှဲယူခွငျး ခံလိုကျရ သညျ..။
“ အဈကိုက နားမြားလေးသလား မသိဘူး….ချေါလိုကျရတာ….” “ ဟငျ…..မခငျသကျမူ……..” မပွုမပွငျ …နှမျးနယျမောဟိုကျစှာ ပွုံးနသေော အယဉျမကျြနှာလေးကို နီးကပျစှာ ရငျဆိုငျလိုကျရသညျ..။ ကိုသကျအောငျနှငျ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျမိမှ ခငျသကျမူက ရှကျရှံ့ စှာ လကျမောငျးကို လှတျသညျ..။ “ အဈကို….ဘယျသှားမလို့လဲ….ဟငျ….” “ အျော…..ကိစ်စ တဈခု ရှိလို့ပါ….ခငျသကျမူ..ဘယျ လဲ…” “ ဒီနေ့….ဆိုငျပိတျတယျလေ……လမျးဘေး ဆိုငျတှေ လိုကျရှငျးနလေို့…..”
“ အျော…….တဈခုခု စားပါအုံးလား….ခငျသကျမူ….” “ အုနျးနို့ခေါကျဆှဲ စားကွမယျလေ….လာ……” ပလကျဖောငျး အတှငျးဖကျ ဆိုငျတဈဆိုငျသို့ ဝငျခဲ့ကွလသေညျ..။ “ ဟာ…….အဈကိုတို့ အတှဲကို နရော ပေးပါ….. ဟေ့….” စားပှဲထိုးလေးက အျောနကြေ အသံ ..ထုံးစံအတိုငျး အျောလိုကျသျောလညျး ကိုသကျအောငျ ရငျထဲ နှေးခနဲ ဖွဈသှားမိသညျ..။ ခငျသကျမူ မကျြနှာလေးမှာလဲ ထှတျ ခနဲ ရဲသှားလသေညျ..။
“ အုနျးနို့ နှဈပှဲ…ပေးပါ…….၊ အကွျောနှဈခုစီ ထညျ့ပေးနျော…..“ ခငျသကျမူက အုနျးနို့ လှမျးမှာရငျး ဆံပငျလေးမြားကို သပျတငျ လိုကျရာ…ဗိုကျသားဝငျးဝငျးလေးမြား လကျသှားလသေညျ..။ ကွှားရှားသော ရငျလေးနှဈမှာမှာ လဲ ကွှတကျသှားသညျ..။ တငျပါး ကွီးအစုံကလညျး ဘေးနှဈဖကျသို့ ထိုငျထားသော ခုံလေးမှ ဘေးသို့ လြှံကနြလေသေညျ..။ “ အဈကို က စကားနညျးတယျ နျော….အဟငျး…….” “ အငျး….စကားသိပျမြားတာ မတှဘေူ့းသေးလို့ပါ…..” “ ဒါဖွငျ့ ပွောလေ…..စကားတှေ အမြားကွီး …အ ဟငျး ဟငျး…….” “ မပွောတော့ပါဘူး….ရငျထဲမှာ ပွောပွောနရေတာ မြားလှပွီ…ဘယျသူမှ မကွားပဲ ကိုယျ့ဖာသာ ပွောရတာ လှတျလပျတယျ….”
“ ဟောတော့….ကဗြာဆရာနဲ့ တိုးနတောကိုး….” နှဈယောကျသား ကွိတျရယျမိကွသညျ..။ အျော….သညျလို ဆနျ့ကငျြဖကျလိငျ တဈဦးနဲ့ နီးနီးကပျကပျ စကားပှဲလေးတှေ မဖှဲခဲ့ရတာ တောငျ ကွာခဲ့ပွီပဲ….။ “ အဈကို…က အတှေးသမားလား….ဟငျ…..” “ စား ဖို့အတှကျပဲ တှေးနနေိုငျတဲ့ ဘဝပါ..မခငျသကျမူ…..” ခငျသကျမူ ငိုငျတှသှေားသလို ရှိသညျ..။ သို့သျောခကျြခငျြး မကျြနှာကို တညျ ပဈလိုကျပွီး ရောကျလာသော အုနျးနို့ခေါကျဆှဲ ပနျးကနျကို ကိုသကျအောငျရှေ့ ခပြေးသညျ..။ “ လဒေီ ဖတျဈလေ….ခငျသကျမူ အ ရငျယူ……” “ အံမယျ…အဈကိုက အနောကျတိုငျး ဦးစားပေး စနဈကို လညျး နားလညျတာပဲ..နျော..”
ကိုသကျအောငျလညျး မခငျသကျမူ ကို အံ့အောလေးစားသှား၏…။ လမျးဘေး ထမငျးဆိုငျ စားပှဲထိုးပေ မယျ့ အသုံးအနုံးက မွငျ့ သညျ..။ အုနျးနို့ခေါကျဆှဲ စားနစေဉျ…. “ အဈကို ….ဘဲဥ ကွိုကျလား….” “ ကွိုကျတယျ….အဲ….စားလေ…ဘာဖွဈလို့လဲ…မ ကွိုကျလို့လား……..” “ ခငျမူလဲ..ကွိုကျတာပဲ…ဒါပမေယျ့ အဈကို့ကို ပေးတာ…..” လှိုကျခနဲ ပီတိအတှေးလေး….နှလုံးသားကို ပွေးဆောငျ့ပွနျသညျ..။ ကိုသကျအောငျ ခငျသကျမူ လကျကလေးကို အုပျကိုငျ လိုကျသညျ..။ မရုနျးပဲ စကားတိုးတိုး ပွောသညျ..။ “ လူတှနေဲ့လေ…..အဈကို…..” ကိုသကျအောငျ ပြျောသှားသညျ…။ အုနျးနို့ခေါကျဆှဲ စားပွီး လေးဘီးတဈစီး ငှါးကာ ပုဇှနျတောငျ အိမျသို့ ခငျသကျမူကို ချေါလာခဲ့မိလသေညျ..။ ခငျသကျမူကလဲ လိုကျလာရှာသညျ..။
အိမျသို့ရောကျလာသညျ..။ တဈအိမျလုံး ရှငျးလငျးနသေညျ..။ ပရိဘောဂ ဘာတဈခုမြှ မရှိ…။ “ ခငျမူ..တော့ မှားပွီ ထငျ တယျ….အဈကို….” “ ဘာလဲ…အဈကို့ကို …….ငထောကွီး ထငျနလေို့လား…….” “ ဟငျ့အငျး……..ဒါပွောတာ မဟုတျဖူး….အဈ ကို့အိမျထောငျသညျမ ရှိမှာပဲ ထငျနတော…..” “ ရှိတယျလေ….ရှိပါတယျ….” “ ဟုတျလား……ဘယျသှားလဲ…ဟငျ….” “ ဒီမှာ လေ…ထိုငျနတော……ဟောဒီမှာ……” “ အို့…..ဟိတျ…ကွညျ့…တအားညှဈတာပဲ….ကှာ………အို….” ဖြာလေးပျေါသို့ ခငျသကျမူ လဲကသြှားသညျ..။ ကိုသကျအောငျ ခြှနျးအုပျထားခဲ့သမြှသော ဆန်ဒအားအငျမြား ကမျးပွိုသလို ဒလဟော ပွိုဆငျးကလြာ တော့သညျ..။
“ အို……ဒီ…အထိ….မဖွဈသေးဘူး…..အဈကိုရယျ……..” ကိုသကျအောငျ လူတဈကာတပျမကျ စှဲလနျးခဲ့ကွရသော ခငျသကျမူ ဖငျ အိုးကွီးကို တအားခှပဈလိုကျပွီး ညှောငျ့သညျ..။ ခငျသကျမူ မကျြလုံးလေး ဝိုငျးပွီး ရုနျးကနျရှာသညျ..။ “ ရှဈကွီး ခိုးပါရဲ့ အဈကို ရယျ….မလုပျပါနဲ့ နျော…နျော……” ပါးမို့မို့လေးပျေါမှ မိတျကပျလေးမြား ပွောငျစငျသှားအောငျ ဖိနမျးပဈလိုကျသညျ..။ လုံးတဈနေ သော နို့ကွီးနှဈလုံးကိုလညျး ပယျပယျနယျနယျ ဆုတျကိုငျခမြှေ သညျ..။ “ အာ…..ဒုက်ခပဲ….အိုး..အဈကို….အဈကိုကလဲ ကှာ…….”
အျောသံ ငွီးသံလေးမြား တိုးတိတျပြောကျကှယျသှားသညျ..။ နှေးထှေးလုံးကဈြနသေော ခန်ဓာကိုယျ အနှံ့အပွား ကို မကျြနှာကွီး ဖိ ကပျပွီး နမျးပဈသညျ..။ တရှူးရှူး တရှဲရှဲနှငျ့ မီးရထား စကျခေါငျးကွီး တဈခုလို လမေုတျသံ အသကျရှူသံကွီးက ပွငျးထနျလာ သညျ..။ ခငျသကျမူ လိုကျလာမိတာ မှားပွီ ဟုတှေးနမေိသညျ..။ သို့သျော ခငျသကျမူ ရုနျးကနျခငျြစိတျ မရှိ…။ ဆုတျကိုငျခမြှေ ပှတျ သပျပေးနသေော အဈကို့ အယုအယလေးမြားကို သာယာနသေညျ..။ အဈကို့လကျတဈဖကျက ခငျမူ့ ပေါငျကွားကို ရှရှလေး ပှတျသညျ..။ ခငျမူ့ မကျြနှာလေး မော့သှားအောငျ ကော့တကျသှားသညျ..။
ထမီအောကျစကို လှနျတငျလိုကျသော အခါတှငျ…..ခငျမူ ပွာပွာသလဲ လိုကျဖိသေးသညျ..။ သို့သျော ဖောငျးကားကွှစူနသေော စောကျဖုတျအုံကွီးက အထငျအရှား ပျေါလာပွီ ဖွဈသညျ..။ အမွဲတမျး ဝတျနကြေ အောကျခံဘောငျးဘီကလဲ ဒီနမှေ့ ဝတျမလာခဲ့ မိ….။ ခငျမူ မကျြရညျတှေ စို့လာပွီး ….. “ ခငျမူ့ကို သနားပါ….အဈကိုရယျ……ခငျမူလေ…..အ…အ…..” စောကျဖုတျကွီးက အမှေးသနျသနျကွီးမြား အောကျမှ လိုးခငျြစရာ အဆီတဝငျးဝငျးကွီး ဖွဈနရော….ကိုသကျအောငျ က လြှာကွီးဖွငျ့ ထိုးကျော ယကျ ပေးလိုကျသညျ..။ ခငျမူ ထှနျ့ထှနျ့လူးသှားပွီး ပေါငျကွီးနှဈဖကျမှာလညျး ဘေးသို့ ပွဲကားသှားရလသေညျ..။
ခငျမူက အသားညိုလရေော့သလား မဆိုနိုငျ..။ စောကျဖုတျလေးမှာ ခပျညိုညိုလေး…ပွူးထှကျနသေညျ..။ စောကျပတျ နုတျခမျး သားကွီးမြားက လကျနှဈလုံးခနျ့ ထိထူလိမျ့မညျ ထငျသညျ..။ အကှဲကွောငျးကွီးက နကျနကျရှိုငျးရှိုငျးကွီး မှနျး ထငျပျေါလှနျးလှ သညျ..။ လြှာနှငျ့ ယကျပေးလိုကျတိုငျး စောကျဖုတျကွီးမှာ ဖားဂုံညှငျးကြောကုနျးလို ဖောငျးဖောငျးပွီး ကွှရှတကျလာလသေညျ..။ လထေိုးပေးလိုကျသလား ထငျရလောကျအောငျ မွနျဆနျလှနျးလှသညျ..။
စောကျဖုတျ ….ဤသို့ တဖွေးဖွေး ဖောငျးကားလာသညျကိုလညျး ကိုသကျအောငျ ခငျမူ ကမြှ မွငျဖူးခွငျး ဖွဈသညျ..။ လီးကွီးက အစှမျးကုနျ တောငျနပွေီးသားမို့ ခငျမူ့ စောကျဖုတျကွီးထဲ သို့ တသှေ့ငျးကာ အသာအယာလေး ဖိလိုးခလြိုကျလတေော့သညျ..။ “ အ……အဈကို………………” ခငျမူ ကြောလေးကော့သှားကာ ဆီးခုံလေး မောကျတကျသှားအောငျ ခါးကို ကွှတကျပေးလိုကျလေ သညျ..။ လီးကွီးက စောကျဖုတျကွီးထဲသို့ ထိထိမိမိကွီး ဆောငျ့လိုးခလြိုကျပွနျသညျ..။ “ အ……အား…….အဈကို ရယျ…..အငျး..အငျး…..” နုတျခမျးလေးကို ပွတျထှကျလုမတတျ ကိုကျထားသော ခငျမူ့မကျြနှာလေးမှာ ရုံ့မဲ့နပွေီး ဘေးသို့ စောငျးငဲ့ ကနြခေသြေညျ..။ ခငျမူ့ လကျနှဈဖကျက ကိုသကျအောငျ ပေါငျကို ကိုငျထားမိသညျ..။ ကိုသကျအောငျ၏ သနျမာသော လကျမောငျး ကွီးအစုံက ဘရာစီယာလေးအောကျမှ နို့ကွီးနှဈလုံးကို ဆှဲယူ ကိုငျဆုတျထားသညျ..။
ခငျမူ မကျြလုံးလေးမြား မှတျထားရှာသညျ..။ လညျပငျး၌ ဆှဲထားသော လော့ကကျသီး ရှဆှေဲကွိုးလေးက ကွမျးပွငျသို့ တဈဝကျပုံ ကနြသေညျ..။ ခငျသကျမူ စောကျဖုတျကွီးမှာ အားရစရာ ကောငျးလှသညျ..။ စောကျရကွေညျလေးမြား ညှဈထှကျလာသော အခါတိုငျး …” ဗွဈ…ပွဈ…..” မွညျအောငျ တငျးကွပျနသေညျ..။ သှေးကွောကွီးမြား ဖောငျးကွှကာ အကွောပွိုငျးပွိုငျး ထနေ သော ကိုသကျအောငျ တနျဆာကွီးက အရရှေဲနသေော ဧရာမ စောကျဖုတျကွီးထဲသို့ ပွှတျခနဲ ဆောငျ့ဆောငျ့ ဝငျသှားတိုငျး စောကျ ဖုတျနုတျခမျးသားလေးမြား အတှငျးသို့ လိပျဝငျ၍ ပါပါသှားသညျကို ..ကိုသကျအောငျ အသအေခြာ ငုံ့ကွညျ့ရငျး လိုးသညျ..။ ခငျ သကျမူ လကျကလေးတဈဖကျက ဆီးခုံကို လာပွီး ဖုံးထားရှာသေးသညျ..။
တဈခါတဈရံ လီးထိပျကွီးက ကြှံထှကျလာသောအခါ… နီလာလကျစှပျလေး ဝတျထားသော လကျဖမိုးလေးကို လီးထိပျကွီးက ထိုး မိသှားတတျသညျ..။ ထိုအခါ ခငျသကျမူက လကျကို ကပြာကသီ ရုတျပွီး… လကျခုံကို ထမီစဖွငျ့ ပှတျသုတျပဈတတျသညျ…။ “ ရှံ လို့လား…ခငျမူ…….” “ အို……ရှံတာပေါ့….ဟငျ့…အ…….ကြှတျကြှတျ…..” “ အဈကိုက ယကျတောငျ ယကျပေးသေးတာပဲ… ကှယျ…….” “ အို……သှား..ဘာတှေ ပွောနတောလဲ……. အား…….အား……..” “ ခငျမူ့ ဟာကွီးက …အကွီးကွီးပဲကှယျ…..အားရ လိုကျတာ….” “ အာ………သတေော့မှာပဲ…အဈကိုနျော…..အဟငျ့…..” ခငျမူ ရှကျတတျလှနျးသညျ..။ ပါးပွငျလေးနှဈဖကျ ရဲရဲနီ အောငျ ပငျ ငိုမဲ့မဲ့လေး ဖွဈလာသညျ..။ “ ခငျမူ့ စောကျဖုတျကွီးထဲကို အဈကို့လီးကွီး ဝငျတာ ခံလို့ ကောငျးလားဟငျ…ခငျမူ… ဟေ့….ပွောလေ…..”
“ အငျ့…..အငျး…အ…ဒီမှာ သတေော့မယျ….သူက ဘာတှေ လြှောကျမေးနမှေနျး …မသိဘူး..သှား….အ……အငျး အငျး……..” “ အဆုံးဝငျလား…..ဟငျ…….ခငျမူ………..ထိရဲ့လား…..” “ အာ……..အငျ့……သိဘူးကှာ…..မေးနဲ့……..အဟငျ့ ..အဟငျ့……အ…….” “ စှတျ…..ပွှတျ….စှတျ..ပွှတျ…………ဖတျ…..ဖှတျ……” “ အ…..ဖွေးဖွေး..အဈကို…..အထဲက အောငျ့တယျ….အ… အ………” ကိုသကျအောငျ ပွီးခငျြလာပွီမို့ ခငျမူ့ စကားကို နားမထောငျပဲ ဒလကွမျး မုနျတိုငျးတိုကျသလို ဆောငျ့လိုးခလြိုကျ သညျ…။
“ အား……အား……..အဈကိုး………အား……နာ…နာ တယျ…………အ..” “ ပွှတျ……ဖတျ…..ဖတျ………ပွှတျ……..ပွှတျ…… ပွှတျ…..စှတျ….“ “ ဟား…..တဈမြိုးကွီးပဲ….အား………..အီး……အမလေး….” ပူနှေးသော ပွဈခြှဲသော ညှီစို့သော အနံ့မြားဖွငျ့ ပှဲ စဉျတဈကို ….ရပျနားလိုကျကွပွီး …တဈယောကျနှငျ့ တဈယောကျ ဖကျထားရငျး အမောဖွနေလေိုကျကွလသေညျ..။
ကိုလေး…..ပုံ့ပုံ့လာသှားတယျ…….ကိုလေးနဲ့ မိနျးမတဈယောကျ အိမျရှမှေ့ာ ဖွဈပကျြနတော တှေ မကွညျ့ရဲတာနဲ့ မတကျတော့ ဘူး..။ သားနှဈယောကျကို ပုံ့ပုံ့ ချေါသှားတယျ…။ ပုံ့ပုံ့ ….အဈကိုလေးကို မြှျောနမေယျ……။ ညီမလေး…ပုံ့ပုံ့….။ ပွီးပါပွီ…..။
“ အစ်ကိုလေး ….” အိပ်မပျော်ပဲ မျက်လုံးကြောင်နေသော ကိုသက်အောင် လန့်သွားသည်..။ “ ဟင်…ပုံ့ပုံ့…မအိပ်သေး ဘူး လား…..” ကွယ်လွန်သူ ဇနီးသည်နှင့် ချစ်တင်းနှီးနှောခဲ့ပုံကလေးများကို ပြန်လည် စမြုံ့ပြန်နေသော ကိုသက်အောင် ရဲ့ ဘော်ဒါ ကြီးက တင်းမတ်နေသည်..။ ပုံ့ပုံ့က အဲဒါကြီးကို တွေ့ဖြစ်အောင် တွေ့လိုက်လေသည်..။ “ မမသီ သားတွေက အရမ်းသေးပေါက် တာပဲ……” ကိုသက်အောင် မြင်သာအောင် အနှီးနှစ်ထည်ကို ကိုင်ပြီး မြှောက်ပြလိုက်သည်..။ ကိုသက်အောင် ကုတင်ပေါ်မှထကာ ပုံ့ပုံ့အနားသို့ လာခဲ့သည်..။ ပုံ့ပုံ့ထံမှ သနပ်ခါးနံ့ သင်းသင်းလေးကို ဦးစွာ ရှူရှိုက်မိလိုက်ရသည်..။
“ ထားခဲ့လေ….မိုးလင်းတော့ ..ငါလျှော်လိုက်ပါ့မယ်….“ “ အို….မဟုတ်တာ….” ပုံ့ပုံ့က လက်ကို ပြန်ရုတ်ပြီး ပြောလိုက်သည်..။ ဝတ်ထားသော ညဝတ်အင်္ကျီလေးအောက်မှ ရွှေရင်နှစ်မွှာက အခုအခံမပါ လွတ်လပ်စွာ…လုပ်ရှားနေကြသည်..။ ဖြူဝင်း နုနယ်သော ပုံ့ပုံ့မျက်နှာလေးက တစ်စုံတစ်ရာကို တောင်းခံနေသလို မော့ပေးထားသည်..။ ကိုသက်အောင် ရင်တွေ ပူလာသည်..။ ဆီးခုံအထက်မှ ကျင်အောင့်သလို ( လိုးချင်လွန်းအားကြီး ) သော ဝေဒနာတစ်ရပ်ကိုလည်း ခံစားလိုက်ရသည်..။
“ ပုံ့ပုံ့….နင့် ကို…ငါ….ငါ လေ……..” “ အိုး…….ဖယ်ပါ….စည်းမရှိ..ကမ်းမရှိ….မလုပ်ပါနဲ့……” ပုံ့ပုံ့ ဆတ်ခနဲ လက်ကို ဆောင့်ရုန်း လိုက်ပြီး ထွက်သွားလေတော့သည်..။ ခက်လိုက်တာ…ဒီဝေဒနာ…။ ဘာနဲ့ ကုစားလို့ရမှာလဲ…မိပုံ့ရယ်….။ သီရယ်….မောင့်အဖြစ်ကို မြင်လှည့်စမ်းပါအုံးလား…မိန်းမ ရယ်…။ “ မောင်သက်အောင် ..ခရီးထွက်မလို့…ဆို…….” “ ဟုတ်ကဲ့..ဒေါ်လေး….ကျနော့်အ မေရှိတဲ့ ရွာကိုပါ….” “ ဟိုမှာ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ…မောင်သက်အောင်……”
“ အဆင်ပြေသလိုပါပဲ….ဒေါ်လေးရယ်…၊ သားတွေကို အမေက မြင်ချင်နေသေးတယ်….၊ သီမရှိတဲ့ နောက် တောမှာ လာနေဖို့ ခေါ် နေတာ…” “ ဒါဆို…မောင်သက်အောင် ဟိုမှာပဲ အခြေစိုက်တော့မှာပေါ့….ဟုတ်လား…” “ အင်း…..ဆိုပါတော့..ဒေါ်လေးရာ….” “ မင်းသားတွေ ပညာရေး လဲ ရှိသေးတယ်နော်….မောင်သက်အောင်…” “ ကျနော် မေ့မပစ်ပါဘူး…စိတ်ချပါ…..ဒေါ်လေးရယ်…“ သင်္ကြန်ရက်ကြီးမှန်း ကိုသက်အောင် အမှတ်ရသည်..။ ပုံ့ပုံ့နှင့် အဖော်တစ်စု ရေပက်ခံ ထွက်ရာမှ ပြန်လာကြသည်..။ “ ဖေဖေ ရေ…သားသားတို့ကို ပြွတ်အသစ်တွေ ဝယ်လာတယ်… ဒီမှာ….” ပုံ့ပုံ့က ဘယ်သွားသွား ဘယ်က ပြန်လာလာ ကိုသက်အောင် သား နှစ်ယောက်အတွက် ကစားစရာနှင့် မုန့်တစ်ခုခုကတော့ ပါလာတတ်စမြဲပင်…ဖြစ်သည်..။
“ ဒီမှာ နင့်အစ်ကိုလေးက သူ့ရွာပြန်တော့မလို့တဲ့….” “ ဟင်…..ခလေးတွေရောလား….မေမေ…….” “ အေးပေါ့ဟဲ့…သူ့ခလေးတွေ ဘယ်ထားရက်ခဲ့ပါ့မလဲ….မဟုတ်တာ…” ပုံ့ပုံ့ ငိုင်တွေတွေလေး ဖြစ်သွားရသည်..။ သူငယ်ချင်းများကိုပင် နုတ်မဆက်တော့ပဲ အိမ်ပေါ် သို့ ပြေးတက်လာသည်..။ ကိုသက်အောင်တို့ သားအဖတွေက ပြင်ဆင် ထုပ်ပိုးပြီးကုန်ကြပြီ ဖြစ်သည်..။ “ သား…ကို ကြီး…အန်တီလေးနဲ့ နေခဲ့မလား…ဟင်……..” “ဟင့်အင်း…ဖေကြီးနဲ့ပဲ လိုက်သွားမှာ….သင်္ဘောစီးမှာနော်….ဖေကြီး….”
ပုံ့ပုံ့ နုတ်ခမ်းလေး ပြတ်ထွက်လုမတတ် ကိုက်ထားသည်..။ စူးရှပြီး အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသည့် အကြည့်များနှင့်လည်း ကိုသက်အောင်ကို ကြည့်သည်..။ “ ဟင်း….ရပါတယ်….သွားကြပါ….သွားကြ..ခုသွားကြ……“ ကိုသက်အောင် ရင်ခွင်ထဲမှ သားငယ်လေးက လန့် ငိုသည်..။ စူးစူးဝါးဝါး အော်ဟစ်လိုက်သော ပုံ့ပုံ့အသံက ဟိန်းတက်သွားသည်..။ “ ဟဲ့….ဒီကောင်မလေး….ဘေးအိမ်တွေ ကြားကုန် ပြီ….ခက်တော့တာပဲ….” ဒေါ်လေးက အပြေးအလွှား လာဆူပြီး ပုံ့ပုံ့ကို အိပ်ခန်းထဲ ဆွဲခေါ်သွားသည်..။
“ အဲဒါကြောင့် သမီးကို ပြောတာ….မေမေတို့ စီမံသလို နာခံပါလို့….” “ ဟင်း……ဝေးသေးတယ်…..အစ်မသေလို့ ညီမကို ဆက်ယူ တဲ့လူတွေထဲမှာ ကျမ အပါမခံနိုင်ဘူး…. နေပစေ….ခလေးတွေကို လွမ်းရလို့ သမီးအသဲတွေ ကွဲချင်လဲ ကွဲပစေ…ဒီလိုမျိုးတော့ ဘယ်တော့မှ မယူဘူး….” “ ဟာ…..တိုးတိုးလုပ်စမ်းပါ..ဟယ်… မယူချင်လဲ နေ… ဘေးအိမ်တွေကြားလို့ ရှက်စရာတွေ ဖြစ်ကုန် မယ်….” ကိုသက်အောင် အသံတွေကို ကျောခိုင်းပစ်လိုက်သည်..။
အိမ်ရှေ့၌ ခေါ်ထားသော မာဇဒါလေးဘီးကားလေးက အဆင်သင့် ရောက်လာသည်..။ ထိုင်တတ်ခါစ ကလေးငယ်ကို ဒရိုင်ဘာအား ခဏချီခိုင်းထားပြီး အထုပ်အပိုးတွေကို ကားပေါ် ပစ် တင်ပြီး သားကြီးကို လက်ဆွဲကာ ပြေးဆင်းခဲ့ကြသည်..။ နေရစ်တော့ ပုံ့ပုံ့….နင်အမုန်းကြီးမုန်းတဲ့ လူတစ်ယောက် နင့်မျက်စိအောက်မှာ ဘယ်တော့မှ မမြင်စေရတော့ပါဘူး… ပုံ့ပုံ့ရယ်…။ ရင်ထဲမှာ တ စစ်စစ် နာကျင် ကိုက်ခဲနေလေသည်..။ သားကြီးက ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်သွားနေသော ကားများကို တာ့တာလုပ်ရင်း လိုက်ပါလာ သည်..။ သားငယ်လေးကမူ ကားသံ ဟွန်းသံများ ကြားတိုင်း ဖအေ့လည်ပင်း ကို တင်းတင်းလေး ဖက်ထားတတ်သည်..။
လေယူရာ လွင့်ရပေအုံးတော့မည်…။ အရာခပ်သိမ်းရွေ့လျားပြောင်းလဲနေတာပဲ မဟုတ်လား….။ ကိုသက်အောင် ဆိုတာ ကလည်း လောကကြီးထဲက လူသားတစ်ယောက်ပေကိုး…။ လောကဓံ တရားက ကျီစားခြင်းကိုတော့ ခံပေအုံးပေါ့…။ ကိုသက်အောင် ဇာတိ မြေ မဟုတ်သော ရွာကလေးက အမေ့ချက်မြှုပ်ရွာဖြစ်သည်..။ လူမှန်း သိတတ်စကတည်းက ရန်ကုန်မှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရ သည့်အတွက် တောရွာလေး၌ မြင်မြင်သမျှ သစ်ဆန်းနေသည်..။ အော်…ဒုက္ခနှင့် ရင်ဆိုင်ရမှ မိဘအရိပ်ကို သတိရတတ်ကြလေ ခြင်းပါ…လား……။
“ ဒီမှာ….ခင်ဗျာ…( ….) ရွာလေးကို ဘာနဲ့ သွားရမလဲ ..ခင်ဗျာ…” “ ဟ…နေအုံး…တောရွာက လှည်းကြုံ ရှိတယ်….၊ ဟေ့ ချက် ဖောင်း…. ” တောရွာလေးမှ ထင်းလာချသော လှည်းကြုံနှင့် ကိုသက်အောင်တို့ သားအဖတစ်တွေ လိုက်လာကြရသည်..။ သစ်ကြီးဝါးကြီး စိမ့်အေးနေသော ပတ်ဝန်းကျင်၌ တဒင်္ဂ ငြိမ်းချမ်းသာယာသော အရသာကို ခံစားရသည်..။ “ ခလေးက ငယ်ငယ် လေးပဲ…မအေကရော…ဗျ….ကိုယ့်ဆရာ…” “ ဆုံးသွားတာ…တစ်နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်…ဗျာ…တောမှာ အမေရှိတယ်…လေ…..” “ဘယ်သူများတုန်းဗျ….ဟဲ့…အော်…ဒီနွား…“ “ ဒေါ်နန်းအိမ်ပါ…သိလားဗျ…” “ဟား…သိပ်သိပေါ့ဗျာ…. ဒါဆို ကျန်းမာရေးမှူးကို သက်မောင်နဲ့ ညီအစ်ကိုပေါ့..ဟုတ်လား…၊ မြို့မှာ အစ်ကိုတစ်ယောက်ရှိတယ်ပြောတာ ခင်ဗျားကိုး…”
“ ကိုသက်မောင်က အငယ်ပါ…ဟုတ်တယ်…ကျနော်က အကြီးလေ…” လှည်းက အမိုးတော့မပါ..၊ စောင်းကျနေသော နေရောင် တွင် ချွေးပြန်နေကြသည်..။ သားကြီးက လှည်းစီးရသည်ကို အပျော်ကြီး ပျော်နေရှာသည်..။ ရွာအဝင် လှည်းလမ်းက ဂဝံကျောက် များနှင့် နိမ့်ဆင်းသွားသည်..။ “ မြဲမြဲ ကိုင်ထားဗျို့…ကျုပ်နွားတွေက ထိန်းရတာ နဲနဲခက်တယ်..” လှည်းသမား ချက်ဖောင်းက ပြောပြောဆိုဆို နဖားကြိုးကို တောင့်ပေးရင်း လှည်းလမ်းချောက်အတိုင်း မောင်းချလိုက်သည်..။ ဝရုံးသုံးကားလေး ဖြစ်သွား သည်..။ “ ဗျိုး ဆရာလေး….မြို့က ခင်ဗျားအစ်ကို လာသဗျို့….ပစ္စည်းတွေနဲ့…” ချက်ဖောင်းက အသံဝါကြီးနဲ့ အော်ပြီး အိပ်ယာ လိပ် ၊ သေတ္တာများ ချပေးသည်..။ ကိုသက်နှင့် သူ့မိန်းမတို့ အပြေးအလွှား ထွက်လာကြသည်..။
“ ကိုကြီး သတင်းကြားပြီးကထဲက မျှော်နေကြတာ….” “သီ…ဆုံးဆုံးချင်း လာဘို့ပဲ…ကိုသက်…. ၊ သီ့ ဆွေမျိုးတွေက ဆွဲထားလို့…” စကားတပြောပြောနဲ့ အိမ်ခြံဝိုင်းထဲ ဝင်လာခဲ့ကြသည်…။ သရက်ပင်အိုကြီးများ ၊ ဝါးပိုးဝါးများကြောင့် နေရောင်မထိုးပဲ စိမ့်အေးနေသည်..။ “ ဦး….ဦးရေ…ဦး….ဒီမှာ ရေဒီယိုလေး ကျကျန်ခဲ့တယ်……” “ ဟာ…ဟုတ်သားပဲ….ဘယ်နားက တွေ့တာ လဲ..သမီး..ဟင်….” “ ရွာအဝင်…လှည်းလမ်းချောက်ထဲက….” ကိုသက်အောင် ရေဒီယိုလေး ကမ်းပေးနေသော မိန်းခ လေးမျက်နှာကို အမှတ်မထင် ကြည့်လိုက်မိသည်..။ ရင်ထဲဝယ် ဒိန်းခနဲ ခုန်လှိုက်သွားရသည်..။
“ ပုံ့ပုံ့နဲ့ တူလိုက်တာ….” ပုံ့ပုံ့ကဲ့သို့ မျက်ခုံးလေးတွေ မှောင်နေသည်..။ နုတ်ခမ်းလေးက ဖူးဝင်းစိုဖောင်းနေသည်..။ ရွှန်းလဲ့ တောက်ပသော မျက်ဝန်းလေးများက ဖြူစင်ကြည်လဲ့နေကြသည်..။ တစ်ခုပဲ…ရှိသည်..။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်က ပုံ့ပုံ့ထက် ကျစ် လစ်မာကြောသည်…။ ဖိနပ်စီးမထားသော ခြေထောက်၌ ရွှံ့နီတို့ လိမ်းကျံ ပေလူးနေသည်..။ ယောက်ျားရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်ကို ဝတ်ထားသည်..။ ပုဆိုးဟောင်းတစ်ထည်ကို စလွယ်သိုင်းကာ ပုဆိုးထဲ၌ သရက်သီး အချို့ ၊ ဟင်းရွက်အချို့ကို တွေ့ရသည်..။ အသက်…၁၈ နှစ်ထက် မပိုလောက်သေးသော သည်အရွယ်လေးကို ကြည့်ပြီး ရင်ခုံမိသည့်အတွက် ကိုသက်အောင် ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် မလုံမလဲ ဖြစ်ရသည်..။
ကောင်မလေးကလည်း သူ့ကို စူးစူးဝါးဝါးကြီး စိုက်ကြည့်လိုက်သော ကိုသက်အောင် အကြည့်ကြောင့် မျက်နှာလေး ရဲခနဲ ဖြစ်ကာ လှည့်ထွက်သွားလေတော့သည်..။ ကိုသက်အောင် ညီက ကိုသက်အောင် ပုခုံးကို ကိုင်ပြီး… “ ဒီခလေးမလေးက သနားစရာ ကိုကြီး ရဲ့…. မောင်လေးနဲ့ ညီမလေးကို လုပ်ကျွေးနေတာ..၊ အစ်ကိုတစ်ယောက်ကလည်း မူးရူးနေတာနဲ့ အချိန်ကုန်နေတာ…” “ မိဘတွေ ကရော…ကိုသက်…ဟင်…” “ ဖအေကြီးက ဆုံးသွားတာ ကြာပြီ….၊ မအေကလဲ နောက်လင်ယူတာ မကြာသေးဘူး….၊ ကျန်ခဲ့တဲ့ ခ လေးတွေက ဥမမယ် စာမမြောက်တွေချည်းပဲ….”
ညနေစာအတွက် ချက်ပြုတ်ကြသောအခါ ညနေက တွေ့ခဲ့ရသော ခလေးမဆီမှ ဟင်းရွက်အချို့ ဝယ်ကြသည်..။ “ အဲဒီလိုပဲ ….တောတိုးပြီး ရောင်းချစားရင်း အသက်ရှင်နေကြရတာ…ကိုကြီး…” နောင်သောအခါ ကိုသက်ကပင် ထိုခလေးများကို အခါ အားလျော်စွာ အဝတ်အစားမှ အစ ထောက်ပံ့နေရကြောင်း သိလာရလေသည်..။
“ တောထဲက ဟာမ သူဟာသူဖြဲ နီတာရဲ….” “ အယ်…ကိုချက်ဖောင်းကြီးက ညစ်ပတ်တယ်….တော့…သွား မသိဘူး…” “ နင့် စောက်ပတ်…ညစ်ပတ်ရမလား…ဟ…၊ ဒါစကားထာဖွက်တဲ့ဥစ္စာ…လီး….” ချက်ဖောင်း ၊ ခြောက်စောင်း ၊ ယောင်ပွ ၊ တို့က မိန်းခ လေးများနှင့် အဖွဲ့ကျသည်..။ လသာသော ညများတွင် မြေရှင်းသော ကိုသက်တို့ အိမ်ရှေ့ကွက်လပ်၌ ထုတ်စည်းတိုး ၊ တွတ်ထိုး ၊ ဖန်ခုန် ၊ ကြက်ဖခွပ်တမ်း ကစားကြသည်..။ ချက်ဖောင်း ၊ ခြောက်စောင်း ၊ ယောင်ပွ ဆိုသည်များကလည်း နာမ်စားများသာ ဖြစ်ကြ သည်..။ မြင့်သိန်း ၊ စိန်လှ နှင့် အောင်ကြည်တို့မှာ နာမည်ရင်းများ ဖြစ်ပါသည်..။
ကိုသက်အောင်အပါအဝင် လူကြီး လူငယ် လူလတ်မကျန် စကားထာဝိုင်း၌ ပါဝင် နိုင်ကြသည်..။ ယခုလည်း လူ၂၀ခန့် ဝိုင်းကြီး ဖွဲ့ ထားကြသည်..။ “ အံမယ်….လွယ်လွယ်လေး….အဲဒါ တောက်တဲ့ဥ……” “ မင့်မေလိုး…မိန်းခလေးတွေ ဖော်ရမဲ့ အလှည့်ကွ… ယောင်ပွရဲ့…” “ အဲ…ဟုတ်သားပဲ…ယောင်လို့….” ဝိုင်းရယ် ကြသည်..။ “ နင့်ဟာတွဲလဲ နီတာရဲ…ကဲဖော်စမ်း….“ ဒေါ်ဖားမက ယုတ်ကန်းသည်..။ ဆေးလိပ်မီးတဖွားဖွား ဖွာရင်းက ထပြောသည်…။ “ ဟာ…ဒေါ်ဖားမ..ဒါ ခင်ဗျား ယုတ်ကန်းတာ….”
“ ဘာယုတ်ကမ်းရမှာလဲ…ဟဲ့…၊ နင်တို့ဖော်ကြည့်ပါလား…ဟင်းဟင်း…” “ ဟေ့ကောင်တွေ ..တွဲလဲကြီးတဲ့…နီတာရဲကြီး တဲ့…ဘာ ဖြစ်မလဲ…” “ ဖိုးလေးချစ် ကျွဲသိုးကြီး သိုကြီးပဲ ဖြစ်မယ်….ဟားဟား…ဟား..” “ မှားတယ်…မှားတယ်…ငှက်ပျောဖူးကို ပြော တာ….” စကားထာဝိုင်းက အပြိုင်အဆိုင် ကြမ်း ကြမ်းလာကြသည်..။ “ နင့်ကို ငါချ ..ငါ့ကိုနင်တက်ချ…အဲဒါ ဘာလဲ..ဗျ….” “ ဟဲ့…မအေလိုး ချက်ဖောင်း…နင် အဲဒီအထိတော့ မစုတ်ပဲ့နဲ့….”
“ စကားထာပါ..ဗျာ…ဖော်နိုင်ရင် သိလာမှာပါ…” စကားထာဝိုင်း ငြိမ်သက်သွားသည်..။ ကိုသက်အောင်ပင် စဉ်းစားမရ ဖြစ် နေသည်..။ ဒေါ်ဖားမနှင့် လူကြီးပိုင်း ခေါင်းချင်းဆိုင် သည်..။ ကိုသက်အောင် စိတ်ဝင်စားနေရသော ခလေးမလေး အပျိုဝိုင်းက လည်း တွတ်ထိုးနေကြသည်..။ ဘယ်သူမှ ဖော်မရကြ…။ “ ပန်းပေးပလား….ပြောလိုက်တော့မယ်…နော်..” ချက်ဖောင်းက ထအော် သည်..။ လမင်းကြီးက ပို၍ ပို၍ သာလာနေသည်..။ “ ကဲ…ပေးပြီ ဟာ… ဖော်….” ယောက်ျားလေးစိတ်နှင့် ယောက်ျားလေးလို ဝတ်တတ်သော မယ်စိန်က ပြောသည်..။ “ ကိုသိန်းမောင်နဲ့ မမယ်ခင်ပေါ့..ဗျ….သွားကြည့်ပါလား…“
“ ဝါး…ဟားဟား…ဟား…ဟား…” ဝိုင်းထဲမှာ ရယ်သံများက မရပ်ကြတော့…။ ကိုသက်အောင်ပါ အူလှိုက်သဲလှိုက် ရယ်မိသည်..။ ကိုသိန်းမောင်က ပေါင်တစ်ဖက် မရှိ ၊ မမယ်ခင်က မျက်လုံးကွယ်နေသော လင်မယား…။ “ သွား …ကောင်းကောင်း မဖွက်ပဲ နဲ့..ခြောက်စောင်းတို့ အုပ်စု…” ဤနှယ် တောရွာကလေး၌ ကိုသက်အောင် အနေပျော်လာသည်..။ ညီဖြစ်သူက သူနှင့်အတူ ဆေးထိုးအပ် ကိုင်စေချင်သည်..။ ကိုသက်အောင်က ပေါက်တူး ကိုင်သည်..။
“ ဟို ခလေးမ နာမယ် ခုထိ ငါမသိသေးဘူး…ကွ ကိုသက်…” “ ဟာ…ဘာသိစရာ လိုသလဲ..ကိုကြီးကလဲ….” “ အာ….တစ်ရွာထဲ နေပြီး နာမယ်မသိဘူးဆိုတော့ ကွာ ..မင်းကလဲ…” “ ဒါဖြင့် …ကိုကြီးဖာသာ မေး…” ကိုသက်အောင်က…“ သမီးနာမယ်က ဘယ်လိုခေါ်လဲ့ကွဲ့…သမီး…” “ ငယ်ငယ်က အမေခေါ်တာ…ချီးပေတဲ့..ကိုလေးက ခေါ်တော့ အာပြဲတဲ့….ခုတော့ ခွေးမလို့ ခေါ်ကြ တယ်လေ… ဟွန်း …စွာလို့တဲ့…”ကိုသက်အောင် ရင်နင့်စွာ ရယ်မောမိသည်..။
“ ဒါဆို…ဦးက သမီးကို မခွေးမ လို့ပဲ ခေါ်ရမှာပေါ့…ဟ.လား…” “ အင်း…တစ်ရွာလုံးက ဒီလိုပဲ ခေါ်နေတာကိုး…“ “ မကောင်းပါ ဘူး…ဦး နာမယ်ပေးရမလား….ဦးက ရွေးတတ်တယ်ကွ…“ “ ဟင့်အင်း…နေပလေ့စေ…ပေးမနေနဲ့…အလကားပဲ ခွေးမလို့ပဲ ခေါ် ကြမှာ…” “ ဒါဆိုလဲ …ဦးက သက်သက်ခေါ်ဘို့ နာမယ် လေး ရွေးထားတယ်..သိလား…” “အင်း…အင်း….ရွေးပေါ့…” ကွမ်းသီး ခြမ်းကို တမြုံ့မြုံ့ဝါးရင်း အလေးမထားသလို ပြန်ပြောသည်…။ တောင်ယာတဲလေးထဲ၌ ရေနွေးအိုးက မီးခိုးများ အူထွက် နေသည်..။ နွေညနေသည် သစ်ရွက်လေတိုးသံမှ တပါး တိတ်ဆိတ်နေသည်..။ တစ်ခါတစ်ရံ တဲခေါင်မိုးသို့ လာနားသော စာကလေး ငှက်များက တကျိကျိ အသံလေးများကို ကြားရတတ်သည်..။
“ သမီး…မသိချင်ဘူးလား….” “ ဟင့်အင်း….မသိချင်ဘူး…ဘာလုပ်ဖို့လဲ…” ရေနွေးအိုး မီးထဲသို့ ထင်းချောင်းတစ်ခု မွှေနှောက်ထိုး ထည့်ရင်း ပြောလိုက်သည်..။ မျက်နှာနုနုလေးက ကြမ်းတမ်းသော ဘဝဒဏ်ကို ရင်ဆိုင်ထားရဟန် နွမ်းနေသည်..။ “ ခွေးမရေ… ပဲသီးတောင်း လာရွက်တော့…ဟေ့….ပြည့်နေပြီ…” ကိုသက်မိန်းမ မခလေးမက လှမ်းအော်လိုက်မှ အနားစုတ်ပြဲနေသော ထမီစ လေးကို စုကိုင်ကာ ဒရောသောပါး ထပြေးသည်..။ နှစ်လက်မခန့် ထောင့်တန်းပြဲနေသော ထမီလေးအောက်မှ ဖင်သားဝင်းဝင်းလေး ကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ ကိုသက်အောင် ပေါက်တူးဆွဲပြီး တဲလေးအတွင်းမှ ထွက်လာခဲ့သည်..။မခလေးမက ပဲသီးတောင်းကို ပင့် ပေးရင်း ကိုသက်အောင်ကို လှမ်းကြည့်သည်..။
“ အစ်ကိုကြီးကလဲ တောင်ယာထဲ မဆင်းပါနဲ့ ဆို…အလကား လုပ်နိုင်တာလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့…” “ ရန်ကုန်မှာ ဦးက ဘာလုပ် ..အစ်မ…” “ စာရေးဆရာတဲ့ဟဲ့…ဘာမှ လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူး…” “ အော်….စာရေးဆရာ ကိုး…” စာမတတ်သော ခွေးမရင်ထဲ၌ စာရေးဆရာကြီးကို ရိုသေလေးစားသွားမိသည်..။ စာရေးဆရာကြီးက သူ့ကို နာမယ်ရွေးပေးမဲ့ အကြောင်း မခလေးမကို မပြောဖြစ် တော့…။ တောရွာဘုရားပွဲက နှစ်တိုင်း စည်ကားသည်..။ ခွေးမတို့ အပျိုဖြန်းလေးတွေ အဖို့ ခြစ်ခြုတ်စုဆောင်းထားသမျှ စုဗူးတွေ ဖောက်ကြ ၊ အဝတ်တွေ ချုပ်ကြ ၊ တစ်လုံးတည်း ရှိသော ရွာလယ် ဒေါ်အေးမြတို့ စက်မှာ လက်မလည်နိုင်…။
ခွေးမ စုဗူး ဝါးကျည်တောက်က အကြွေချည်း ထွက်လာသည်..။ စုစုပေါင်း တစ်ရာ့ဆယ့်ငါးကျပ် ရသည်..။ မယ်စိန်နှင့် မမိအေးတို့ က ဈေးကြီးသော အိတုံရှန်ကို မှန်းနေကြချိန်တွင် ခွေးမက သာမန် ဝတ်ရရုံ ထမီတစ်ထည်ကိုပင် မနည်း စဉ်းစားနေရသည်..။ “ အစ်မ…ကျမကို စိုက်ပြီး ထမီဝယ်ခဲ့စမ်းပါနော်….” မခလေးမ မြို့ဈေးသို့ တက်သောအခါ လုပ်ခကြွေးယူစနစ်ဖြင့် မှာရသည်..။ ကို သက်နှင့် သူ့ခလေးများ ၊ ကိုသက်အောင်နှင့် သူ့သားသားတို့နှစ်ယောက်ပါ ပါလာသဖြင့် မြို့ဈေး၌ ထမီ အပေါစားဝယ်သောအခါ ကို သက်အောင် မေးမိသည်..။ ခွေးမဘို့ဟု သိရသည်နှင့် ကိုသက်အောင် ရွာမှ အတူလာသော မိန်းကလေးများ ချုပ်ကြသည့် အရောင် အသွေးဆင်တူ ပိတ်စကို နှစ်စုံ မှာချုပ်ပြီး ယူလာခဲ့သည်..။
ကိုသက်အောင်က ခွေးမ ပျော်သွားလိမ့်မည် ထင်ထားခဲ့မိသည်..။ ခွေးမကို မခလေးမ တို့ အဝတ်များ သွားပေးသောအခါ ကိုင်တွယ်ကြည့်ရုံသာ ကိုင်သည်…။ ပြီးတော့ ပြတ်သားစွာ ငြင်းဆိုသည်..။ “ ကျမ ဒါမျိုး မှာတာမဟုတ်ဘူး….မလိုချင်ဘူး…” “ ဟဲ့…ဒါ …နင့်ကို သူများ လက်ဆောင်ပေးတာ…ခွေးမရဲ့….“ “ ဘယ်သူက ပေးတာလဲ…ဒီလောက်အများကြီးကို ..” “ နောက်တော့ သိမှာပေါ့…ဟယ်…ယူထားလိုက်ပါ…” ထိုနှစ် ဘုရားပွဲ၌ ခွေးမ ရှေ့တန်း၌ တန်းစီခွင့် ကန်တော့ပွဲ ရွက်ခွင့် ရလိုက်သည်..။ တော ဆို ပေမယ့် အဝတ်အစားဖြင့် ချိန်ထိုးပြီး တန်းစီခိုင်းသော အလေ့အထ ရှိနေသေးသည်..။ ကိုသက်အောင် ဦးစီးသော ကာလသားတစ် သိုက်က အိုးစည်ဝိုင်းဖြင့် သံချပ် တွေ ထိုးကြသည်..။ လူကြီးတွေ အရမ်းသဘောကျနေကြသည်..။
“ မောင်သက်အောင် ရောက်လာမှ ဒို့ရွာလေး စည်ကားလာသဟေ့…”သည်လိုနှင့် ကိုသက်အောင် ရွာထဲ၌ ဝင်ဆန့်လာသည်..။ လူ ချစ်လူခင်လည်း ပေါလာသည်..။ “ ခွေးမ…နင့်အင်္ကျီ နဲ့ထမီက ငါးရာကျော် အေ့….သိရဲ့လား….” “ ဟင်…မမယ်စိန်က ဘယ်လို လုပ် သိလဲ…” “ ကိုသက်အောင်ကြီး ငါ့ကို ခေါ်ပြီး လိုက်ဝယ်တာ…တော်ရေ့…၊ အမလေး…ဒါဆို ချာတိတ် ကြိုက်ပါ့မလား မသိ ဘူး…လိုလိုမယ်မယ် အပူရောင် အလေးရောင် နှစ်စုံချုပ်မှ….နဲ့ ဗျာကိုများနေတာပဲ…ဟဲ့…” “ ဟင်…ကိုသက်အောင်ကြီး ချုပ်ပေး တာလား…ငါက မခလေးမတို့ အရင်လိုပဲ…ဝယ်ပေးတာမှတ်ထာ တော့…” “ အေး….ငါပြောတယ်လဲ…မပြောနဲ့အုံး….ဟွန်း….”
ခွေးမ ရင်ထဲ မကြည်မလင် ခံစားရသည်..။ အသက် ၃၀ ကျော် ဒီလူကြီးက ဘာလို့ ငါ့ကို အဝတ်တွေ ချုပ်ပေးရတာလဲ…သနားလို့ လား …ခွေးမအတွက် ပထမဆုံးသော အိပ်ပျက်ညလေး ကြုံခဲ့ရသည်..။ “ အစ်ကိုကြီး…စဉ်းစားပြီး ပလား…၊ သေချာပြီ လား….” “ စဉ်းစားပြီးမှ ပြောတာ….ကိုသက်ရ….သေချာတယ်…..” “ ကောင်မလေးက သိပ်ငယ်သေးတယ်….ဒါပေမယ့် သူ့ဦးလေးတွေ အသိုင်းအဝိုင်း တီးခေါက်ကြည့်ပါအုံးမယ်….” ကိုသက်အောင် ချစ်သော ချာတိတ်ကို လက်ထပ်ရန် အဆင့်ဆင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ပြီး နောက်တစ်နှစ် သင်္ကြန်ရက် အတက်နေ့၌ မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ကြသည်..။ ကိုသက်အောင်ကိုယ်တိုင်က ကံကောင်းလေသလား ၊ ကံပဲ ဆိုးချင်လေသလား မသိ..။ မနူးမနပ် မလည်မဝယ်နှင့် ခွေးမလေးက အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ်နှင့် အိမ်ထောင်ပြုရန်း လက်ခံခဲ့ သည်..။
“ ချာတိတ်…အစ်ကို့ကို ချစ်လား…ဟင်….” “ ဟင့်အင်း….မချစ်ဘူး……” “ ဟဲ ဟဲ…ဟဲ….” “ နောက်တာမှ မုတ်တာ… ခလေး ဖအေကြီး ဘယ်ချစ်မှာလဲ…လို့…” “ ဘာ…..ဘာပြောတယ်…” မင်္ဂလာဆောင် မဏ္ဍာပ်ဆီမှ ဆူညံသော ဓါတ်စက်ဖွင့်သံ ကြားနေ ရသည်..။ မယ်ဒလင် တစ်လက် အော်ဂင် ဂစ်တာ ..တစ်ခုခုဖြင့် သီချင်းဆိုချင်သူတွေကလည်း ဒုနဲ့ဒေး မြူးပျော်နေကြသည်..။ မူးရူး နေကြသည်..။ ကိုသက်အောင် ရင်၌ အမှား မုန်တိုင်းကြီး ပြင်းပြင်းပြပြ ရိုက်ခတ်လုပ်ရမ်းနေလေပြီ…။ သတို့သမီးအတွက် စံပယ် ပန်းကုံးများ ထည့်ထားသော ဆကာကုံးလေးက အခန်းထောင့်မှာ ရှိသည်..။ လေတိုးသဖြင့် ယိမ်းထိုးလုပ်ရှားနေသော မီးခွက်မှ အလင်းရောင်လေးက ကျဉ်းမြောင်းသော အခန်းလေးထဲ၌ မုံဝါးဝါး လင်းနေသည်..။
“ ငါကတော့…နင့်ကို ချစ်တယ်….” “ ချစ်ပေါ့…အို့…“ ပြောပြောဆိုဆို ကျစ်လစ်သန်မာသော ကိုယ်လုံးလေးကို ပွေ့ယူပြီး အိပ်ယာ ထဲသို့ လှဲချလိုက်သည်..။ ခြင်ထောင်က အလိုလို လုံးထွေး ကျလာသည်..။ “ အဲဒီလို…မလုပ်နဲ့…ဦးရယ်….ကျ….ကျမ ….ကြောက် တယ်…..“ “ မနက်ဖန်ပဲ…မင်္ဂလာဆောင်တော့မဲ့ဟာ…ခလေးရယ်…နော်…“ “ အို….ဟင့်အင်း….ဟင့်အင်း……….” “ မလုပ်ပါ နဲ့…..မလုပ်..ပါနဲ့…ဆို……..” ချာတိတ်အသံက တအားအော်ဟစ်သံမျိုးတော့ မဟုတ်…။ မျက်နှာလေး ရုံ့မဲ့ပြီး ရုန်းကန် တွန်းထိုးနေ ခြင်းမျိုးသာ ဖြစ်သည်..။ ကိုသက်အောင်က ပထမဆုံး ခြင်ထောင်ကို သေချာ ချလိုက်သည်…။ ချာတိတ်က လူးလဲ ထရန် ကြိုးစား လိုက်သေးသည်..။ ကိုသက်အောင်က လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ချာတိတ်ကို ပွေ့ဖက်ထားလိုက်သည်..။
“..ဦး…အ…အဟင့်…မလုပ် ပါနဲ့…ဦး ရယ်…..ကျမ ကြောက်တယ်….“ အတန်တန် တောင်းပန်နေသည့်ကြားမှ အပေါ်အင်္ကျီလေး ကျွတ်သွားလေသည်..။ ဝယ်ပြီးကာစ ဘရာစီယာလေးသာ ကျန်တော့သည်..။ အရွယ်သစ်သစ် ဖူးပွင့်စ စပယ်ငုံလေး အစုံအလား သန့်စင်မွှေးပျံ့ နေသော ရင်သားလေးနှစ်မွှာကို ဘရာစီယာပေါ်မှ ဖိ၍ ပွတ်သပ်နမ်းရုံ့လိုက်သည်..။ ချာတိတ်နုတ်ခမ်းလေးကို ပူနွေးချိုမြိန်စွာ စိတ်ကြိုက် စုတ်ယူလိုက်သည်..။ တအင်းအင်း ကော့တက်သွားရှာသော ချာတိတ်ခါးလေးမှ ထမီစကို လျှော့ချ ပစ်လိုက်သည်..။ ချာတိတ်လက်ဖဝါးလေး အစုံက သူမဟာလေးကို စုံကိုင်အုပ်ထားလိုက်သည်..။
လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို စုထားသလိုဖြစ်နေ၍ ရင်သားလုံးလုံးဖွေးဖွေးလေးက ပေါက်စီလေးများ ပ မာ လုံးတက်လာသည်..။ နို့သီး ခေါင်းလေးများက ရေသဖန်းသီးအမှည့်လို ရဲထွတ်နီမြန်းနေသည်..။ ကိုသက်အောင်က အပေါ်မှ ခွစီးပြီး နို့သီးလေးနှစ်လုံးကို ပွတ် သပ်ဆုပ်နယ်ပေးလိုက်ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးကို ဖိကြိတ်ပြီး ချေပေးလိုက်သည်..။ “ အ……အမေ….အဖေရေ…..အမလေး….အ မေ့…” ခေါင်းလေးကို ဘယ်ညာ တွင်တွင် ရမ်းခါရင် အံကလေး ကြိတ်ခါ တိုးတိုးလေး ကြိတ်အော်သည်..။ အသားလေးများက မျှားဆိပ်သင့်သော သမင်မလေးနှယ် တုန်ခါနေသည်..။
ကိုသက်အောင်က မုံဝါးဝါး မီးရောင်ဖြင့် ချာတိတ်ပေါင်ကြားကို ဖြဲကြည့် လိုက်သည်..။ ချာတိတ်က အမွှေး မစုံ…။ စောက်မွှေးဆို၍ တစ်ပင်တစ်လေမျှပင် ရှာမတွေ့…။ ရင့်ထော် ကြမ်းတမ်း ရုပ်ပွသည့် စောက်မွှေးရင့်ရင့်ကြီးများကြားမှ ပြဲအာသော စောက်ဖုတ်ကြီးများကို လိုးခဲ့ရသော ကိုသက်အောင်အတွက် အမွှေးနုနုလေးများ သာ ရှိသေးသော စောက်ဖုတ်လေးမှာ အဆန်းတကျယ် ဖြစ်သွားရသည်..။
“ လက်ဖယ်ထားလေ….ခလေး..ရဲ့…” “ ဟင့်အင်း…ဟင့်အင်း…..မဖယ်ဘူး…မဖယ်ဘူး……….” အကြောက်အကန် ငြင်းဆန်နေ သော ချာတိတ်လက်လေးနှစ်ဖက်ကို ခပ်တင်းတင်းလေး ကိုင်ဖယ်လိုက်ရာ ဖောင်းမို့နူးညံ့နေသော ဆီးခုံလေးမှ ကွဲဆင်းသွားသော ပေါင်ကြားထဲ ညှပ်နေသည့် စောက်ဖုတ် နုနုလေးကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ ကိုသက်အောင်က ပုဆိုးကို ခေါင်းပေါ်မှ ကျော်ပြီး ချွတ် ကာ ခြင်ထောင်ခြေရင်းသို့ ပုံချလိုက်သည်.။ အမွှေးကြမ်းကြီးများဖြင့် ထူထပ်စွာ ပေါက်နေသော ဂွေးဥတွဲတွဲကြီးက ချာတိတ်ပေါင် လေးပေါ်သို့ အပုံလိုက် ထွေးကျနေသည်..။
မတ်တောင်နေသော ခလေးနှစ်ယောက်ရပြီးသား လီးကြီးက ဆာလောင်စွာဖြင့် ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ တုန်ခါနေသည်..။ ခွေးမ က မျက်စိမဖွင့်ပဲ တင်းနေအောင် မှိတ်ထားသည်..။ စောက်ဖုတ်လေးက ကြပ်ညှပ်ပြီး တင်းနေအောင် စေ့နေသည်..။ ကိုသက်အောင် က လီးထိပ်ကြီးဖြင့် အကွဲကြောင်းလေးကို ထိုးကာ ကော်တင်ပေးလိုက်သည်..။
ပြစ်ချွဲသော အရေများက လီးထိပ်မှ စိုစွတ်စွာ ထွက်ကျလာလေရာ စောက်ပတ်ကလေးမှာ ဝင်းလက်တောက်ပသွားလေသည်..။ သို့သော် တင်းတင်းကြီး ညှစ်ထားသဖြင့် စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးမှာ စေ့ကပ်နေသေးသည်..။ ကိုသက်အောင်က အကွဲ ကြောင်းလေးထဲသို့ လီးထိပ်နီနီကြီးကို တေ့ကပ်ပြီး ဖင်အားနှင့် ဖိချနေသော်လည်း စေ့ထားသော ပါးစပ်အတွင်းသို့ ငှက်ပျောသီး ထိုးထည့်နေရသလို ချော်၍ ချော်၍ ထွက်နေပြန်သည်..။
ကိုသက်အောင် ချွေးပြန်လာသလို အပျိုစင်မလေးမှာလည်း ရှက်လွန်းကြောက်လွန်းနေသဖြင့် သတိမလစ်ရုံတမယ် ခံစားနေရ ရှာသည်..။ “ ညီမလေးကလဲကွယ်…လိမ္မာသားနဲ့…နဲနဲ ကားပေးပါဆို…..” “ ကြောက်တယ်…အီး….ဟီး….ကြောက်…ကြောက် တယ်…..” ပြဿနာ အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ဖြစ်နေရသည်..။ နောက်ဆုံး ကိုသက်အောင် ခြေနှစ်ချောင်းကို ဆွဲကားလိုက်ပြီး တစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ် ဆွဲတင် ထမ်းထားလိုက်ကာ ကျန်တစ်ဖက်ကို ဖင်နှင့် ဖိချ ထိုင်ထားလိုက်သည်..။
ထိုအခါမှ ကျဉ်းမြောင်းသော အပျိုပေါက်မလေး၏ ဂယ်ပေါက်လေးက ကိုသက်အောင် ၏ ပစ္စည်းကြီးထိပ်၌ တေ့မိသွားပြီး ရုံ့ခနဲ ဖြစ်သွားသည်..။ ကိုသက်အောင် သိပ်ပြီး အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲ ဒစ်ကြီးမြုပ်သွားအောင် ပထမအဆင့် အနေဖြင့် လိုးသွင်းလိုက် သည်..။ “ ဗြွတ်…..အမေ့…..အီး…အိ..အိ……အမေရေ……အ..အား….” အတော်အော်သော ကောင်မလေးဖြစ်သည်..။ တော်ပါ သေး၏..။ စပီကာမှ ဖိုးဆိုချင် တစ်သိုက်က အသံကျယ်လောင်စွာဖြင့် ဖုံးလွှမ်းထားသဖြင့် အပြင်သို့ ကျယ်လောင်စွာ အသံမထွက်ခဲ့ ချေ…။ စကတည်းက အခြေအနေက သိပ်မကောင်းချေ..။ ပစ္စည်းချင်းက မမျှမတ ဖြစ်နေသည်..။ ဆင်လီးနှင့် ဆိတ်ဖင် လိုးနေ သလို ဘယ်လိုမှ မဝင်နိုင်အောင် တင်းကြပ်လွန်းနေသည်..။
ကိုသက်အောင် ကိုယ်တိုင်ပင် ကျင်စပ်သော ဝေဒနာကို လီးထိပ်မှာ ခံစားနေရသည်..။ ယောက်ျားဆိုသည်ကလည်း အပေါက်ကျဉ်း ကြိုက်တတ်ကြသော အမျိုး ဖြစ်သည်..။ ကိုသက်အောင် မရမက ဖိသွင်းသည်..။ “ ဗြစ်…ဗြစ်…..ပြွတ်…..ပြွတ်……အ…..အ…… အား……….” ကောင်မလေးထံမှ တော်တော်နှင့် အော်သံ ထွက်မလာ…။ အတန်ကြာ အသက်အောင့်ထားပြီးမှ နာကျင်စွာ အော်သံ ထွက်လာသည်..။ ကိုသက်အောင် လက်တစ်ဖက်က တဆတ်ဆတ်တုန်နေသော ပုခုံးပေါ်မှ ခြေတစ်ဖက်ကို ထိန်းကိုင်ထားရသည်..။ ကျန်လက်တစ်ဖက်က အမွှေးနုလေးများ ရှင်သန်ကာစ ဆီးခုံလေးကို ပွတ်သပ်ပေးနေရသည်..။ စက်ဝိုင်း ဝိုင်းသလို အဆက်မပြတ် ပွတ်ပေးနေရင်း စပါးလုံးတစ်ထောက်စာမျှ လောက်စီ နှဲ့သွင်းနေရသည်..။
“ အင့်…..အင်း….ကျွတ် ကျွတ်…..အင့်..အင်း….“ ကောင်မလေး က မင်္ဂလာစောင်ကြီးကို ဆွဲယူပြီး ပါးစပ်နှင့် တေ့ကပ်ကာ လူနာ တစ်ယောက် ငြီးသလို ကြိတ်ပြီး ငြီးနေရှာသည်..။ မျက်ရည်စီးကြောင်းလေးက ပါးပြင်ကို ဖြတ်၍ ခေါင်းအုံးပေါ် ကျနေသည်..။ “ ပြွတ်….ပြွတ်……ပြစ်…..စွတ်……“ “ ဟ…..အား….အင့်အင်း…..အင့်အင်း……….အ..အ…အိ….အ ..“ တဖြည်းဖြည်း အဆုံးထိ ရောက်သွားပြီး ပူနွေးသော ကောင်မလေး ဟာလေးက တင်းကြပ်စွာ စုပ်ယူထားခြင်းကို ခံလိုက်ရလေသည်..။
ကိုသက်အောင် မြို့မှာ ရှိစဉ်က ခလေးထိန်း မချို၏ ပုလွေမုတ်ပေးခြင်းကို ခံစားရဖူးသည်..။ ပူနွေးသော အာငွေ့နှင့် လျှာဖျားလေး များကလိပေးမုက အရသာထူးကဲစွာ ခံစားရခဲ့ဖူးသည်..။ သို့သော် ယခု သည်ကောင်မလေး၏ အပျိုဖော်ဝင်စအရွယ် သန်မာသော ကြွက်သားများဖြင့် လိင်တန်ကို ဖြစ်ညှစ်ခါ စုပ်ယူထားသလို ခံစားရမုက စအိုထဲကပါ မခံနိုင်အောင် သူ့လိင်တန်ကြီးကို ပြန်မနုတ် သေးပဲ စောက်ခေါင်းလေးထဲ၌ စိမ်ထားပြီး မှိန်းနေလိုက်မိသည်..။
“ အင်း….ဟင်း………..အ…ကျွတ်ကျွတ်…..ကျွတ်ကျွတ်…..” ကောင်မလေးက တစ်ချက်မျှ ငြီးတွားပြီး အနည်းငယ် လူးလွန့်လိုက် သော အခါကျမှ လီးထိပ်ကြီးမှာပါးစပ်အတွင်းမှ ထွေးထုတ်ခြင်း ခံလိုက်ရသော ခရမ်းချဉ်သီးကြီးနှယ် ပလွတ် ခနဲ ကန်ထွက်လာ သည်..။ ဒစ်မထွက်ခင် အချိန်မီ ပြန်ပြီး ဟန့်တားနိုင်သဖြင့် ကွင်းလုံးကျွတ် ထွက်မသွားပဲ ပထမ သွင်းစဉ်တုန်းကလို ပင် ငြင်သာစွာ ဆီးခုံလေးကို ပွတ်လိုက် အစိလေးကို လက်ညှိုးလေးဖြင့် ကလိလိုက် လုပ်ပေးရင်း ချော့သွင်းလေး သွင်းလိုက်ပြန်သည်..။
“ အင့်အင်း…..ဟင်းဟင်း…ဟင်း….အင့်….အင်း………..“ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ငြီးတွားသံများက ကွဲပြားခြားနားကြ သည်ကိုလည်း ကိုသက်အောင် သတိထားမိလာသည်..။ ဒီကောင်မလေး ငြီးတွားပုံက ဗိုက်အောင့်လူနာလို အသက်အောင့် အောင့် ပြီး ညီးညူတတ်သည်..။ အဆုံးထိ ရောက်သွားပြန်သောအခါ ယခင်ကလိုပင် တင်းကြပ်စွာ ဖမ်းယူ ဆုတ်ညှစ်ထားခြင်းမျိုး ခံရပြန် ပြီး ကိုသက်အောင် သုတ်သွေးကြောကို စုတ်ထုတ်နေသလို တစိစိ ခံစားနေရသည်..။ ထိုသို့ သုံးလေးကြိမ်မျှ အစုပ်အတန့် လေး များကို ခံစားရပြီးနောက် ချောင်ချိသော လမ်းကြောင်းလေးအသွင်ပြောင်းလာလေသည်..။ ပြစ်ချွဲချွဲ အရေများကလည်း တစိမ့်စိမ့် ကျဆင်းပေးလာသဖြင့် ကျဉ်းမြောင်းသေးကွေးလှသော ကြွက်တွင်းလေးသို့ တံပိုးတုံးကြီး ရေဆွတ်ဆောင့်ရသလို အပေါက်သစ်ချဲ့ နေရသဖြင့် ပင်ပန်းလှသည်..။
ကောင်မလေး၏ အောက်ဖက် အတွင်းပေါင်လေးပေါ်၌ စေးထန်းသော သွေးစလေးများ ယိုစိမ့် ကျဆင်းနေသည်..။ “ အင့်… အင့်…..အင့်……..ဟင့်….အ….အ မေ….ရေ…….” ပါးစပ်ကို စေ့ပိတ်ထားသည်…။ ( အမေရေ ) အော်သံက တိုးတိုးဖွဖွလေး ဖြစ်သည်..။ အတန်ကြာ ညှောင့်ပေးပြီးနောက် ကိုသက်အောင် နို့လေးနှစ်လုံးကို ခပ်တင်းတင်းလေး ဆွဲကိုင်ပွတ်ချေ ဆုတ်နယ်ရင်း ခပ်သွက်သွက်လေး ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်လေသည်..။
“ ပြွတ်…ဖွတ်….စွပ်…..ပြွတ်….ပြွတ်…ဖွတ်…..စွပ်……“ “ အ….အ…..အ အ…ရှီး….အ..အ မလေး….နော်….အင်း…ဟင်း ဟင်း………” ကောင်မလေး တစ်ကိုယ်လုံး ငလျင်လုပ်သလို ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ ဆောင့်လုပ်သွားပြီး ပူနွေးသော သုတ်ရည်များ ပြွတ်ခနဲ အန်ကျလာလေတော့သည်..။ ထိုအခါ ကျမှ ကိုသက်အောင်က ခပ်နာနာလေး ထပ်ဆောင့်ပြီး သူကိုယ်တိုင် သုတ်ရေများ ကို ကောင်မလေး အင်္ဂါဇတ် အခေါင်းထဲသို့ နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးသွင်းဖိကပ် ဖိကပ်ထားပြီး အားရပါးရ ပန်းထည့်လိုက်လေ တော့သည်..။
“ အား…နာလိုက်တာ…….အား…အား…..စပ်လဲ စပ်တယ်…….“ “ နောက်တော့ ပျောက်သွားမှာပါကွယ်…..ခဏ နာတာ ပါ….နော်….“ “ ဦး မကောင်းဘူး….မနက်ဖန် မင်္ဂလာဆောင်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လမ်းလျှောက်ရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး… ပေါင် ထဲက အကြောတင်နေသလိုပဲ…အောင့်တောင့်တောင့်နဲ့…အင်း…အ…..” မှန်သည်…။ မိုးလင်း မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပ သောအခါ ခြေလှမ်းလေးတွေ တုံ့ဆိုင်းနေကြရသည်..။ မသိမသာလေး ကွတကွတ ဖြစ်နေရရှာလေသည်..။ ကိုသက်အောင် သနား သွားမိလေသည်..။
“ ဒီညတော့ ရွာတောင်ပိုင်း ငလျင်လုပ်ပြီ…ဟေ့..” ကာလသားတစ်ချို့က ကိုသက်အောင်နား ကပ်ကာ စကြနောက်ကြသည်..။ ကို သက်အောင်က ပြုံးပြီး အသာနေလိုက်သည်..။ ခွေးမသားလေးတွေ ညက ကမ္ဘာ တစ်ခြမ်း စောင်းသွားတာ မှ မသိလိုက်ကြ တာ..။ “ မိန်းမရေ….ပစ္စည်းတွေ ..သွားပို့ကြရအောင်….” “ ကို့ ဖာသာ သွားပို့တော့….သူများ လမ်း မလျှောက်နိုင်တော့ဘူး…”
“ ဟောဗျ…ဒါဆို…ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ..ရယ်….” “ သွားပေါ့…ဘာလို့ သူများ …လမ်းမလျှောက်နိုင်အောင် လုပ်သေးလဲ…လို့….” ကိုယ့်ရှူးကိုယ်ပတ်ပြီး ကာလသားအချို့နဲ့ ပစ္စည်းများ လိုက်ပို့…ငှါးထားသော ပစ္စည်းများ အပျောက်အရှ စစ်နှင့် မိုးချုပ်သွားလေ သည်..။ ထမင်းစား ရေမိုးချိုးပြီးတော့ ည ၈ နာရီ…။ “ ပွဲ မစသေးဘူးလား…ကိုသက်အောင်…” ရင်းနှီးနေသော ခြောက်ပေါင် ကြည်ဝင်းက နောက်သည်..။
“ ပွဲက မနေ့ကထဲက ပြီးသွားတာ..ဟ…၊ ဒီည နင်တို့ ကာလသားတွေ ချောင်းမယ် မို့လား …အေး…ဒို့ သိုးနေအောင် အိပ်မှာ…..” “ သေကွာ…တောက်….ဟား ဟား..ဟား…ဟား..” ထိုနေ့က တကယ်လည်း ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပဲ ခြေပစ်လက်ပစ် အိပ်ပစ်လိုက်ကြ သည်..။ ဘုမသိ ဘမသိ ခြင်ကိုက်ခံပြီး လာချောင်းကြသော ခြောက်စောင်းနှင့် ယောင်ပွ အရက်မူးမူးနှင့် အိပ်ပျော်သွားကာ မနက် လေးနာရီ တုံးခေါက်မှ အိမ်အောက်က ထွက်ပြေးခဲ့ကြရသည်ဟု နောက်မှ သိရလေသည်..။
“ ကိုကြီး….ထမင်း စားမယ်လေ….” အလယ်…ဘယ်သူသင်ပေးလိုက်သလဲ မသိ..။ အခေါ်အဝေါ်လေးတွေ ပြောင်းသွားသည်..။ ကိုသက်အောင် ကြည်နူး ကျေနပ်စွာ ထမင်းစားသည်..။ “ ညည်းကို ဘယ်သူခေါ်ခိုင်းတာလဲ…အဲ့ဒီလို…” “ ကိုယ့်ဖာသာ …ခေါ် တာ…ဘာလဲ ..မကြိုက်ဖူးလား…ဒါဖြင့် ..ဦးပဲ…ပြန်ခေါ်ရမလား..“ “ ဟဲ့…အို…မကြိုက်လို့ မုတ်ပါဘူး…နားထောင်လို့ ကောင်းလွန်း လို့…“ အသက်ကွာလွန်းသော အိမ်ထောင်ဖက်များမို့ …အပြောအဆို အနေအထိုင် ကအစ တစ်ပန်း ရုံးလွန်းလှသည်..။ အပြော ကလက်သလိုလို စောက်ပေါကြီးပဲ ဖြစ်နေရသလိုလို တစ်မျိုးတော့ တစ်မျိုးကြီး…။ “ ကိုကြီး…က မျက်နှာကြီး…တည်မထား နဲ့..ကွာ…သူများ ကြောက်တယ်…“ အဲ့လိုများ မညုလိုက်နှင့် …။ ကိုသက်အောင် မျက်နှာမှ သိက္ခာသမာဓိ အလွှာလိုက် အလွှာ လိုက် ကွာကျသွားကြရသည်..။
“ ကိုကြီးကို …သူများ အရမ်း ..အရမ်း..ချစ်သွားပြီ…သိလား…” “ ဟင်…ဟုတ်လား….ဘယ်တုန်းကလဲ…ဆိုစမ်း…“ “ မင်္ဂလာမ ဆောင်ခင် ည..က….ကဲ သိပလား…..” ဟုတ်ပါ့ဗျာ…။ ဒါကြောင့် ပညာရှိစကားများ တယ်မှန်ကြသကိုး…။ မခိုးခင်လိုး..၊ မလိုးခင် ထိုး…၊ မထိုးခင် နမ်း..၊ မနမ်းခင် ဖက်…တဲ့…။ အမလေးလေး…နော်…၊ ဒီဟာမလေးနှယ် ဗျာ…။ ဒီလောက်ကြီး နာကျင် ကိုက်ခဲပြီးမှ ခံစားရတဲ့ အချစ်အရသာကို တပ်မက်လွန်းလှပါတယ်…။ ကိုသက်အောင်ကတော့ စပ်ဖြင်းဖြင်းနှင့် ထိပ်က နာကျင်နေဆဲ…။
တောဓလေ့ဆိုတော့လဲ ..တောအနေအတိုင်း နေတတ်အောင် ကျင့်ရပြန်သည်..။ ထင်းခွေ ရေခပ်…နွားကျောင်း အလုပ်များနှင့် မြေ ပေါက်မြောင်းတူး တောင်ယာအလုပ်တွေက ကိုသက်အောင် အဖို့ ယခုမှ စတင် ရင်းနှီးရသော အလုပ်များမို့ ဖျားရပြန်သည်…။ “ သက်အောင်ရယ်..ဒါ..မိုးထဲ ရေထဲ အချိန်ကွ…မင်းက ဘာလို့ များ ဖျားနေရပြန်တာတုန်း..ဟ…..ငတို့တုန်းကဆို …တစ်လ တိတိ..ခြင်ထောင်ထဲက မထွက်ဖူး..မောင်…” ဘိုးလေးချစ်က ရယ်စရာ အလွန်ပြောသည်..။ ခွေးမက ထိုစကားကြားသောအခါ ကိုသက်အောင် နားဝသို့ ကပ်ပြီး…..“ ..နှာဗူးကြီး…..” ဟု တိုးတိုးပြောသည်..။ ကိုသက်အောင်က ရယ်နေသည်..။
“ ကိုကြီး…ပစ်သွားရင်…သူများ တကယ် သေပစ်မှာ…သိရဲ့လား….” “ဟင်…ဘယ့်နှယ်ဟာ စိတ်ကူးပေါက်ပြန် တာလဲကွာ…” “ ကြိုပြောထားတာ…ဘာစိတ်ကူး မှ ပေါက်လို့ မဟုတ်ဖူး…“ “ ချစ်လို့မှ ယူထားပြီးပြီပဲကွယ်…ဘယ် ပစ်ရက်မှာလဲ…“ “ အင်းပါ… အင်းပါ…မပစ်ရင် ပြီးတာပါပဲ…တော်….” သူ့စကားလုံးတွေက အသဲမှ လာမှန်း ကိုသက်အောင် သိသည်..။ စာမတတ် ပေမတတ် စကားတန်ဆာ မဆင်တတ်ပြန်တော့ စကားလုံးတွေက မလှ…။ တော် တို့ တော့ တို့ ငါ တို့ သုံးလေ့ရှိသည်မို့ ကြီးသူနဲ့ ငယ်သူ နားထောင်ရသောအခါ အဆင်မပြေချင်ပေ…။ သို့သော် ကိုသက်အောင် ဖြည့်စွက် နားထောင်တတ်ခဲ့သည်..။
ကံကြမ္မာသည် ရဟတ်လို လည်ပတ်တတ်သည်..ဟု ဆိုကြ၏..။ ကိုသက်အောင် အကြွင်းမဲ့ လက်ခံချင်ပါသည်..။ ကမ္ဘာတစ်ဖက် ခြမ်း ၌ အပျော်ကလေးများ ဝေစီနေစဉ်မှာ သည်ဘက်ခြမ်း ၌ အလွမ်းတေးဖွဲရန် ကံကြမ္မာက ဇယားချထားပြီး ဖြစ်နေတတ်သည်..။ “ ဦး….ကျနော့် နာမယ်..သိန်းတိုးပါ…တောရွာလေး ရွာသားပါ..။ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်သွားလုပ်တာ…၂ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်…၊ အခု ရွာကို ပြန်လာတာပါ..၊ အလည်ပဲ ဆိုပါတော့…“ အဲဒီ..သိန်းတိုးက ခွေးမနဲ့ ငယ်ရီးစားတဲ့ဗျာ…။ ကိုသက်အောင် ဘယ်သိပါ့မလဲ…။ အိမ်ပေါ်လာတော့လည်း ဧည့်ခံရတာပဲပေါ့..။ အဲ…ခွေးမလည်း တောထဲက ပြန်လာရော…
“ ဟင်…ကိုရင် သိန်းတိုး…..ဟယ်…” အားရဝမ်းသာကြီး ခွေးမ ပြေးတက်လာတယ်..။ ဝမ်းနည်း ပက်လက်ကြီး မျက်နှာပျက်သွား တယ်..။ ကိုသက်အောင် ဒါတော့ သတိထားမိတယ်..။ “ နင်…နေကောင်းတယ်နော်…. ခွေးမ…” “ အင်း….ကောင်းပါတယ်….” “ မင်္ဂလာဆောင်တာတောင် ငါ့ကို မဖိတ်ဘူး…ဟာ…” “ လူကြီးတွေ အမြန် စီစဉ်ကြတာ..ဟ…” ကိုင်း…ကိုသက်အောင် ရှေ့ထားပြီး ပြောနေကြတဲ့ စကားတွေ လေ…။ ကိုသက်အောင် ဖြေးလေးစွာ ထရပ်လိုက်သည်..။
“ သိန်းတိုး….စကားပြောရစ်ဦး ကွာ…..ဦး ရေသွားချိုးလိုက်အုံးမယ်…” “ အိုး….မိုးချုပ်နေမှ ..မချိုးနဲ့…ပြန်ဖျားနေအုံးမယ်…” ကို သက်အောင်က သည်စကားတွေကို သိန်းတိုးရှေ့၌ အာဏာ ပြချင်၍ သာ သုံးသော စကားဟု နားလည်လိုက်သည်..။ သိန်းတိုး ကတော့ သူ့လင်အတွက် စိုးရိမ်တတ်လိုက်တာ ခွေးမရယ်….လို့ တွေးသည်..။ ကိုသက်အောင်က ခန့်ညားရင့်ကျက်စွာ ပြုံးရင်း အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်..။ ခွေးမနှင့် သိန်းတိုးက သူသွားရာသို့ ငေးမိကြသည်..။
“ ခွေးမ…နင် ..ဒီလူကြီးကို ဘာလို့ ယူတာလဲ..ဟင်….” “ ချစ်လို့ပေါ့ဟဲ့….သိန်းတိုးရဲ့…မချစ်ပဲနဲ့ ညားမလား….“ “ နင်…ငါ့ကိုတော့ မစဉ်းစားဘူးပေါ့…ဟုတ်လား….” “ အေး….ငါ မစဉ်းစားခဲ့မိဘူး…” “ ရက်စက်လိုက်တာ….ခွေးမ ရယ်…..“ ပြောပါ …သိန်း တိုး..နင်ပြောချင်သလို ပြောသာပြောပါတော့…။ ငါ့ဘဝက တွယ်ရာမဲ့ ဗေဒါ…ရေမှာ တွေ့တဲ့ အမှိုက်သရိုက်မှန်သမျှ တွယ်မိကပ်မိ တာ..ငါ့အပြစ်တဲ့လား…သိန်းတိုးရယ်…။ ဒါ..ခွေးမအတွေး…ဒါပဲ…လူတွေမှာ အဲဒီ အတွေးနဲ့ ကိုယ်လိုရာ ဆွဲယူခဲ့တတ်ကြတာက… အမှား…။
“ ငါ သိပ်မှားသွားပြီ….ကိုသက်…” “ ရော်…ဖြစ်ရပြန် ပြီ….” “ ဒီကောင်မလေးမှာ ရီးစားရှိနေတာ …မင်းမသိဘူးလား…..၊ ခုတော့ ငါက လူဆိုးကြီးလိုလို…ငွေရှင်ကြေးရှင်ကြီးက မတရား သိမ်းပိုက်ထားသလိုလို…” “ ဟာ….ရီးစားမရှိပါဘူး….ဘယ်သူပြော လဲ…..“ “ ဟ…မနေ့က ငါ့အိမ်လာလည်တယ်ကွ….သိန်းတိုး တဲ့….” “ ဟာကွာ….အလကား ကောင် ..ဖဲသမား…..ကောင်မလေးကို တဖက်သတ်ကြိုက်နေတာ….မဟုတ်တာတွေ..ဗျာ…” ခက်သည်…။ ကိုသက်အောင်လို လူစားကလည်း အရှားသား…။ အချစ်နဲ့ စပ်လျဉ်း၍ ဒဿဂီရိလိုနေရာမျိုးက သူမကချင်..၊ ရုပ်ရှင်တွေ ဇာတ်တွေထဲ၌ ထိုသို့ သရုပ်ဆောင်သူများကိုလည်း အပြင်မှာပါ သူလိုက်ပြီး မုန်းတတ်သည်..။
ဘာပဲ ပြောပြော သိန်းတိုးနှင့် ခွေးမတို့ ငယ်စဉ်က ဇာတ်လမ်းကလေး ရှိခဲ့ရမည်ဟု တော့ သူက တွေးယူသည်..။ “ ငါက မိန်းမတွေ အများကြီး ကြုံလာခဲ့ဖူးတယ်…..ခွေးမ သိလား…၊ ငါလိုကောင်က ငါ့အချစ်ကို စော်ကားရဲရင် ငါက ဆယ်ခါပြန် စော်ကားပြတတ်တဲ့ လူဆိုတာ…မင်းစွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ထား…သိလား…..” ခွေးမ တဲ့…၊ သူမကြိုက်တဲ့ နာမယ်ကြီးကို ခေါ်တယ်လေ…။ ခွေးမ ငိုချင်တယ်..။ ဟို နှမလိုး သိန်းတိုးလာသွားပြီးကထဲက ပြဿနာ တက်တော့တာပဲ..။
ခွေးမ သူနားလည်အောင် ပြောပြချင်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ခွေးမ မပြောတတ်ဖူး…။ သူ့ကိုလဲ …ခွေးမ စွဲစွဲလမ်းလမ်း ချစ်နေမိပါ ပြီ…ဆိုတာလဲ မရှက်မကြောက် ပြောဖူးရဲ့ သားနဲ့…။ ညဘက် တွေလည်း ပြန်မအိပ်တာ…များလာပြီ…။ ညဘက် ရေနံဆီ ကုန်တဲ့ အထိ …ခွေးမ သူ့ကို ထိုင်စောင့် ပါတယ်..။ ဒီညလည်း ဝတ္တရားမ ပျက် လင်ကို ထိုင်စောင့်ရင်း အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ မှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွား ခဲ့တယ်…။
လေးလံတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီး တစ်ခုက ခွေးမဗိုက်ပေါ်မှာ တက်ဖိလာတော့မှ လန့်နိုးသွားမိတယ်..။ အရက်နံ့ကလည်း မွှန်လို့….။ မီးခွက် ကလည်း ငြိမ်းနေပြီ…။ ခွေးမ သူ့ကို အတင်း တွန်းပစ်လိုက်တယ်..။ “ သွားစမ်းပါ….အိမ်မှန်း ယာမှန်း မသိပဲနဲ့….” သူက ဘာမှ ပြန်မပြောပဲ ခွေးမ ပေါင်ကြားထဲကိုသာ တွင်တွင် နှိုက်နေတယ်…။ သုံးလေးရက်ကြီးတောင် ဘာမှ မလုပ်ရတော့ သူမနေနိုင်ဘူး လေ….။ “ အခုမှ ငမ်းငမ်း တက်မနေနဲ့…..ဟွန်း….” သူ့အသက်ရှူသံတွေက အရမ်းပြင်းတာပဲ…။ မနားမနေပဲ ထမီနားကို ဆွဲလှန် ပြီး လုပ်တယ်…။ “ ပြွတ်….ပြွတ်…..စွပ်….ဖွတ်….ဖတ်….ဖတ်….ပြွတ.်…စွပ်….“
“ အင့်…..အင့်……အင့်…ဖြေး…..ဖြေး ဖြေး..လုပ်စမ်း ပါ….တကယ်ပဲ…ရှင်…” လမ်းကြမ်းမှာ ကားစီးရသလိုပဲ မနားတမ်း ဆောင့် နေတာ…အိမ်ကြီးကို သိမ့်သိမ့်ခါနေတာပါပဲ….။ ကျမခြေနှစ်ချောင်းကို ဆွဲမပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် အားရပါးရ ဆောင့်တဲ့ဒဏ်ဟာ အတော်ထိတယ် ရှင်…။ ကျမလည်း ကိုယ့်လင်က လိုလိုချင်ချင် အငမ်းမရလုပ်တာလေးကိုပဲ…အားရကျေနပ်စွာ ခံနေမိခဲ့ပါ တယ်…။
“ ပြွတ်…ပြွတ်……စွပ်…ဖွတ်…..ပြွတ်…..ပြွတ်…..“ “ အင့်…အင့်…..အ…အ…အင့်……….“ လင်မယားလိုးတာ အဆန်းမှ မဟုတ် တာ…။ ဘာသံတွေ ထွက်ထွက်ဆိုပြီး…ကျမလဲ သူ့ကို မတားဘူး… လွှတ်ပေးထားမိတယ်…။ တစ်ခါတစ်လေ သူက ကျမ နို့နှစ်လုံး ကို မမှီမကမ်း လှမ်းဆွဲနေလို့ ကျမက အင်္ကျီ ကျယ်သီးတွေ ဖြုတ်ပေးမိပါသေးတယ်…။ “ အိ…အိ…..အား….အား…….အင့်… ဟင့်..အင့်…အင်း……“ အံကြိတ်ပြီး ညာသံပေး ဆောင့်လိုးရင်းက သူပြီးသွားပါတယ.်..။ ကျမက ဆတ်တငံ့ငံ့နဲ့ ကျန်နေသေးလို့ သူ့ခါးကို ဆွဲပြီး ထပ်ဆောင့်ခိုင်းရပြန်တယ်…။ သူကလဲ ထပ်ဆောင့် လိုးပေးပါတယ်….။
“ ကဲ…မီးခွက် ထွန်းစမ်း…ယောင်ပွ….မင်းတို့ အမြင်ပဲ…” လက်နှိပ်ဓါတ်မီး အရောင်နဲ့ သိန်းတိုးမျက်နှာကြီးဟာ ကျမ အပေါ်မှာ အထင်းသား ခွလျက်သားကြီး ရှိနေပါတော့တယ်..။ “ ဟင်…..မအေလိုး….ကိုယ့်မေကိုလိုး….ကဲ…ဖုန်း…အင့်….” ပါးစပ်ကလဲ ဆဲ ပြီး ကျမ ဆောင့်ကန် ပစ်လိုက်ပါတယ်…။ “ သူ…..သူ ခေါ်လို့ လာတာပါဗျာ….သူ ခေါ်လို့ လာရတာပါ…..” သိန်းတိုး လူယုတ်မာ…၊ ကျမကို စောက်ရှက်ခွဲတယ်..။ ကျမ အသားတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်ပြီး ဒေါသတွေ ဖြစ်လာမိတယ်…။
“ ငါ့လင်မှတ်လို့…နင့်ကို ခံတာ ဟဲ့…..မအေလိုး ရဲ့…” သိန်းတိုးကို လူကြီးတွေ ခေါ်သွားကြတယ်..။ သူက ကျမနဲ့ လူကြီး သုံးလေး ယောက် ထိုင်ခိုင်းပြီး …ပြောပါတယ်…။ “ ကျုပ်..အရွယ်မတူတာကို ယူခဲ့မိတာ…ပထမ အမှား…နော်…၊ နောက် ရီးစား ရှိ…မရှိ….မ စုံစမ်းခဲ့တာ ..ဒုတိယ အမှား…..” “ မဟုတ်ဘူး…..ကိုသက်အောင် ..ကျနော် ရှင်းပြမယ်….” “ ဘာရှင်းပြအုံးမှာလဲ…ကို အေး….အခုပဲ..တတ်လပ်ကြီး မိနေတာ…ခင်ဗျားတို့ မျက်စိတွေ လီးနဲ့ ထိုးထားလို့လား…..” “ ဟာဗျာ…..ကျုပ်တို့က ပြေရာ ပြေ ကြောင်း …” “ မလိုဘူး….ကျုပ် လူအ မဟုတ်ဘူး…. ပြီးတော့ ကျုပ်ပညာ အရည်အချင်းနဲ့…လဲ…မိန်းမ မရှားဘူး…၊ ဒါပဲ… အဲဒီ ကောင်နဲ့…ပေးစားလိုက်ကြ…” ပြောပြီး…ကိုသက်အောင် အိမ်ပေါ်မှ ခုန်ဆင်း ထွက်သွားသည်..။
“ မိုက်လိုက်တာ….ခွေးမရယ်…သိန်းတိုးနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး…..” “ မဟုတ်ဖူး….မဟုတ်ဖူး…..ကျမ ကိုသက်အောင် မှတ်လို့ ငြိမ်နေ တာ…..” “ သေပါလားဟာ….ကိုယ့်လင် နဲ့ ဒီပြင် ယောက်ျားတောင် နင်မခွဲတတ်ဘူးလား….ခွေးမရယ်….တောရွာတစ်ရွာလုံးတော့ ကျော်ပါပြီကွာ….” ကျမ သူတို့နားလည်အောင် ရှင်းမပြတတ်ဘူး…။ လက်ပူးလက်ကြပ်ကြီး တက်လုပ်နေတုန်း မိသွားတာဆို တော့လည်း ကျမ ဘာပြောတတ်တော့မှာလည်း….အရပ်ကတို့ရယ်….။
မိန်းမတွေကို ..ကိုသက်အောင် မယုံချင်တော့ ပြီ…။ ညအခါ သာသော လသည် အေးမြသည်..။ နေ့အခါ ထွန်းလင်းသော နေမင်း သည် ပူလောင် ပြင်းပြသည်..။ နွေတွင် နေပူပြီး ဆောင်းတွင် နှင်းကျကာ မိုးတွင် မိုးရွာသွန်းမု ရှိသည် ဆိုသော သဘာဝ ဓမ္မ တရား ကို မိန်းမတွေ ကျိန်တွယ် ပြောအုန်း…ကိုသက်အောင် မယုံချင်တော့ပါ…။ အခါ ခပ်သိမ်း ချမ်းမြေ့မုကို လိုလားတောင့်တကြသော လူသားများဆီသို့ သောကဝေဒနာသည် မဖိတ်ခေါ်ပဲ အလည်လာတတ်ကြောင်း ကိုတော့ လက်ခံလိုက်ရသည်..။
တောရွာလေး ရွာ၌ သူမျက်နှာ ဘယ်လို ထားရမှန်း မသိတော့ ..။ ရှက်လိုက်သည်မှာ လည်း ကန်ဘောင်သို့ ရေပင် ထွက်မချိုးရဲ လောက်အောင် ဖြစ်သွားသည်..။ ထို့ကြောင့် နောက်တစ်နေ့တွင်ပင် တောရွာလေးကို အပြီးအပိုင် စွန့်ခွာရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရသည်..။ “ ကိုကြီး….ခွေးမကို မပေါင်းနိုင်တော့ဘူးပေါ့….နော်…” “ ဟုတ်တယ်….နင့်လို ဖင်သရမ်းတဲ့ ဟာမမျိုး မလိုချင်ဖူး…..” “ ပြောရက် လိုက်တာ….ကိုကြီး ရယ်….၊ ခွေးမ လင်ငယ် နေတာ မဟုတ်ဘူး….၊ ကိုကြီးလာတာပဲ ဆိုပြီး….ဟို ဥစ္စာ……” “ တော်စမ်း ပါ….ဟာ……လင်ငယ်နေတာ မဟုတ်ပဲ ..အပျော်ခံ တာပေါ့…ဟုတ်လား…….၊ အေး….ထမင်းတစ်လုပ် ရှာမကျွေးရပဲ….အဲသလို ကုန်းတဲ့မိန်းမမျိုးပဲ ရှာပြီး လုပ်တော့မယ်….၊ ဒါပေမယ့်…နင့်လို မိန်းမပဲ… ရှိမှာပါ…..ရန်ကုန်မှာတောင်…ပိုက်ဆံပေးမှ ခံတာ….နင် က အပျော်ခံတာ ဆိုတော့ ..”
“ မဟုတ်ဖူး….အဲဒီလို မပြောပါနဲ့….မဟုတ်ဖူး…..” ခွေးမ မဟုတ်ဖူး ဆိုတာပဲ ငြင်းနိုင်တယ်..။ ကိုကြီး နားလည်အောင် မပြောတတ် ဘူး…။ ရင်ဝ မှာ အောင့်ပြီး… နာကျင် ပူလောင်နေတယ်…။ ကိုကြီး ရွာမှ အပြီးတိုင် ကျောခိုင်းထွက်သွားခဲ့လေပြီ…။ ခွေးမ နှင့် သိန်းတိုးက လူကြီးများက ဆက်လက် နေရာချပေးသည်..။ သိန်းတိုးကလည်း သူ့အပြစ်ကို ဝန်ချတောင်းပန်သည်..။ “ ငါ….နင့် ကို ချစ်လွန်းလို့ပါ…ခွေးမရယ်…ငါ…ငါ…နင့်ကိုလေ..သေအထိ ပေါင်းသင်းသွားမှာပါ……” ယုံပါတယ်..၊ သိန်းတိုး စကားတွေကို ခွေးမ ယုံပါတယ်…။ စာရိတ္တ ပိုင်းမှာ အရက်သောက်တာ ဖဲရိုက်တတ်တာကလွဲပြီး..သိန်းတိုးမှာ ဘာအပြစ်မှ မရှိဘူး…။ ခွေးမ လက်ခံခဲ့ရပြန်တယ်…လေ..။
“ အိပ်ကြရအောင်…..ခွေးမရယ်….နော်…” ဒါပါပဲ…၊ သူတို့ယောက်ျားတွေရဲ့ ဆန္ဒက မိန်းမယူတယ်ဆိုတာ… ဒါကိုပဲ အဓိက ထား ကြတာပဲ မဟုတ်လားရှင်…။ သိန်းတိုးက ကျမကို အားရပါးရ စပ်ယှက်နေပေမယ့် ကျမရဲ့ အင်္ဂါဇတ်ထဲမှာ အရသာ မတွေ့လှဘူး..။ စိတ်မပါတာလဲ…ပါမယ် ထင်ပါတယ်..။ သိန်းတိုးက လူပျိုပီပီ ကျမကို အကြိမ်ကြိမ် စပ်ယှက်ပါတယ်..။ ကျမ မှေးခနဲ..အိပ်ပျော်တဲ့ အထိ သူ ကြာလှပါတယ်..။ ကြာတော့ စောက်ပတ်လည်း ကျိန်းစပ်လာတယ်..။ အရေတွေလည်း အိုင်ထွန်းနေတာပါပဲ…။
“ ခွေးမ…နင် ငါ့လီးကို စုပ်ပေးပါလား…ဟင်….” “ ဘာ….ဘာ…မအေလိုး…နှမလိုး…ဟင်…နင်က လိုးလို့ အားမရသေးဘူး…စုပ်ခိုင်း ရသလား….မအေ….” ကျမ အသားတွေ ဇိုးဇိုးဆတ်ဆတ် တုန်လာတဲ့အထိ ရှက်ဒေါသတွေ ဖြစ်ရပါတယ်…။ ဒီလောက် ညစ်ပတ် နံစော်နေတဲ့ သူ့လီးကြီးကို ကျမ ဘယ်တော့မှ မစုပ်ဖူး…။ သိန်းတိုးက အပေါ်စီး ရထားသူပီပီ..ရယ်ပါတယ်…။ “ အေးလေ….မစုပ် ချင်လဲ နေပေါ့…ငါကတော့ စုပ်တတ်တဲ့…နောက်တစ်ယောက် ထပ်ရှာရုံပဲ ပေါ့….ဟား ဟား….” “ ဟင်….လူယုတ်မာ….သဒေါင်း စား…”
ကျမတို့ နှစ်ယောက် အိပ်ခန်းထဲမှာ သတ်ပုတ်ကြပါတယ်…။ မိန်းမနဲ့ ယောက်ျား ဆိုတော့လဲ…ကျမပဲ ငိုရတာပဲပေါ့…။ ကျမ ပျော့ ခွေသွားတော့ သိန်းတိုး ဘာလုပ်တယ် မှတ်သလဲ…..။ ကျမ စောက်ဖုတ်ကို လျှာနဲ့ ယက်တာ….. “ အ…အ…ဟိ…..အ…..အ….ယား တယ်…..အလိုလေးလေး…..အိ….အိ….အ…” အိုရှင်…..အစေ့လေးကို …စွန်ပလွန်စိ စုပ်သလို စုပ်ပေးနေ တာများ….ကျမတော့ သေးတောင် ထွက်ချင်ပါတယ်…။ ဒါပေမယ့်…ခံလို့ကောင်းလှပါတယ်…။ အခုန ရန်ဖြစ်ပြီး သတ်ပုတ်ခဲ့ကြ တာတွေ ကိုလဲ ကျမ မေ့သွားတယ်…။ ကျမ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးကို ဖြဲကားပြီး စောက်ဖုတ်ယက်ပေးနေတဲ့ သိန်းတိုး ခေါင်း ကို စောက်ပတ်ကြားထဲ အတင်းပဲ ဖိချပြီး ဆွဲဆွဲ ဆောင့်နေမိတော့တယ်….။
“ပြတ်…..ပလပ်…..စွပ်….စွပ်…ပြွတ်…..ပလပ်…….” သိန်းတိုးဟာ မရွံမရှာနဲ့ ကျမဟာလေးကို တပြတ်ပြတ်နဲ့ ယက်ပေးနေတယ်..။ ကျမလည်း အသဲတုံ အူယား ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာက ဘယ်ဟာနဲ့မှ မတူတာမို့ တဟင်းဟင်း နဲ့ ငန်းဖမ်းသလို ငြီးရင်း ပေါင်နှစ်ဖက်ကို အစွမ်းကုန် ဖြဲကားပြီး ခံပေးနေမိပါတော့တယ်…။ အရေတွေ ရွှဲအိုင်လာတဲ့ ကျမဟာလေးကို သူက စိတ်ရှိလက်ရှိ တက်လိုးပြန်ပါ တယ် ရှင်..။ ကျမ အလူးအလဲ ကောင်းသွားမိခဲ့ရပါတယ်..။ အင်္ဂလိပ်ဆေးလို ဆေးပြားတွေကို စွဲသွားပြီးရင် နောက် သူ့ထက်ပျော့ တဲ့ဆေးဆိုရင် အာနိသင် မတိုးတော့ဘူးဆိုတာ ရှင်တို့ ကြားဖူးကြမှာပေါ့နော်….၊ ကျမလေ အခုဆို အယက်ခံ လျှာစောင်းအထိုးခံရ ပြီးမှ အလိုးခံတတ်နေတယ်…ရှင့်…။
သူ မယက်ပေးရင် ကျမ အာသာမပြေတော့ဘူး..။ သည်တော့ သိန်းတိုးကလည်း ကျမကို အကြပ်ကိုင်တယ်..။ သူ့ဟာကို စုပ်ပေးရ မယ် ပေါ့…။ “ နင်….ရေစင်အောင် ဆေးခဲ့…ဟာ….” သိန်းတိုး နောက်ဖေး ရေကပြင်မှာ သူ့လီးကို ရေဆေး ဆပ်ပြာတိုက်ပြီး အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာတယ်..။ ပထမတော့ သူ့လီးကြီးကို ကိုင်ပြီး ပါးစပ်နဲ့တေ့ရမှာကို ကျမ ဝန်လေးလွန်းနေတယ်…။ ရွံသလိုကြီး လဲ ခံစားရတယ်..။ မျက်စိမှိတ်ပြီး ငုံ့စုပ်လိုက်တော့ ရုတ်တရက် သိန်းတိုးက ကျမ ဇက်ပိုးကို ချုပ်ကိုင်ပြီး ဖင်လိုးသလို ဆောင့်လိုး လိုက်ပါတော့တယ် ရှင်…။ ကျမလဲ မျက်ရည်တွေ ဝိုင်းသွားပြီး ဒေါသ ဖြစ်သွားမိပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ဝက်ဖြစ်မှတော့ ချေးမ ကြောက်တော့ပါဘူး…လေ…။ ပါးစပ်ထဲ ရောက်နေတဲ့ သူ့လီးကို ကျမ လျှာနဲ့ ပွတ်သပ်ထိုးဆွ ကလိပေးလိုက်မိပါတယ်..။ သူတို့ ယောက်ျားတွေဟာလဲ ဒါမျိုးကို အတော်မက်မောကြတာပါလား….ရှင်…။
သိန်းတိုး မျက်နှာဟာ ရုံ့မဲ့ပြီး တွန့်လိမ်နေပါတော့တယ်..။ ကျမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အစုပ်အယက်တွေသာ မပါခဲ့ ရင် ကျမတို့ လင်မယား ကွဲကြမှာ အမှန်ပါပဲ…။ ခုတော့ သူ့စကားနဲ့… ဘာဂျာမုတ်တာလေးကလဲ အသဲခိုက်အောင် စွဲလန်းခဲ့ရသလို ကျမ ပုလွေ မုတ်ပေးတာကိုလဲ သူ အစွဲကြီး စွဲလန်းသွားခဲ့ပါပြီ…။ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုကြီးကို ကျမ သတိရတတ်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် သိန်းတိုးနဲ့ ယှဉ်ပြီး ဘယ်သူ့ကို ပေါင်းသင်းမလဲလို့ မေးလာကြရင် ကျမ ရင်နာနာနဲ့ သိန်းတိုးကိုပဲ လက်ဆွဲပြမိတော့မှာ အမှန်ပါပဲ ရှင်…။ ကျမအတွက် သိန်းတိုးဟာ အကောင်းဆုံး အလိုးသမား တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ..။
ကျမနဲ့ သိန်းတိုးတို့ဟာ နေ့တွေ ညတွေ သိပ်မရွေးနေကြတော့ပါဘူး..။ တစ်ခါတစ်လေ တောင်ယာထဲကြုံရင် တောင်ယာထဲ..၊ စမ်းချောင်းထဲ ကြုံရင် စမ်းချောင်းထဲ ၊ ခြုံ ကောင်းလို့ စိတ်ထလာရင်လည်း ထလုပ်လိုက်ကြတာပဲ….။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ငြီးငွေ့မသွားဘူး..။ သူ့ ကို မမြင်ရရင် ထွက်သွားပြီလားလို့ ကျမ စိုးရိမ်နေတတ်ပါပြီ..။ သူကလည်း ကျမကို မတွေ့တာနဲ့ ရွာစဉ်လျှောက်ပြီး ရှာတတ်တော့ တာပါပဲ…ရှင်..။
“ ခွေးမလေးရယ်… ငါ့ကို မုန်းမသွားနဲ့နော်….“ “ ငါပြောရမဲ့ စကားပါ….သိန်းတိုးရယ်….” “ နင့်လူကြီးကို မလွမ်းဘူး လား…..ဟင်….” “ နင့် လိုသာ ယက်ပေးရင်…နင့်တောင် မစဉ်းစားဘူး…” တကယ်ပါ…ရှင်..၊ ကျမ အပိုတွေ ပြောနေတာ မဟုတ် ပါဘူး..၊ သိန်းတိုးလိုသာ ကိုကြီးက ကျမကို ယုယပေးရင် ကိုကြီး ခြေနဲ့ကန်လွှတ်လဲ ကျမ လိုက်ဖက်ထားမှာ….။ ခုတော့ အပြုအစု အယုအယမှာ သိန်းတိုးဟာ ကိုကြီးထက် သာလွန်နေပြီမို့ ကျမဘဝလေး နေပျော်လာပါပြီ….ရှင်…။
ကိုသက်အောင်တစ်ယောက်တော့ လေနှင်ရာ လွင့်ခဲ့ရပြန်ပါပြီ…။ ဘဝက ကြွေပြီးသစ်ရွက် … လေထဲလွင့်မျောနေသလို အဆုံးမရှိ အစမရှိ…။ ကိုယ့်ဘဝကို ဖြစ်လိုရာဖြစ်စေ ရွက်လွှင့် တက်ဖွင့်ပြီး ခရီးနှင်ပစ်လိုက်ချင်သော်လည်း ခလေးတွေက တန်းလန်း ရှိနေပေ သေးရာ သူတို့လေးတွေ အတွက် စဉ်းစားရပေအုံးမည်..။ ကိုသက်အောင်အပေါ် ပုံ့ပုံ့သဘောထားတွေ အပြောင်းကြီး ပြောင်းလဲနေ မည်မှာ မုချ ဖြစ်သည်..။
ထို့ကြောင့်လည်း ပုံ့ပုံ့နှင့် တွေ့ရန် မကြိုးစားတော့ပေ..။ သားနှစ်ယောက်ကို ကျောင်းသို့ပို့ပြီး သည်နှင့် ကိုသက်အောင် အလုပ်သွားရ သည်..။ အလုပ်က စာအုပ်တိုက်တစ်ခုတွင် သာမန် စာစီသမားဘဝဖြင့် လုပ်ကိုင်နေခြင်း ဖြစ်သည်..။ စာရေးချင်စိတ်လည်း မရှိ..။ ရေးပြီးသာ စာမူများလည်း မကြိုက်…။ ဟိုးယခင်က ထုတ်ဝေသူ ကိုမင်းမောင်လည်း ဘယ်ဆီရောက်နေသည် မသိ..။ ဘဝကို ရေစုန်မှာ မျှောရင်း အလိုက်သင့်အမောဖြေနေသလို…။ ဘာတစ်ခုမျှ ကြိုးကြိုးပမ်းပမ်း လုပ်ကိုင်လိုစိတ် မရှိဖြစ်နေခဲ့ရသည်..။
ဤသို့ အပေါ်ယံကြော ဘဝလေးမျှနှင့် ရင်ဆိုင် ရေစုန်မျှောနေစဉ် ရေစုန်မှာ မျောပါလာသော ခင်သက်မူ နှင့် ထပ်မံ၍ ဆုံဖြစ်ကြရ ပြန်လေသည်..။ ခင်သက်မူက ထမင်းဆိုင် အငှါးရောင်း မိန်းခလေး စားပွဲထိုး ဆိုပါတော့…။ ကီလီဆိုသည်က လူစုံ …ဘဝစုံ..စရိုက် စုံ ဆိုသည့် နေရာမျိုး…။ အမေရိကန်ပြည်က ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လို အသေးအမွှား ဒုစရိုက်တွေက ဒုနဲ့ဒေး…။ ဖာသယ် ၊ ခါးပိုက်နှိုက် သာမက အလစ်သမား သူခိုးကြီးတွေလည်း ရှိသည်..။ ခင်သက်မူတို့ ထမင်းဆိုင်လေးက ကီလီနှင့် မဝေး…။ ရထား လမ်းအဟောင်းတစ်ခုကို မျက်နှာစာပြုကာ အလုပ်သမား ပျံကျဈေးသည်နှင့် အနိမ့်စား အလုပ်သမားတွေအတွက် ငပိရေ တို့စရာ အားပြုကာ ဈေးပေါပေါနှင့် ရောင်းချပေးနေသည့် ဆိုင်ဖြစ်သည်..။ ကိုသက်အောင်ကလည်း တစ်ခွက်တစ်ဖလားတော့ ပြန်ချဖြစ် နေပြီ ဖြစ်သည်..။
“ အရမ်း မသောက်နဲ့လေ…အစ်ကို ….ထမင်းမစားနိုင်ပဲ နေအုံးမယ်…” အနားကပ်ပြီး ဆိုင်ရှင်မသိအောင် သတိပေးတတ်လာ သည်..။ နေ့စဉ် မျက်မှန်းတန်းမိလာတော့လည်း အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်စီးယိုယွင်းနေကြသော လူကြီးလူကောင်းလို ဖြစ်နေ တော့သည်..။ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုသက်အောင် ခင်သက်မူတို့ ဆိုင် မရောက်ဖြစ်ပေ…။ အလုပ်များသဖြင့် ဆိုင်ရှေ့မှ ကြာဇံသုတ်နှင့် ဟင်းခါးဖြင့်သာ တစ်ဝမ်းတစ်နေ့အတွက် ပြီးပစ်လိုက်တတ်သည်..။ “ မနေ့က အသည်းအမြစ် ချန်ထားတာ အစ်ကို ဘာလို့ မလာ တာလဲ…..” “ အလုပ် မအားလို့….” ကိုသက်အောင်က မိန်းမတွေ ကို သိပ်ပြီး စောက်ရော မဝင်ချင်တော့..။ အာပလာ စကားတွေ နှင့် မြှူဘို့ ချဘို့လောက်သာ စဉ်းစားနေကြသူများ အဖြစ် သူ နားလည် လက်ခံထားခဲ့လေသည်..။
ထို့ကြောင့်လည်း ခင်သက်မူကို သိပ်အရောမဝင်..၊ ခပ်မှန်မှန် ခပ်တန်းတန်းသာ နေပြီး သာမန်ဈေးသည်တစ်ယောက်ကို ဆက်ဆံ သလိုသာ ဆက်ဆံလေသည်..။ ခင်သက်မူကလည်း မြင်ရုံဖြင့် စိတ်ဝင်စားလောက်သော ရုပ်ရည်မျိုးတော့ မဟုတ်..။ သို့သော် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က ကာမဆန္ဒ အတွက် စဉ်းစားသူများအဖို့ ရှာမှ ရှားသော အချိုးအဆစ် ဖြစ်သည်..။ ခါးဆစ်ဆီမှ ထစ်ပြီး ကားပြန့်လာသော တင်ပါးအစုံက ဝိုင်းစက်အိပဲ့နေသည်..။ ရင်သားနှစ်မွှာက ပုံသွင်းထားသော ပန်းပုရုပ်နှယ် မကြီးလွန်း မသေး လွန်းပဲ ကြွားရွားကော့ပျံနေသည်..။ ခါးသေးသေးလေးက တင်ပါးကြီး လုပ်ရမ်းသွားလေတိုင်း ယိမ်းနွဲ့ ကျိုးကျသွားတော့မည့် အလား ညွှတ်သွယ် ပျော့ပျောင်းလွန်းသည်..။
တစ်ခါတစ်ရံ ထင်းဖြစ်စေ ၊ ပန်းကန်ခွက်ရောက်ဖြစ်စေ တစ်စုံတစ်ရာကို ကုန်းကောက်လိုက်သော အခါများတွင် လှစ်ခနဲ မြင် လိုက်ရသော ယောက်ျားတစ်ယောက်အဖို့ လှပ်ခနဲ ရင်ထဲလှိုက်ဖိုမောသွားစေသည်..။ စိတ်ထဲ၌ ဤအနေအထားမျိုး ကုန်းပြီး ဖြုတ် လိုက်ရလျင် ဆိုသော အတွေးကလဲ မဆိုင်းမတွကြီး ဝင်ရောက်လာအောင် ဆွဲဆောင်မု ရှိလွန်းသည်..။
ထိုမျှ ကြီးမားတင်းရင်းနေသော တင်ပါးကြီးကို ကောက်ညှင်းထုတ်တစ်ထုပ်လို ကျစ်လျစ်စွာ စုစည်းထားသော ထမီလေးအောက်မှ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး အရာက ထင်းနေပြန်သည်..။ ထိုဘောင်းဘီအရာလေးကို မြင်ရသည်ကပင် ခင်သက်မူသည် လွယ် လွယ်ကူကူ ရနိုင်သော မိန်းခလေးတစ်ယောက်မဟုတ်ကြောင်း ကိုလည်း ပုရိသတို့ ရိပ်စားမိကြလေသည်..။ ကိုသက်အောင် ကတော့ ခင်သက်မူ ဖင်ကို မကြည့်..။ ကြည့်ချင်စိတ် ဝင်လာသည့်တိုင်လည်း စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်..။ လူတစ်ချို့က ခင် သက်မူကို ကြည့်ရင်း ထမင်းစားရန် ရောက်လာကြခြင်း ဖြစ်သည်..။ ကိုသက်အောင်ကတော့ အဝစား ငါးကျပ်ဆိုသည်ကို သဘောကျလို့ ဖြစ်သည်..။
ယခုတလော ထမင်းဆိုင်ဖက် မရောက်ဖြစ်ပြန်…။ ဘုန်းကြီးလမ်း အရက်ဆိုင် တဝိုက်၌ ကိုသက်အောင် ရောနှောနေထိုင်တတ်နေ ပြန်သည်..။ စိတ်ထဲ၌ တစ်စုံတစ်ရာ လိုအပ်နေသလို ခံစားလာရသဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းသော ပစ္စည်းမျိုးကို ရှာဖွေနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်..။ “ သူ့နာမယ်က ခင်ရီတဲ့….ကြက်သွန်ရောင်းတယ်..အစ်ကို…ဈေးတော့ နည်းနည်း ပိုပေးရတယ်…၊ သူ့ယောက်ျား အလစ်မှာ လုပ်တာ…၊ အန္တရယ်တော့ ကင်းတယ်…” “ ဟာကွာ….ယောက်ျားကြီးနဲ့…တော့ မလုပ်ချင်ဘူး…ကွာ….”
“ တခြားဆော်တွေလည်း ကျနော် မသိဘူး အစ်ကို….” သို့နှင့် ကိုသက်အောင် ခင်ရီနှင့် တွေ့ဖြစ်ကြသည်..။ ကိုသက်အောင်က သူ့ ကို အကဲခပ်သလို သူကလဲ ကိုသက်အောင်ကို အကဲခပ်သည်..။ နှစ်ယောက်သား စဥ့်အိုးတန်း ဗော့တံတားထိပ် အထွက်ပေါက်ရှိ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်မှာ ဆုံမိကြသည်..။ “ ဒီကနေ့ ဘယ်သွားကြမှာလဲ…အစ်ကို….” “ အာ……မသိဘူးလေ….ကျုပ်က..အိမ် မရှိ ဘူး….” ခင်ရီက နုတ်ခမ်းလေးကို စူပစ်လိုက်သည်..။ မျက်မှောင်တွန့်ကွေးပြီး ခြေဆောင့်သလိုလေး ပြုလိုက်သေးသည်.။
“ အဲဒါဆို…..သူများက ဘယ်လိုက်ရမှာတဲ့လဲ…ညနေလဲ ဆိုင်က ပြန်ထွက်ရအုံးမှာ…စိတ်ညစ်လိုက်တာ…ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး….” ခင်ရီက ထိုသို့ညည်းလိုက်သည်နှင့် ကိုသက်အောင်က သူအမူအယာ ပြစ်ချွဲချွဲကို ကြည့်ကာ တောင်ပြီးသား လီးပင် ပြန်သေသွားရ သည်..။ “ ဒီလောက်လဲ စိတ်ညစ်ခံမနေနဲ့လေ…အချိန်မရလဲ…နေ……” “ အစ်ကို….ဟေ့…အစ်ကို..နေအုံးလေ….ဒီမှာ……” ကို သက်အောင် ပုခုံးကို ဆွဲရင်း ခင်ရီ ဟိုသည်ကြည့်ရင်း တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောလေသည်..။ “ မြန်မြန်လေး ပြီးချင်ရင်တော့ ဟို….ဆန် ဂိုဒေါင်နောက်မှာ ..တဲလေး ရှိတယ်…လုပ်မလား…ဟင်……” “ ဟာဗျာ….နေပစေတော့…..”
ကိုသက်အောင် အတော်စိတ်ပိန်သွားသည်..။ ဤမျှ စုတ်ပြတ်ပေကျံနေသော ပတ်ဝန်းကျင်၌ ဘယ်လို ဖီလင်လာမည်နည်း..။ ခင်ရီ ထပ်မံ မဆွဲမှီ…ကားလမ်းကို ဖြတ်ကူးခဲ့သည်..။ လူသွားလူလာ ရုပ်ထွေးနေသော ကမ်းနားလမ်းအတိုင်း ညောင်ပင်လေးဈေးသို့ ဖြတ်ကူးခဲ့သည်..။ “ အစ်ကို…..ဟေး….အစ်ကို…….” ခင်ရီ အမှတ်ဖြင့် ကိုသက်အောင် လှည့်မကြည့်..ခပ်သွက်သွက် လျှောက် သည်..။ အနောက်မှ တဖြတ်ဖြတ် ပြေးလိုက်လာသံကို ကြားရသည်..။ လက်မောင်းကိုလည်း တင်းတင်း ဆွဲယူခြင်း ခံလိုက်ရ သည်..။
“ အစ်ကိုက နားများလေးသလား မသိဘူး….ခေါ်လိုက်ရတာ….” “ ဟင်…..မခင်သက်မူ……..” မပြုမပြင် …နွမ်းနယ်မောဟိုက်စွာ ပြုံးနေသော အယဉ်မျက်နှာလေးကို နီးကပ်စွာ ရင်ဆိုင်လိုက်ရသည်..။ ကိုသက်အောင်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မိမှ ခင်သက်မူက ရှက်ရွံ့ စွာ လက်မောင်းကို လွှတ်သည်..။ “ အစ်ကို….ဘယ်သွားမလို့လဲ….ဟင်….” “ အော်…..ကိစ္စ တစ်ခု ရှိလို့ပါ….ခင်သက်မူ..ဘယ် လဲ…” “ ဒီနေ့….ဆိုင်ပိတ်တယ်လေ……လမ်းဘေး ဆိုင်တွေ လိုက်ရှင်းနေလို့…..”
“ အော်…….တစ်ခုခု စားပါအုံးလား….ခင်သက်မူ….” “ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ စားကြမယ်လေ….လာ……” ပလက်ဖောင်း အတွင်းဖက် ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ ဝင်ခဲ့ကြလေသည်..။ “ ဟာ…….အစ်ကိုတို့ အတွဲကို နေရာ ပေးပါ….. ဟေ့….” စားပွဲထိုးလေးက အော်နေကျ အသံ ..ထုံးစံအတိုင်း အော်လိုက်သော်လည်း ကိုသက်အောင် ရင်ထဲ နွေးခနဲ ဖြစ်သွားမိသည်..။ ခင်သက်မူ မျက်နှာလေးမှာလဲ ထွတ် ခနဲ ရဲသွားလေသည်..။
“ အုန်းနို့ နှစ်ပွဲ…ပေးပါ…….၊ အကြော်နှစ်ခုစီ ထည့်ပေးနော်…..“ ခင်သက်မူက အုန်းနို့ လှမ်းမှာရင်း ဆံပင်လေးများကို သပ်တင် လိုက်ရာ…ဗိုက်သားဝင်းဝင်းလေးများ လက်သွားလေသည်..။ ကြွားရွားသော ရင်လေးနှစ်မွှာမှာ လဲ ကြွတက်သွားသည်..။ တင်ပါး ကြီးအစုံကလည်း ဘေးနှစ်ဖက်သို့ ထိုင်ထားသော ခုံလေးမှ ဘေးသို့ လျှံကျနေလေသည်..။ “ အစ်ကို က စကားနည်းတယ် နော်….အဟင်း…….” “ အင်း….စကားသိပ်များတာ မတွေ့ဘူးသေးလို့ပါ…..” “ ဒါဖြင့် ပြောလေ…..စကားတွေ အများကြီး …အ ဟင်း ဟင်း…….” “ မပြောတော့ပါဘူး….ရင်ထဲမှာ ပြောပြောနေရတာ များလှပြီ…ဘယ်သူမှ မကြားပဲ ကိုယ့်ဖာသာ ပြောရတာ လွတ်လပ်တယ်….”
“ ဟောတော့….ကဗျာဆရာနဲ့ တိုးနေတာကိုး….” နှစ်ယောက်သား ကြိတ်ရယ်မိကြသည်..။ အော်….သည်လို ဆန့်ကျင်ဖက်လိင် တစ်ဦးနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် စကားပွဲလေးတွေ မဖွဲခဲ့ရတာ တောင် ကြာခဲ့ပြီပဲ….။ “ အစ်ကို…က အတွေးသမားလား….ဟင်…..” “ စား ဖို့အတွက်ပဲ တွေးနေနိုင်တဲ့ ဘဝပါ..မခင်သက်မူ…..” ခင်သက်မူ ငိုင်တွေသွားသလို ရှိသည်..။ သို့သော်ချက်ချင်း မျက်နှာကို တည် ပစ်လိုက်ပြီး ရောက်လာသော အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ပန်းကန်ကို ကိုသက်အောင်ရှေ့ ချပေးသည်..။ “ လေဒီ ဖတ်စ်လေ….ခင်သက်မူ အ ရင်ယူ……” “ အံမယ်…အစ်ကိုက အနောက်တိုင်း ဦးစားပေး စနစ်ကို လည်း နားလည်တာပဲ..နော်..”
ကိုသက်အောင်လည်း မခင်သက်မူ ကို အံ့အောလေးစားသွား၏…။ လမ်းဘေး ထမင်းဆိုင် စားပွဲထိုးပေ မယ့် အသုံးအနုံးက မြင့် သည်..။ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ စားနေစဉ်…. “ အစ်ကို ….ဘဲဥ ကြိုက်လား….” “ ကြိုက်တယ်….အဲ….စားလေ…ဘာဖြစ်လို့လဲ…မ ကြိုက်လို့လား……..” “ ခင်မူလဲ..ကြိုက်တာပဲ…ဒါပေမယ့် အစ်ကို့ကို ပေးတာ…..” လှိုက်ခနဲ ပီတိအတွေးလေး….နှလုံးသားကို ပြေးဆောင့်ပြန်သည်..။ ကိုသက်အောင် ခင်သက်မူ လက်ကလေးကို အုပ်ကိုင် လိုက်သည်..။ မရုန်းပဲ စကားတိုးတိုး ပြောသည်..။ “ လူတွေနဲ့လေ…..အစ်ကို…..” ကိုသက်အောင် ပျော်သွားသည်…။ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ စားပြီး လေးဘီးတစ်စီး ငှါးကာ ပုဇွန်တောင် အိမ်သို့ ခင်သက်မူကို ခေါ်လာခဲ့မိလေသည်..။ ခင်သက်မူကလဲ လိုက်လာရှာသည်..။
အိမ်သို့ရောက်လာသည်..။ တစ်အိမ်လုံး ရှင်းလင်းနေသည်..။ ပရိဘောဂ ဘာတစ်ခုမျှ မရှိ…။ “ ခင်မူ..တော့ မှားပြီ ထင် တယ်….အစ်ကို….” “ ဘာလဲ…အစ်ကို့ကို …….ငထောကြီး ထင်နေလို့လား…….” “ ဟင့်အင်း……..ဒါပြောတာ မဟုတ်ဖူး….အစ် ကို့အိမ်ထောင်သည်မ ရှိမှာပဲ ထင်နေတာ…..” “ ရှိတယ်လေ….ရှိပါတယ်….” “ ဟုတ်လား……ဘယ်သွားလဲ…ဟင်….” “ ဒီမှာ လေ…ထိုင်နေတာ……ဟောဒီမှာ……” “ အို့…..ဟိတ်…ကြည့်…တအားညှစ်တာပဲ….ကွာ………အို….” ဖျာလေးပေါ်သို့ ခင်သက်မူ လဲကျသွားသည်..။ ကိုသက်အောင် ချွန်းအုပ်ထားခဲ့သမျှသော ဆန္ဒအားအင်များ ကမ်းပြိုသလို ဒလဟော ပြိုဆင်းကျလာ တော့သည်..။
“ အို……ဒီ…အထိ….မဖြစ်သေးဘူး…..အစ်ကိုရယ်……..” ကိုသက်အောင် လူတစ်ကာတပ်မက် စွဲလန်းခဲ့ကြရသော ခင်သက်မူ ဖင် အိုးကြီးကို တအားခွပစ်လိုက်ပြီး ညှောင့်သည်..။ ခင်သက်မူ မျက်လုံးလေး ဝိုင်းပြီး ရုန်းကန်ရှာသည်..။ “ ရှစ်ကြီး ခိုးပါရဲ့ အစ်ကို ရယ်….မလုပ်ပါနဲ့ နော်…နော်……” ပါးမို့မို့လေးပေါ်မှ မိတ်ကပ်လေးများ ပြောင်စင်သွားအောင် ဖိနမ်းပစ်လိုက်သည်..။ လုံးတစ်နေ သော နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုလည်း ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုတ်ကိုင်ချေမွ သည်..။ “ အာ…..ဒုက္ခပဲ….အိုး..အစ်ကို….အစ်ကိုကလဲ ကွာ…….”
အော်သံ ငြီးသံလေးများ တိုးတိတ်ပျောက်ကွယ်သွားသည်..။ နွေးထွေးလုံးကျစ်နေသော ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့အပြား ကို မျက်နှာကြီး ဖိ ကပ်ပြီး နမ်းပစ်သည်..။ တရှူးရှူး တရှဲရှဲနှင့် မီးရထား စက်ခေါင်းကြီး တစ်ခုလို လေမုတ်သံ အသက်ရှူသံကြီးက ပြင်းထန်လာ သည်..။ ခင်သက်မူ လိုက်လာမိတာ မှားပြီ ဟုတွေးနေမိသည်..။ သို့သော် ခင်သက်မူ ရုန်းကန်ချင်စိတ် မရှိ…။ ဆုတ်ကိုင်ချေမွ ပွတ် သပ်ပေးနေသော အစ်ကို့ အယုအယလေးများကို သာယာနေသည်..။ အစ်ကို့လက်တစ်ဖက်က ခင်မူ့ ပေါင်ကြားကို ရွရွလေး ပွတ်သည်..။ ခင်မူ့ မျက်နှာလေး မော့သွားအောင် ကော့တက်သွားသည်..။
ထမီအောက်စကို လှန်တင်လိုက်သော အခါတွင်…..ခင်မူ ပြာပြာသလဲ လိုက်ဖိသေးသည်..။ သို့သော် ဖောင်းကားကြွစူနေသော စောက်ဖုတ်အုံကြီးက အထင်အရှား ပေါ်လာပြီ ဖြစ်သည်..။ အမြဲတမ်း ဝတ်နေကျ အောက်ခံဘောင်းဘီကလဲ ဒီနေ့မှ ဝတ်မလာခဲ့ မိ….။ ခင်မူ မျက်ရည်တွေ စို့လာပြီး ….. “ ခင်မူ့ကို သနားပါ….အစ်ကိုရယ်……ခင်မူလေ…..အ…အ…..” စောက်ဖုတ်ကြီးက အမွှေးသန်သန်ကြီးများ အောက်မှ လိုးချင်စရာ အဆီတဝင်းဝင်းကြီး ဖြစ်နေရာ….ကိုသက်အောင် က လျှာကြီးဖြင့် ထိုးကော် ယက် ပေးလိုက်သည်..။ ခင်မူ ထွန့်ထွန့်လူးသွားပြီး ပေါင်ကြီးနှစ်ဖက်မှာလည်း ဘေးသို့ ပြဲကားသွားရလေသည်..။
ခင်မူက အသားညိုလေရော့သလား မဆိုနိုင်..။ စောက်ဖုတ်လေးမှာ ခပ်ညိုညိုလေး…ပြူးထွက်နေသည်..။ စောက်ပတ် နုတ်ခမ်း သားကြီးများက လက်နှစ်လုံးခန့် ထိထူလိမ့်မည် ထင်သည်..။ အကွဲကြောင်းကြီးက နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကြီး မှန်း ထင်ပေါ်လွန်းလှ သည်..။ လျှာနှင့် ယက်ပေးလိုက်တိုင်း စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဖားဂုံညှင်းကျောကုန်းလို ဖောင်းဖောင်းပြီး ကြွရွတက်လာလေသည်..။ လေထိုးပေးလိုက်သလား ထင်ရလောက်အောင် မြန်ဆန်လွန်းလှသည်..။
စောက်ဖုတ် ….ဤသို့ တဖြေးဖြေး ဖောင်းကားလာသည်ကိုလည်း ကိုသက်အောင် ခင်မူ ကျမှ မြင်ဖူးခြင်း ဖြစ်သည်..။ လီးကြီးက အစွမ်းကုန် တောင်နေပြီးသားမို့ ခင်မူ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ သို့ တေ့သွင်းကာ အသာအယာလေး ဖိလိုးချလိုက်လေတော့သည်..။ “ အ……အစ်ကို………………” ခင်မူ ကျောလေးကော့သွားကာ ဆီးခုံလေး မောက်တက်သွားအောင် ခါးကို ကြွတက်ပေးလိုက်လေ သည်..။ လီးကြီးက စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ ထိထိမိမိကြီး ဆောင့်လိုးချလိုက်ပြန်သည်..။ “ အ……အား…….အစ်ကို ရယ်…..အင်း..အင်း…..” နုတ်ခမ်းလေးကို ပြတ်ထွက်လုမတတ် ကိုက်ထားသော ခင်မူ့မျက်နှာလေးမှာ ရုံ့မဲ့နေပြီး ဘေးသို့ စောင်းငဲ့ ကျနေချေသည်..။ ခင်မူ့ လက်နှစ်ဖက်က ကိုသက်အောင် ပေါင်ကို ကိုင်ထားမိသည်..။ ကိုသက်အောင်၏ သန်မာသော လက်မောင်း ကြီးအစုံက ဘရာစီယာလေးအောက်မှ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆွဲယူ ကိုင်ဆုတ်ထားသည်..။
ခင်မူ မျက်လုံးလေးများ မှတ်ထားရှာသည်..။ လည်ပင်း၌ ဆွဲထားသော လော့ကက်သီး ရွှေဆွဲကြိုးလေးက ကြမ်းပြင်သို့ တစ်ဝက်ပုံ ကျနေသည်..။ ခင်သက်မူ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ အားရစရာ ကောင်းလှသည်..။ စောက်ရေကြည်လေးများ ညှစ်ထွက်လာသော အခါတိုင်း …” ဗြစ်…ပြစ်…..” မြည်အောင် တင်းကြပ်နေသည်..။ သွေးကြောကြီးများ ဖောင်းကြွကာ အကြောပြိုင်းပြိုင်း ထနေ သော ကိုသက်အောင် တန်ဆာကြီးက အရေရွှဲနေသော ဧရာမ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ ပြွတ်ခနဲ ဆောင့်ဆောင့် ဝင်သွားတိုင်း စောက် ဖုတ်နုတ်ခမ်းသားလေးများ အတွင်းသို့ လိပ်ဝင်၍ ပါပါသွားသည်ကို ..ကိုသက်အောင် အသေအချာ ငုံ့ကြည့်ရင်း လိုးသည်..။ ခင် သက်မူ လက်ကလေးတစ်ဖက်က ဆီးခုံကို လာပြီး ဖုံးထားရှာသေးသည်..။
တစ်ခါတစ်ရံ လီးထိပ်ကြီးက ကျွံထွက်လာသောအခါ… နီလာလက်စွပ်လေး ဝတ်ထားသော လက်ဖမိုးလေးကို လီးထိပ်ကြီးက ထိုး မိသွားတတ်သည်..။ ထိုအခါ ခင်သက်မူက လက်ကို ကပျာကသီ ရုတ်ပြီး… လက်ခုံကို ထမီစဖြင့် ပွတ်သုတ်ပစ်တတ်သည်…။ “ ရွံ လို့လား…ခင်မူ…….” “ အို……ရွံတာပေါ့….ဟင့်…အ…….ကျွတ်ကျွတ်…..” “ အစ်ကိုက ယက်တောင် ယက်ပေးသေးတာပဲ… ကွယ်…….” “ အို……သွား..ဘာတွေ ပြောနေတာလဲ……. အား…….အား……..” “ ခင်မူ့ ဟာကြီးက …အကြီးကြီးပဲကွယ်…..အားရ လိုက်တာ….” “ အာ………သေတော့မှာပဲ…အစ်ကိုနော်…..အဟင့်…..” ခင်မူ ရှက်တတ်လွန်းသည်..။ ပါးပြင်လေးနှစ်ဖက် ရဲရဲနီ အောင် ပင် ငိုမဲ့မဲ့လေး ဖြစ်လာသည်..။ “ ခင်မူ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို အစ်ကို့လီးကြီး ဝင်တာ ခံလို့ ကောင်းလားဟင်…ခင်မူ… ဟေ့….ပြောလေ…..”
“ အင့်…..အင်း…အ…ဒီမှာ သေတော့မယ်….သူက ဘာတွေ လျှောက်မေးနေမှန်း …မသိဘူး..သွား….အ……အင်း အင်း……..” “ အဆုံးဝင်လား…..ဟင်…….ခင်မူ………..ထိရဲ့လား…..” “ အာ……..အင့်……သိဘူးကွာ…..မေးနဲ့……..အဟင့် ..အဟင့်……အ…….” “ စွတ်…..ပြွတ်….စွတ်..ပြွတ်…………ဖတ်…..ဖွတ်……” “ အ…..ဖြေးဖြေး..အစ်ကို…..အထဲက အောင့်တယ်….အ… အ………” ကိုသက်အောင် ပြီးချင်လာပြီမို့ ခင်မူ့ စကားကို နားမထောင်ပဲ ဒလကြမ်း မုန်တိုင်းတိုက်သလို ဆောင့်လိုးချလိုက် သည်…။
“ အား……အား……..အစ်ကိုး………အား……နာ…နာ တယ်…………အ..” “ ပြွတ်……ဖတ်…..ဖတ်………ပြွတ်……..ပြွတ်…… ပြွတ်…..စွတ်….“ “ ဟား…..တစ်မျိုးကြီးပဲ….အား………..အီး……အမလေး….” ပူနွေးသော ပြစ်ချွဲသော ညှီစို့သော အနံ့များဖြင့် ပွဲ စဉ်တစ်ကို ….ရပ်နားလိုက်ကြပြီး …တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ဖက်ထားရင်း အမောဖြေနေလိုက်ကြလေသည်..။
ကိုလေး…..ပုံ့ပုံ့လာသွားတယ်…….ကိုလေးနဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် အိမ်ရှေ့မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာ တွေ မကြည့်ရဲတာနဲ့ မတက်တော့ ဘူး..။ သားနှစ်ယောက်ကို ပုံ့ပုံ့ ခေါ်သွားတယ်…။ ပုံ့ပုံ့ ….အစ်ကိုလေးကို မျှော်နေမယ်……။ ညီမလေး…ပုံ့ပုံ့….။ ပြီးပါပြီ…..။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မငျးကွောငျ့ ဒါတှဖွေဈကုနျပွီ